[ထင်မြင်ချက်] Stallman မှအိုင်ဖုန်းနှင့်မှားယွင်းသောလွတ်လပ်ခွင့်များမှ Linux မှ
[ထင်မြင်ချက်] Stallman အကြောင်း၊ iPhone နှင့်မှားယွင်းသောလွတ်လပ်ခွင့်များ
Manuel Escudero | | အခြား
NOTA: ဒါကအမြင်အပိုင်းအစတစ်ခုပါ။ ၎င်း၏ရည်မှန်းချက်မှာမည်သည့်အရာကိုမဆိုပြသရန်မဟုတ်ပါ၊ ကျနော့်အမြင် ရပ်ရွာမှဘာသာရပ်အပေါ်။
ကျွန်ုပ်ဟာအသုံးပြုသူတစ် ဦး ပါ Fedora Linux ကို ထက်ပိုပြီးများအတွက်5အနှစ် နှင့်မကြာသေးမီကငါဖုန်းကိုပြောင်းလဲသွားတယ် android ဖုန်း အဘို့ iPhone ကို။ iPhone ကိုမိုဘိုင်းကိရိယာအဖြစ် (Linux သုံးစွဲသူအတွက်ပါ) ဂူးဂဲလ်၏ OS (အခြေခံများ၊ စမ်းသပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်မှုများ) ထက်မိုဘိုင်းကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်အဘယ်ကြောင့်ပိုကောင်းသည့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသင်သိလိုပါကကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်ဤသုံးသပ်ချက်ကိုဖတ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်ဖိတ်ကြားသည်။ မင်းရဲ့ခေါင်းကိုဘာတွေဖြတ်သန်းနိုင်မလဲ (ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးငါလုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်):
Android မှ iOS: လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတွေ့အကြုံ၏ Chronicle
ငါလိုပဲငါဟာ Linux သုံးစွဲသူတစ်ယောက်ဆိုရင် iDevice ကိုဝယ်ယူဖို့စဉ်းစားနေရင်ဒီမှာငါထားခဲ့ပါ una အလွန်ပြည့်စုံသောလမ်းညွှန် သင်၏ iDevice ကို Linux တွင်မည်သို့လုံးလုံးလျားလျားစီမံခန့်ခွဲရမည်ကိုငါလုပ်ခဲ့သည် iTunes ကိုအသုံးပြုရန်မလိုအပ်ပါ သို့မဟုတ်အခြားစီးပွားဖြစ်အတု / ဗိုင်းရတ်ဆော့ဖ်ဝဲ။ (သူငယ်ချင်းများကသူငယ်ချင်းများကို iTunes ကိုသုံးရန်ခွင့်မပြုသောကြောင့်)
Linux အောက်ရှိ iOS7ကိရိယာကိုဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲမလဲ။
ယခုဟုတ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Android မှ iOS သို့ပြောင်းလဲခဲ့သည့် အချိန်မှစ၍ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းရှိစိတ်ရှုပ်စရာကောင်းသောအသုံးပြုသူများသို့ပြောင်းလဲခဲ့သည် သူတို့ဂရုမစိုက်ခဲ့ဘူး ငါမနေ့ကသူတို့မနက်စာအတွက်ဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာသိဖို့ဂရုမစိုက်သလောက်
အများဆုံး geeks (နှင့်အကြောင်းကြား) သူတို့ကအပြောင်းအလဲကိုထောက်ခံခဲ့ကြသည် လူမှုကွန်ယက်များမှမှတ်ချက်များသည်၎င်းတို့အဘယ်ကြောင့်ဤသည်သည်အဘယ်ကြောင့်အပြုသဘောဖြစ်သနည်းဟူသောသူတို့၏အမြင်ကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည် switching နှင့်အခြားသူများကိုအခြားသူများ သူတို့သည်ကြောက်ရွံ့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ကြသည် Mac သို့ပြောင်းရန်4ကလူ သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုကြားသမျှထဲမှာအထိခိုက်မခံဆုံးမှတ်ချက်ပေးခဲ့တယ်။
အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲကိုထောက်ခံသော Linux အသုံးပြုသူတိုင်း iOS နှင့်ဝေးဝေးနေသင့်ပြီး Android ကိုအသုံးပြုသင့်သည်
ဒါကသူတို့မှတ်ချက်ပေးတဲ့မှတ်ချက်တချို့ကိုပြန်သတိရစေတယ် ယခင်ပို့စ်၌တည်၏ ငါဒီမှာထည့်သွင်း Linux မှ ငါအသုံးပြုသောကြောင့်အချို့သောအသုံးပြုသူများကတိုင်ကြားခဲ့ကြသည် (programming ကိုအကြောင်းကို) သူတော်ကောင်းတရား3ငါ၏အ screenshots များအတွက် (ပိတ်ထားသောအရင်းအမြစ်၏ "ကံမကောင်း" ထဲသို့ကျသောပရိုဂရမ်မာများအတွက်စာသားအယ်ဒီတာ) ။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ "ဒီလိုမဟုတ်ဘူး linux အကြောင်းဘလော့ဂ်မှာအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဖမ်းယူမှုများရှိသင့်တယ်" နှင့်အခြားမိုက်မဲသောအရာတစ်ထောင်နှင့်ပတ်သက်သည့်မှတ်ချက်အချို့ကိုဖြေကြားပြီးနောက်ငါမေးခွန်းများလည်းထွက်လာသည်။ ဒနနှင့် / သို့မဟုတ်နိုင်ငံရေး အခြေအနေဘယ်လိုလဲ:
တဖန် elav မှ +1 သို့ထပ်ထည့်သည်။ သင်မည်သည့်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်သည်၊ မည်မျှအသက်ကြီးသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော်အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုခုရှိပါကယခုအချိန်အထိမြင့်မားသောစာသားကို "ဆန့်ကျင်သော" လူသုံး ဦး သည် ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိသောဤ "ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှု" သည်ဆော့ (ဖ်) ဝဲလွတ်လပ်ခွင့် (သို့) ဘလော့ဂ်တစ်ခု၏အတွေးအခေါ်ထက်ကျော်လွန်သွားသည်။ စစ်မှန်သောလွတ်လပ်မှုသည်လူများ၏လွတ်လပ်မှုအပေါ်တွင်ကျသည်။ ဆော့ (ဖ်) ဝဲတစ်ခုကအခမဲ့ (သို့) မရလို့ကျွန်တော်လွတ်လပ်စွာရွေးပိုင်ခွင့်ကိုဆုံးရှုံးသင့်တယ်။ ဒါက coke လိုပါပဲ ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူတိုင်းကဆိုးတယ်၊ သင်သည်သူတို့၏မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများစာမျက်နှာသို့သွားပါကလူများသည်“ X ဓာတုဗေဒဆိုတာဘာလဲ။ ဒါကကင်ဆာဖြစ်စေတာလား။ သူတို့အဖြေကသင်ဖြေရှင်းရမယ့်အရာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စာဖတ်ခြင်းဟာ "ပိတ်ထားသောအရင်းအမြစ်" ဖြစ်လို့ပျော်ရွှင်တဲ့ဆိုဒါထုတ်လုပ်ဖို့ဖန်တီးထားတဲ့ဓာတုဒြပ်ပေါင်းအသစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရပြီးစစ်မှန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်မရနိုင်ဘူး။ မည်သို့ဆိုစေလူတစ် ဦး ကိုလွတ်လပ်စေခြင်း၊ တိုင်းပြည်တစ်ခုလွတ်လပ်ခြင်း၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလွတ်လပ်ခြင်းသည်သင်၏အချိုရည်ကိုမည်သည့်ကုန်ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်သည်၊ မပြုလုပ်သည်ကိုသင်သိသည်မဟုတ်သည်။ သင်၏စစ်မှန်သောလွတ်လပ်မှုကိုတစ်နေ့တာအတွက်အမှန်တကယ်လျှော့ချလိမ့်မည် သင်တစ်ခုခုမလုပ်နိုင်သောကိုကာကိုလာ (သို့မဟုတ်အခြားအရာများစွာကိုလုပ်လို) သည်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်မရွေးချယ်နိုင်သည့်နေရာ။ လူ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုကန့်သတ်သော“ အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲ” အတွေးအခေါ်သည်အမှန်တကယ်အခမဲ့မဟုတ်ပါ၊
အသုံးပြုသူတစ် ဦး မှဤ "တောက်ပသော" မှတ်ချက်ကိုတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။
RIchard Stallman ၏အဆိုအရ၎င်းသည်လွတ်လပ်မှုမဟုတ်ပါ။
ဤကိစ္စတွင် Sublime စာသားကိုအသုံးပြုသူမှမထိန်းချုပ်ပါ။ သူတော်ကောင်းတရားသည်သင့်ကိုထိန်းချုပ်သည်၊ ၎င်းသည်ကျင့်ဝတ်နှင့်ညီသောကြောင့်၎င်းကိုအသုံးမပြုသင့်ပါ။
ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကို "Defender of free software" ဟုခေါ်ကြသည့် Linuxeros အများစုသည်သူတို့၏ပါးစပ်မှစကားပြောကြသည်ကိုသတိပြုမိသည်။ နက်ဖြန်နေ့၌ Microsoft အနေဖြင့် Office အတွက် Linux ကိုမနက်ဖြန်ဖွင့်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင် Linuxers အများစုသည်၎င်းတို့ကို Linux ပေါ်တွင် install လုပ်ပြီးအချိန်ကြာမြင့်စွာတွင် LIbreoffice ကိုမေ့သွားလိမ့်မည်ဟုငါအာမခံသည်။ အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရလျှင် Linuxeros သည် software အမြောက်အများကို Linux အတွက်ရရှိနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်အခမဲ့သို့မဟုတ်အခမဲ့ဖြစ်သည်ဆိုပါစို့။
@Julio: ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်နှစ်ချက်ကိုပြောခဲ့တယ်။ စတင်ရန်: Stallman ကပြောကြားသည်။ ကျွန်ုပ်၏ယူမှတ်ချက်မှာ - ကျွန်ုပ်သည်လွတ်လပ်မှုကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုအခြားသူတစ် ဦး ၏ပါးစပ်မှအဘယ်ကြောင့်ထုတ်ယူသင့်သနည်း။ ငါတို့ကိုဘာကြောင့်လုပ်သင့်တာလဲ။ ထိုအခါသင်သည်သင်၏ Impose Options ကိုပြောပြီးအခြားသူ၏ပါးစပ်မှလွတ်လပ်မှုကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ရန်စတင်ပြောဆိုသည်။ ၎င်းသည်သင်ဤရည်ရွယ်ချက်၏သဘောတရားနှင့်ကိုက်ညီသောကြောင့်သင်တမင်တကာထောက်ပံ့သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်သူ့ဟာသူနှင့်ဆန့်ကျင်သောအပြုအမူတစ်ခုဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်မှုဆိုတာဘာလဲ ပြီးတော့မင်းရဲ့ဘဝကိုလုံးလုံးလျားလျားထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့မင်းပြောလိုက်တယ်ငါ Stallman လိုလူတွေပြောတာတွေရှိပေမယ့်ငါဟာငါ့အတွက်ငါအမြဲတမ်းအသုံးပြုဖို့လိုချင်တဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုဆုံးဖြတ်တယ် (သူတို့မှာထားတာတွေအပေါ်မှာအခြေခံတာမဟုတ်ဘူး) ငါ့ကိုလွတ်လပ်စွာမျက်နှာဖုံးနောက်ကွယ်မှာထားခဲ့ခြင်း) (သို့) ၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ မှားယွင်းသောအတွေးအခေါ်ကို အခြေခံ၍၊ လွတ်လပ်မှုသည်သင်အတိအကျပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊ သင်နှင့်သင်အကျိုးအတွက်မည်သည့်အရာများမဆိုသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေ၊ မဖြစ်စေ၊ အရာ stallman ပါဘူး။
1 စစ်မှန်တဲ့လွတ်လပ်မှု VS. အယောင်ဆောင်ပြီးလွတ်လပ်ခွင့်
2.1 iPhone ကပိုပြီးအခမဲ့လား။
2.2 Android၊ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ?
2.3 အပြီးသတ် ...
စစ်မှန်တဲ့လွတ်လပ်မှု VS. အယောင်ဆောင်ပြီးလွတ်လပ်ခွင့်
နောက်ဆုံးမှတ်ချက်မှာဒီဟာကအရေးကြီးတယ် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်အခမဲ့ဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်၏လွတ်လပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုအခြားသူတစ် ဦး ၏ပါးစပ်မှအဘယ်ကြောင့်ထုတ်ယူသင့်သနည်း မနေ့ကငါဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ဖတ်နေခဲ့သည် ပန်းသီး အပေါ် iPhone လွတ်လပ်ခွင့်အလွန်ပျော်ရွှင်သောအိုင်ဖုန်းသုံးစွဲသူကပြောသော ထိတ်လန့်ခြင်း ထိုသခင်သည်ငါတို့၏ဘုန်းအသရေဖြစ်တော်မူ၏။ အခြေခံအားဖြင့်ဤသို့ဆိုသည် -
iPhone ကငါ့ကိုပိုပြီးလွတ်လပ်စေတယ်၊ ​​ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါ့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်အားလုံးကိုချပြီးအရာရာတိုင်းအတွက်အချိန်ပိုများတယ်၊ ငါ့ရဲ့ပစ္စည်းပစ္စယတွေအကြောင်းစိတ်မပူပါနဲ့။ ဒါကြောင့်ငါကပိုပြီးလွတ်လပ်တယ်။
အဲဒီလိုလူတွေကိုနားထောင်တာ (ဒါမှမဟုတ် android ကပိုလို့ကောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူလိုမျိုးပေါ့) ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက free ပဲ။ ငါအမြင်သို့မဟုတ်ဘာမှတစ် ဦး အမြင်သို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုချမှတ်ရန်မလိုချင်ကြဘူး, ဒါပေမယ့်ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရငါတခါတရံတွင်, ယုံကြည်သည်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းဖော်ပြချင်ပါတယ် လွတ်လပ်မှုကိုသဘောမကျဘူး.
ထိုကဲ့သို့သောရှုပ်ထွေးသောပြissueနာဖြစ်သောကြောင့်“ လွတ်လပ်မှုသည် X (သို့) Y” ဖြစ်သည်ဟုပြောရန်ခဲယဉ်းသည်။
သင်၏ဘ ၀ နှင့်သင့်တွေးခေါ်ပုံကိုမည်သူ့ကိုမျှမထိန်းချုပ်ပါနှင့်။
ပြproductနာက၊ အကယ်၍ သင်သည် Apple ထုတ်ကုန်တစ်ခုကိုဝယ်လျှင်၊ (ဥပမာ) သင်က Apple ကိုပေးနေသည်၊ သင် FSF ၏စကားလုံးကိုကြေငြာပြီး gNewSense GNU / Linux ကိုအသုံးပြုလျှင်၎င်းသည်မှန်ကန်သည်ဟုယုံကြည်သောကြောင့်၎င်းကိုသင်ပေးနေသည်။ Stallman ရန် ဝိရောဓိ, မှန်သလော မိုက်မဲတယ်.
လူကြီးလူကောင်း, လွတ်လပ်မှု မလိမ်ဘူး ငါတို့လိုချင်တာကိုလုပ်ဖို့ "လွတ်လပ်မှု" ပိုရဖို့အတွက်ငါတို့အတွက်ဘဝပိုလွယ်အောင်လုပ်ပေးသူတစ်ယောက်ယောက် မလိမ်ပါဘူး ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတဲ့ထုတ်ကုန်များနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲအားလုံးရဲ့လက်မတိုင်းသည်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာသေချာစေရန်အရာအားလုံးကိုသိရန် "လွတ်လပ်မှု" ရှိသည်။
လွတ်လပ်မှုကိုယူနိုင်ခြင်း၌တည်ရှိသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်များ, (မည်သည့်ဖုန်းနှင့်ဝယ်လိုသည်သို့မဟုတ်သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မည်သည့် OS အသုံးပြုလိုသည်ကဲ့သို့) ဖြင့် ကိုယ်ပိုင်ခံယူချက်X သို့မဟုတ် Y ကုမ္ပဏီသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကောင်းသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဥာဏ်တစ်ခုရောင်းချသည်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ကလွတ်လပ်မှုကိုထောက်ပံ့သည်ဖြစ်စေ၊ မလုပ်သည်ဖြစ်စေအရူး X သို့မဟုတ် Y ကပြောသည်ကိုအခြေခံခြင်းမဟုတ်ပါ။
ငါသူတို့လိုအပ်သမျှသောသဘောတူသည် ဒါဟာဦးဆောင်ဖြစ်ပါသည်နင့်ကိုငါချစ်တယ်နင့်ကိုငါချစ်တယ် ခေါင်းဆောင်တွေမလိုအပ်ပါဘူးကောင်းပြီ, သင်ကိုယ်တိုင်ရှိသည်။
NOTA: ဆောင်းပါး၏ဤအပိုင်းကိုမစတင်မီကျွန်ုပ်ရှင်းလင်းလိုသည်မှာ - Stallman က Apple သည်မကောင်းဟုပြောသောကြောင့်လွတ်လပ်မှုကိုယုံကြည်သောသုံးစွဲသူအတွက် Android ကိုအသုံးပြုခြင်းကဲ့သို့သောမှတ်ချက်တစ်ခုပေးသောမည်သည့် troll ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တစ်ကြိမ်ပြောခဲ့သည် တကယ်လို့ Stallman စတိုင် "လွတ်လပ်မှုကို" မင်းတကယ်ကိုယုံကြည်ခဲ့မယ်ဆိုရင်၊ fuck ဆိုတဲ့ဆဲလ်ဖုန်းကိုတောင်သုံးမှာမဟုတ်ဘူး။ သူကသူတို့ကိုအသုံးမပါဘူး။ ရိုးရှင်းပါတယ် ငါဒီမှာငါပြောသွားမယ့်အရာနှစ်ခုလုံး၏လည်ပတ်မှုစနစ်များ၏ (အပိုဘာမှတပ်ဆင်သို့မဟုတ် jailbreak သို့မဟုတ် rooting ကဲ့သို့သောလုပ်ငန်းစဉ်များလုပ်နေစရာမလိုဘဲ) လုံးဝ vanilla ပြည်နယ်အတွက် iOS နှင့် Android ၏အခြေခံနှိုင်းယှဉ်ရည်ညွှန်းရည်ညွှန်းကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းချင်တယ်။
ငါကိုယ်တိုင် ဟုတ်ကဲ့၊ iPhone အတွက်မည်သည့် Android ထက်မဆို "ပိုမိုလွတ်လပ်သော" ကိရိယာတစ်ခု။ ပြီးတော့သူရဲ့နယ်ပယ်ပြင်ပမှာ "ပိတ်ထားတဲ့အရင်းအမြစ်" (မကြာခင်မှာငါဟာ android ဆိုတာနဲ့သိပ်မဝေးသေးပါ ငါ့ဆောင်းပါး ဒီ post ရဲ့အစမှာချိတ်ဆက်ထား) အသုံးပြုသူကိုပေးသည်.
စာမျက်နှာ ၆၀ ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစာချုပ်များကိုအီးမေးလ်ဖြင့်ပို့ရန်သင့်အားရွေးချယ်ခွင့်ပေးသည့်အချက်က၎င်းတို့အားဖတ်ရန်လက်ခံခြင်းကိုမနှိပ်မီ။ တကယ်ပဲ သင့်ကွန်ပျူတာမှအဆင်ပြေစွာနှင့်သင်ကြည့်ရှုနေသည့်အရာအားလုံးကိုစိတ်ကူးတစ်ခုပေးပါ။ (ဂူဂဲလ်၏ "ninja နည်းဗျူဟာများ" နှင့်ပုံနှိပ်စာလုံးငယ်များနှင့်လည်းကောင်း၊ အဆင့်တိုင်းနှင့်ပေါ့ပေါ့ဆဆနှိပ်စက်မှုကိုမျက်ခြည်မပြတ်သောအတင်းအဓမ္မ "Google+ နှင့်ပူးပေါင်းရန်သဘောတူ") နှင့်ဆန့်ကျင်သည်။ သင်ရွေးချယ်နိုင်သည့်အချက်ကို ဖြတ်၍ သွားသည် ဘယ်လိုသတိပေးချက်မျိုး သင့်အားလျှောက်လွှာ (သို့) အချက်အလက်များပေးပို့သည် (သို့မဟုတ်သင့်ကိုမပို့ပါ) ခွင့်ပြုချက်ကိုပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်ပါ သူတို့ထဲက (သင်ထင်သောသူတို့ကို deactivating ထိုးဖောက်).
လုပ်ဆောင်ချက်များကိုရှိခြင်းအပြင် filter တစ်ခုမမှတ်မိအောင်လိုလို ကြော်ငြာပံ့ပိုးထားသည့်အက်ပ်များအတွင်းတွင်ခြေရာခံခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်ကိုအသာပုတ်။ သက်ဝင်နိုင်သည့်ဖုန်းအဆင့်တွင်။
၎င်းတွင်ခလုတ်တစ်ခုပါရှိသည် လျှို့ဝှက်ဖြစ်စဉ်များကို disable "nosy" အက်ပလီကေးရှင်းများ (ဥပမာ - လည်ပတ်မှုစနစ်နှစ်ခုလုံးတွင်နောက်ခံရှိ geolocation လုပ်ဆောင်ချက်များရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်သင်အမြဲတမ်းဘယ်မှာရှိသည်ကိုသိရှိရန်လိုအပ်ပါကဒေတာချိတ်ဆက်မှုနှင့်အတူအလိုအလျောက်သက်ဝင်စေနိုင်သည်)၊ သင်မြင်သည့်နေရာတိုင်း၌ခွင့်ပြုပါ အသုံးပြုသူသည်မီလီမီတာတိကျမှုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိန်းချုပ်သည်, အားလုံးသည်ထိပုတ်ပါ၊ သင်၏လက်ချောင်းထိပ်ဖျားများအားလုံးတွင်ရရှိနိုင်သည့်လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုစီ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုအတွေ့အကြုံမရှိသေးသောအသုံးပြုသူပင်နားလည်နိုင်ရန်ရှင်းပြခဲ့သည်။
Android တွင်သင် (အနည်းဆုံး application များ၊ ROMs နှင့် root ကဲ့သို့သောပြင်ပအရာများမပါဘဲ) မလုပ်နိုင်ပါ။ ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုချက်ခွင့်ပြုချက်၊ ဖုန်းအဆင့်တွင် filter ကိုမခြေရာခံခြင်းနှင့်နောက်ကွယ်ရှိလျှို့ဝှက် OnDemand ခြေရာခံခြင်းလုပ်ငန်းများကိုပိတ်ထားပါ။ (ဥပမာအားဖြင့်ကိုးကားခြင်းအတွက်နောက်ဆုံးနှင့်ဆင်တူသည်နောက်ခံအချက်အလက်အသွားအလာကိုပိတ်ခြင်းနှင့်၎င်းသည် Play Store ကိုအလုပ်မလုပ်ဘဲထွက်ခွာရန်ဖြစ်သည်။ )
ဤအရာအားလုံး (ပေါင်းငါလုပ်သောအခြားအချက်များ) ဤဆောင်ပါး ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘလော့ဂ်အတွင်း၌မေးခွန်းမေးပါ။ ပိုပြီးလွတ်လပ်ခွင့်ဘယ်မှာရှိလဲ။ အသုံးပြုသူသည်မိမိ၏စက်ကိရိယာကို (iOS ကဲ့သို့) (သို့) android ဂေဟစနစ်တွင်အသာပုတ်ခြင်းထက်ပိုမိုသောအရာများကိုလုပ်စရာမလိုဘဲမိမိ၏စက်ပစ္စည်းကိုအမြင့်ဆုံး (သေချာစွာ) ထိန်းချုပ်ခြင်းအားဖြင့်သူလိုချင်သည်သို့မဟုတ်မလိုချင်သည်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ အဆင်ပြေပါတယ်၊ သင် root လုပ်တယ်၊ launcher ကိုလဲပြောင်းလိုက်ရင် ROM blah blah blah ကိုပြောင်းလိုက်ပြီ၊
ကျနော့်အမြင်မှာ ဒါကတကယ့်လွတ်လပ်မှုပဲ သူဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးဖုန်း၏ဂေဟစနစ်နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုအသုံးပြုသူအတွက်၎င်းသည်မြင့်မားသောအဆင့်အထိဖြစ်သည် android သည်အများဆုံးအမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ်ကဲ့သို့ဖြစ်သည် “ ကြည့်စမ်း၊ ဒီနေရာကနေဒီအတားအဆီးတွေကိုဖြတ်သန်းပြီးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နိုင်တယ် (မြေပုံပြတယ်) ။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုအောင်မြင်ဖို့ escapism ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမယ်။ ”
ဒါ့အပြင်သုံးစွဲသူတစ်ယောက်ကိုအမှန်တကယ် "လွတ်မြောက်စေဖို့" ကအနည်းဆုံးသင်ယူရမယ်ဆိုတာပါပဲ။
Bootloader ကိုသော့ဖွင့်ပါ (သင်အော်ပရေတာနှင့်ချိတ်ဆက်လျှင်ငွေကုန်ကြေးကျများပြီးခက်ခဲသည်)
အခြား ROM တစ်ခုကို Install လုပ်ပါ
Karma မပါဘဲဤအရာသုံးခု (ဆိုလိုသည်မှာသင့်ဖုန်းကိုမပိတ်ဘဲ) အဲဒီလွတ်လပ်မှုလား။ ငါတော့မထင်ဘူး။ iOS မှာအချက်လည်းရှိတယ် ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်မရှိတော့ပါ လုပ်ဖို့ရှိသည် jailbreak လွတ်လပ်ခွင့်အတွက် Android ဖုန်းများပိုမိုလိုအပ်လာသောအခါaRooting အသုံးဝင်သော။
အဘယ်ကြောင့်ဤမျှဖြစ်သင့်သနည်း android အသုံးပြုသူများအတွက်မမျှတပါ။ သွားကြရအောင်! အခမဲ့ fuck ဆိုတဲ့ဆော့ဖ်ဝဲပရောဂျက်ကိုအခြေခံထားတယ်။ Google, ထုတ်လုပ်သူများနှင့်အော်ပရေတာများကကမ်းလှမ်းသင့်သည် ပိုပြီးအစစ်အမှန်လွတ်လပ်မှုကို လူများနှင့်၎င်းတို့၏စက်ပစ္စည်းအတွင်းရှိ escapism ကျွမ်းကျင်သူများ (ဤစက်ဝိုင်းထဲမှများစွာသော powerusers များ) ကိုအာရုံမစိုက်ပါ။
ငါအရမ်းနှောင့်ယှက်သောပြcနာကိုးကားခြင်းအားဖြင့်ဤဆောင်းပါးကိုအဆုံးသတ်ပါမည်။ Google က "Android ဟာ Linux ကိုအခြေခံတဲ့အခမဲ့လည်ပတ်ရေးစနစ်တစ်ခု" လို့ပြောတာကြောင့် Linux သုံးစွဲသူအတော်များများဟာ Android ကိုသွားဖို့လုပ်တဲ့အရာတွေထဲကတစ်ခုပါပဲ Android ကိုသုံးသင့်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကလွတ်လပ်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်။ "
သငျသညျပိုပြီးမှားမဖြစ်နိုင်ပါ။ အပြင်ဘက် Linux kernel (ကျွန်ုပ်သည် TiVoization နှင့်အခြားအရာများကိုခွင့်ပြုသည့် v2 ကိုကျွန်ုပ်မမှားပါက GPL မူကွဲများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်) အခြား android system သည် Apache လိုင်စင် (သို့မဟုတ်အခြားကိစ္စရပ်များတွင်အလားတူအရာ) အောက်တွင်ရှိပြီးအသုံးပြုမှုကိုမြှင့်တင်သည်။ ဤအရာများ၏ OS ကိုများအတွက်တီထွင်သောအခါ
ဒီလိုင်စင်ကလိုင်စင်ပါ စာချုပ်အဆင့်မှာတကယ်ကိုအခမဲ့ (copyleft မပါဘဲ) အခြေခံအားဖြင့် code ကိုလက်ခံသူအားအတင်းအကျပ်တစ်ခုခုလုပ်ရန်အတင်းအကျပ်မပြုခိုင်းပါ (ဥပမာ - GPL ကဲ့သို့သောအရာများမှအလိုအလျှောက်လုပ်ဆောင်မှုများသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်) ။ ၎င်းသည်ဤလိုင်စင်အရတီထွင်ထားသောဆော့ (ဖ်) ဝဲအားလုံးကိုအသုံးပြုရန်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပမာတစ်ခုပေးရအောင် -
Juan perezပရိုဂရမ်မာသူသည် Android အတွက်ထင်ရှားသောဆော့ဝဲလ်အပိုင်းတစ်ခုကိုရေးပြီး၎င်းလိုင်စင်အမျိုးအစား (lax, non-copyleft) အောက်တွင်ဖြန့်ပါ။
ယခု Google သင် code ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ယူနိုင်သည်၊ တိုးတက်အောင်လုပ်ပြီးအခြားအရာများအကြားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လိုက်ဖက်သည် ပိတ်ထားသောအရင်းအမြစ် သင့်ရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများနှင့်ရပ်ရွာမှတိုးတက်မှုများကိုမျှဝေခြင်းမရှိဘဲ
ဤ "တရား ၀ င်ထောင်ချောက်" သည် (၎င်းသည်မဟုတ်ပါ) ဆော့ဖ်ဝဲ၏လွတ်လပ်ခွင့်အပေါ်ချမှတ်ထားသောပြည်သူတို့၏လွတ်လပ်မှုနှင့်ပင်ဖြစ်သည် ငါသူ့ကိုထောကျပံ့ပေးသို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်သည်ကိုသတိမပြုသင့်ပါဟုဆိုလိုနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်အန်ဒရွိုက်၏အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းများကိုအသိုင်းအ ၀ ိုင်းမှဝှက်ထားရန်ခွင့်ပြုပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ OS X နှင့် Operating System တစ်ခုအနေဖြင့် BSD နှင့်ဆက်နွယ်မှုရှိသည်။
BSD kernel ကိုသုံးခြင်းအားဖြင့် (BSD လိုင်စင်အောက်တွင်ထုတ်ဝေသည်) Apple သင်၏တိုးမြှင့်မှုများကို BSD system developer community နှင့်မျှဝေရန်မလိုအပ်ပါ ကောင်းပါပြီ အဘယ်အရာကိုမျှပြန်လည်ပေးဆပ်ခြင်းမရှိဘဲရပ်ရွာအသိုင်းအ ၀ ိုင်းမှပြုလုပ်သောတိုးတက်မှုများအားလုံးကို၎င်းင်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်လည်ပတ်ရေးစနစ်များနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းမရှိခြင်း၏။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ (ငါပြောခဲ့သကဲ့သို့) ဤလိုင်စင်များကိုသယ်ဆောင်သောဆော့ (ဖ်) ဝဲ (BSD, MIT, Apache နှင့်စသည်တို့) သည်စစ်မှန်သောအခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲဖြစ်သည် (ကျွန်ုပ်သာမကဤဖော်ပြချက်သည်ကမ္ဘာအနှံ့အတွေးအခေါ်တစ်ခုလုံးဟုယူမှတ်သည်) ကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ပရိုဂရမ်မာများ၏ကိုယ်ပိုင်အကျိုးစီးပွားများနှင့်အတ္တများကင်းကင်း (ပိုမိုစတင်သည့်) ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုထောက်ခံသည် ၎င်း၏အသုံးပြုသူများ၏လွတ်လပ်ခွင့်သည် သူ့ကိုယ်ပိုင်ထက် (နှင့်ဒါကြောင့်ဖြစ်သင့်သည် အခမဲ့လူများမရှိမရှိ အခမဲ့ဆော့ဝဲသောငါ၏အမြင်)
ကျွန်တော့်ကို Android အတွက်ပြနာက "GNU Super fans" လို့ခံစားရပေမယ့်ဒီ software အမျိုးအစားကိုတောင်မှနားမလည်တဲ့သုံးစွဲသူတချို့ရှိနေလို့ပါ။ အမှန်တကယ်အခမဲ့ Open source program များ၏ကြီးထွားမှုကိုအတင်းအဓမ္မမြှင့်တင်မည့်အစား (အခမဲ့ဖြစ်သောလွတ်လပ်သော GPL ကဲ့သို့သော GPL အတင်းအကျပ်ထုတ်လုပ်မှုကဲ့သို့သော copyleft လိုင်စင်များအရပရိုဂရမ်များအနေဖြင့် Stallman သို့မဟုတ် FSF ၏အဓိကအယူအဆအဖြစ်ဖော်ပြသောအခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်း) အသုံးပြုသူများ၏လွတ်လပ်ခွင့်အတွက်ရပ်ရွာလူထုကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ တံခါးပိတ်ဖြစ်ထွန်းမှုများကိုဖွင့်ပေးသည်။ Stallman ကြိုက်သည်မဟုတ်လား။
ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်အားဆောင်းပါး၏အဓိကအချက်သို့ပြန်ပို့ပေးသည် - သင်သည်တစ်စုံတစ်ခုကိုခုခံကာကွယ်မည်ဆိုပါက၎င်းကိုပြုလုပ်ပါ ကိုယ်ပိုင်ခံယူချက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခြားတစ်ယောက်ယောက်ကသင့်ကိုအကြံဥာဏ်တစ်ခုပေးလိုက်လို့မဟုတ်ဘဲသင်မှန်သည်ဟုသင်ယုံကြည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်အရေးအကြီးဆုံးအချက်မှာအသိပေးခြင်းနှင့်စံနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ သူတို့ပြောသမျှကိုမယုံပါနှင့်။ Find.
အခြားသူတို့၏ချည်နှောင်ခြင်းမှလွတ်ကင်းပါစေ။ မင်းအတွက်စဉ်းစားပါ။ သမ္မာကျမ်းစာက (ငါဘာသာရေးအရသော်လည်းကောင်း၊ မည်သည့်အရာမှသော်လည်းကောင်းထိုအဖြစ်အပျက်ကိုသိသည်။ ) ပရောဖက်အတုအယောင်ရောက်လာပြီးသူသည်ကယ်တင်ရှင်နှင့်ဗြဟ္မလာဖြစ်သည်ဟုပြောသကဲ့သို့လွတ်လပ်သောပရောဖက်အတုအယောင်များသည်ဤနေရာတွင်ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါဓာတ်ပုံ (Richard Stallman) မှလူသည်သင်၏လွတ်လပ်မှုကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုပြောပြသူမည်သူမဆိုဖြစ်သည် အဲဒါမမှန်ကန်ပါ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ (ဒါမှမဟုတ်သူယုံကြည်တဲ့သူတစ်ယောက်) ထင်တာမဟုတ်ဘူး။ သင်၏အတွင်း၌လွတ်လပ်မှုကိုသာရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုတစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့မချ၊ သင့်ရဲ့အသိပေးစံအပေါ်အခြေခံပြီး ထိုအခါသင်သည်လွတ်လိမ့်မည် ...
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အခြား » [ထင်မြင်ချက်] Stallman အကြောင်း၊ iPhone နှင့်မှားယွင်းသောလွတ်လပ်ခွင့်များ
282 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
Uff, ဒီနေရာမှာတစ်ယောက်ယောက်က Android နဲ့ပြseriousနာအကြီးအကျယ်ရှိတယ် ..။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဆောင်းပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်သင်လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသော်လည်း iOS နဲ့သင် Android ထက်ပိုလွတ်လပ်တယ်လို့မထင်ပါဘူး။ တကယ်လို့သင်ဟာဆော့ (ဖ်) ဝဲရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုလိုချင်ရင် FirefoxOS ကအသင့်တော်ဆုံးပဲလို့ငါထင်တယ်။
ငါအမြဲတမ်းပြောခဲ့တာတွေက FirefoxOS ကိုယုံကြည်မှုအများကြီးရှိတယ်လို့ပြောပြီးသင်ပြောတာကိုသဘောတူတယ်။ Android-iOS လွတ်လပ်ခွင့်areaရိယာ မှလွဲ၍ iOS ထုတ်ကုန်ဖြင့်သင်ပိုမိုလွတ်လပ်မှုရှိသည်ဟုအဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၊ Android ကိုသုံးသည်ထက်အသုံးပြုသူ) ပြနာက firefoxOS ဟာအထူးဆောင်းပါးဖြစ်လို့ဆောင်းပါးထဲမှာမလာပါဘူး။
အိုင်ဖုန်းထွက်လာတဲ့အခါမှာ Apple ဟာထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အပြင်ပထမဆုံးပစ္စည်းလည်းဖြစ်တာကြောင့်စျေးကြီးခဲ့ပါတယ်။ နှိုင်းယှဉ်မှုသိပ်မရှိလှတဲ့အပြင်ဒီပရောဂျက်တွေဖြစ်တဲ့ (ယနေ့တိုင်လည်း) အခြားစံချိန်စံညွှန်းများသတ်မှတ်ထားသည်။ android ။ အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ Android ထွက်လာတဲ့အခါမှာတရားမျှတမှုမရှိဘဲနဲ့အရမ်းဈေးကြီးတယ်။ (အနည်းဆုံးမက္ကဆီကိုသို့ရောက်ရှိလာသည့်ပထမ ဦး ဆုံးဆိပ်ကမ်းများမှာ) ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော specs များ၊ အလွန်ခေတ်မမီတော့သော android (နှင့်ငါပြောခဲ့သည့်အတိုင်းပင်စမ်းသပ်ဆဲပင်) နှင့်စျေးကြီးသောဖုန်းများ။ အရည်အသွေးကိုကူးယူမည့်အစားနှိုင်းယှဉ်ရန် iPhone ရှိခြင်းတောင်မှ၎င်းတို့သည်ယုတ္တိဗေဒအားနိမ့်သောဈေးနှုန်းဖြင့်ကူးယူလိုခြင်းဖြစ်သည် - "လူတွေက iPhone အတွက်အများကြီးပေးဆပ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကစမတ်ဖုန်းတစ်လုံးအတွက်လုပ်ပေးလိမ့်မယ်" FirefoxOS ထွက်သည့်အခါနိမ့်ဖုန်းများနှင့်သင်လိုချင်သည့်အရာအားလုံးကိုစမ်းသပ်မှုတစ်ခုအောက်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အသေးစိတ်နှစ်ခုရှိသည်။
၁) သူတို့အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ သူတို့ဟာ android ဟောင်းထက်အများကြီးပိုကောင်းတယ်။
ပြwithနာကဒီအရည်အသွေးတွေကို firefoxOS ကပရောဂျက်တစ်ခုတည်းကြောင့်လား၊ ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့စျေးကွက်တွေအရမ်းတိုးတက်လာလို့မိုဘိုင်း operating system ကိုမစတင်မီစိတ်ကူးတစ်ခုရဖို့ပိုလွယ်ကူတာလားဆိုတာကိုခွဲခြားရန်ခက်ခဲသည်။ အကယ်၍ FirefoxOS သည်စျေးပေါလျှင်၎င်းသည်လူတို့အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးအပ်ရန်အကြံဥာဏ်အရမွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်သောကြောင့်သို့မဟုတ် (သို့) စမတ်ဖုန်းများ ၀ ယ်ယူခြင်းသည်နေ့စဉ်အတွက်နေ့စဉ်အရာဖြစ်သောကြောင့်ပြောရန်ခက်ခဲသည်။ နှင့်ပစ္စည်းများပိုမိုစျေးပေါသည် (နှင့်ငါတို့မြင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကင်ပိန်း, ငါတို့ဖြစ်ရပ်မှန်များမသိကြပါ) ။
ဒါကြောင့်ဒီဆောင်းပါးမှာ firefoxOS ပါဝင်မှုဟာငါ့အတွက်မမျှတဘူး၊ ဒါကြောင့်မလိုအပ်ခဲ့ဘူး။ (ဒီမှာငါ့နိုင်ငံမှာဒီပလက်ဖောင်းနဲ့အနိမ့်ဆုံးဖုန်းတွေသာရှိတယ်၊ အဲဒါကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်မတန်ဘူး။ ) ထိုမှတပါး၎င်းတို့ကို ၀ ယ်ရန်မသင့်တော်ပါ။ သို့သော်သင်ကဲ့သို့ FirefoxOS သည်ဆော့ဖ်ဝဲလ်အဆင့်၏ ၃ အဆင့်တွင်အခမဲ့သောရွေးချယ်မှုဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ (ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ) ၎င်းသည်လူတို့၏ပလက်ဖောင်းဖြစ်ရန်အလားအလာအများဆုံးရှိသည်ဟုယုံကြည်သည်။ FirefoxOS တွင် rooting / jailbreak နှင့်တူညီသောအရာတစ်ခုခုရှိမရှိကျွန်ုပ်မသိပါ (ကျွန်ုပ်ကိုယ်ပိုင်တရားဝင်သိရန် terminal များ၏ terminal ကိုကျွန်ုပ်မသုံးခဲ့ပါ); ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်မှာစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတဲ့ခန့်မှန်းချက်တစ်ခုကတော့
သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် iOS7သို့ Jailbreak ကိုလိုအပ်သည့်အရာအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းကိုရပ်တန့်ရန် iOS XNUMX ကိုရယူရန်လိုအပ်သော်လည်း (Android အများစုတွင် rooting လုပ်ရန်အမြဲလိုအပ်သည်။ ) FirefoxOS တွင်ကျွန်ုပ်တို့၌တိုက်ရိုက် analog တစ်ခုရှိသည်ဟုမထင်ပါနှင့်။ မည်သည့်နေ့၌မဆိုလိုအပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ (အကယ်၍ ရှိပြီးသားဖြစ်ပါကမည်မျှထူးဆန်းသည်) သို့သော်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ထိုအရာကိုပင်မကြားရသေးပါ။ ၎င်းသည်အစကတည်းကပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်အခမဲ့သုံးစွဲသူများမည်သို့ခံစားရပုံနှင့် firefoxOS သည်အရာရာကိုမှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်နေခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးအခက်အခဲများစွာရှိသည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်အကောင့်ထဲသို့တစ်ခုခုယူရန်ရှိသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်အသုံးပြုချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်နဲ့လွတ်လပ်ခွင့်အားလုံးပိုင်ဆိုင်ထားတာမှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒါကသင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။
iPod တွေကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်၊ touch မကိုင်တဲ့ဗားရှင်းဟောင်းကိုငါဆိုလိုတယ်။ ငါသူတို့စျေးကွက်ထဲရှိဂီတကိုနားထောင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးသောကိရိယာများဖြစ်သည်ဟုထင်သည်။ သို့သော်ပုဂ္ဂလိကဆော့ဝဲလ်ရှိသော်လည်းအက်ပဲလ်သည် iPhone နှင့်နောက်ဆုံးပေါ်အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ဖြစ်ပျက်လျှင်သင်၏စက်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ။
သတိပြုရမည်မှာသူတို့သည် Android နှင့်အခြားမည်သည့်စနစ်တွင်မဆိုအလားတူလုပ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် FFOS သည်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းထက် ပိုမို၍ ပွင့်လင်းသောကြောင့်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ play မှပါဝင်လာသည်။
ဒီအချက်နဲ့အတူငါမင်းကိုပြောချင်တယ်၊ မင်း iPhone ကိုအသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်တောင်းပန်စရာမလိုဘူး၊ ရှင်းပြဖို့မလိုပါ။ ဒါပေမယ့် Android လောကမှာစျေးသက်သက်သာသာနဲ့ပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်စရာတွေရှိတယ်လို့ငါပြောတယ်။ all) ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သော HTC ONE, Moto G, Moto X, Samsung Galaxy S4, Nexus5စသည်တို့ဖြစ်သည်။
Jolla၊ Ubuntu ဖုန်း၊ Sailfish တို့ရှေ့တွင်အဘယ်အရာဖြစ်မည်ကိုမပြောသင့်ပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်တစ်ခုခုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်အသုံးပြုချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်နဲ့လွတ်လပ်ခွင့်အားလုံးပိုင်ဆိုင်ထားတာမှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒါကသင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ »
ဒါကကျွန်တော်အရင်မှတ်ချက်တွေထဲမှာဆိုလိုတာပါ။ xDDD ကိုနောက်ဆုံးတော့သဘောတူတယ်။
"သတိပြုရမည်မှာသူတို့သည် Android နှင့်အခြားမည်သည့်စနစ်တွင်မဆိုအလားတူလုပ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် FFOS သည်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း" ပိုမိုပွင့်လင်းသည် "ဖြစ်သောကြောင့်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ to မှပါဝင်လာသည်။
၎င်းသည် "ပိုမို၍ ပွင့်လင်း" သောပြmanufacturersနာသည်ထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့်စက်ပစ္စည်းနှင့်သုံးစွဲသူများအပေါ်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုကိုပေးသည်။ စိတ်ကူးသည်၎င်းသည်အခမဲ့ဖြစ်ရန်အသုံးပြုသူများကိုထိန်းချုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
“ မင်းလိုချင်တာကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ရင်မင်းကိုလွတ်မြောက်စေမှာမဟုတ်ဘူး” ဆိုတဲ့အချက်ကိုမင်းထင်မြင်ချက်မှားနေတယ်၊ ဒါပေမယ့်လူတိုင်းကမတူကွဲပြားတဲ့အတွေးတွေကြောင့်ဒီအကြောင်းတွေငါမပြောတော့ဘူး။ ယခုကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်၌ရှိသည့် iPhone သည်သူငယ်ချင်းဆီမှလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်ကို၎င်းကိုချန်ထားခဲ့ရပါသည်။ သို့သော် "စျေးသက်သက်သာသာသာသာသော" ရွေးချယ်စရာများရှိလျှင်သော်၎င်းဤ iPhone မှကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ယခုကျွန်ုပ်ကျွန်ုပ်လက်မခံပါ။ အခြားမည်သည့်ပစ္စည်းကိုမဆို ၀ ယ်ယူရန်စဉ်းစားပါ။ တကယ်တော့၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ ၀ ယ်ယူနိုင်စွမ်းကခွင့်ပြုသည်ကိုသိသောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်သည် iPhone6သို့ထွက်သွားသည်နှင့်မကြာမီအဆင့်မြှင့်ရန်စီစဉ်ထားသည်။ "(သင်မည်မျှပင်ပေးဆပ်စေကာမူ၊ ကျွန်ုပ်အတွက်အရေးကြီးသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စရပ်ဖြစ်သည်။ သင်ဖော်ပြခဲ့သော ANDROID terminal တွင်အဘယ်သူမျှကာကွယ်မှုအလွှာများနှင့် iPhone သည်ဤအပိုင်းတွင်ဖော်ပြထားသောထိန်းချုပ်မှုအဆင့်အတန်းမရှိခြင်း)" android ထဲရှိ application များ၏ခွင့်ပြုချက်ကိုကျွန်ုပ်ပြောင်းလဲနိုင်သည့်အခါ (ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောပုံများဖယ်ရှားခြင်း) သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏ device ကို rooting၊ flashing သို့မဟုတ်ဘာမှမရှိဘဲ tap နှင့်လုံးဝ encrypt လုပ်နိုင်သည့်နေ့တွင် android ကိုမတူညီသောမျက်လုံးများဖြင့်ကြည့်ရှုပါမည်။ အဆင့်တစ်ခုပြီးသွားရင် iOS ကမ်းလှမ်းတဲ့အရာအားလုံးပျောက်နေပြီ။ FFos အကြောင်းကျွန်တော်အရင်ဖြေခဲ့တဲ့အတိုင်းငါဆောင်းပါး၏နှိုင်းယှဉ်မှုနှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်ကျွန်ုပ်ထပ်ထည့်ရန်စကားလုံးများမရှိပါ။
ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းကသင့်ကိုလွတ်မြောက်စေသည်။ ဒါက Elav ဆိုလိုတာကငါမှတ်ချက်တွေမှာမင်းကိုငါပြောခဲ့တာပဲ။
အကယ်၍ သင်သည် privacy ကိုအမှန်တကယ်ဂရုစိုက်ပါက iPhone ကိုမသုံးသင့်ပါ။ Android ကိုဝယ်ယူခြင်းဖြင့်၎င်းကိုလှည့်ပြီး ROM ကောင်းတစ်ခုထားခြင်းကပိုကောင်းသည်။
တကယ်တော့ Manuel၊ အကယ်၍ သင်သည်အမြစ်မရှိ၊ flash မလုပ်ဘူးဆိုရင်သင်ပြောတာကိုမလုပ်နိူင်သော်လည်းကျေးဇူးလည်းရှိတယ်။ သင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်၊ iPhone ကသင့်ကိုလုပ်ခွင့်မပြုပါ။ ဖုန်းလားမင်းလား မင်းအဖြေသိပြီထင်တယ်
Android, သင်စိတ်ကူးနိုင်သည့်အကောင်းဆုံး ROM များတောင်မှမဟုတ်ဘဲ၊ စီးပွားဖြစ်စနစ်များအကြောင်းပြောပါက iPhone ထက် privacy ကို ပို၍ ဂရုစိုက်သည်။ Blackphone ကိုဘေးဖယ်ထားကြစို့၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါက privacy ကိုမျက်နှာသာပေးတယ်။ ဒါ့အပြင်မင်းကမနက်ဖြန်သေဆုံးနိုင်တဲ့အမျိုးအစားပဲ။ ငါဂရုမစိုက်ဘူး။ ဘာကြောင့်မတူညီတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့အတူတူပဲအပြန်အလှန်အဖြေပေးနေတယ်ဆိုတာငါမသိဘူး၊ အကယ်လို့သင်ကမေးခွန်းတစ်ခုတည်းကိုပဲအမြဲတမ်းမေးနေမယ်ဆိုရင်သင်အမြဲတမ်းတူညီတဲ့အဖြေရလိမ့်မယ်။
သင်ဘာပဲပြောပြောငါစဉ်းစားနေတဲ့အရာကိုပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူး၊ ငါဟာ iPhone တစ်ခုရနိုင်ပြီးရွေးလိုက်တာလည်းမရှိဘူး။
@iDiot: လွတ်လပ်မှုကိုမဝယ်ဘူး၊ သင် android ကိုလွတ်လပ်စွာခံစားရလျှင်သင်သည်သင်ရှိပြီးသားဖြစ်ပြီးပျော်ရွှင်ပြီးအဆင်သင့်ဖြစ်လျှင်၎င်းသည်အရေးကြီးသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ သင်၌ငွေ မရှိ၍ စမတ်ဖုန်းတွင်လွတ်လပ်မှုရှိလိုပါကသင်၏အကောင်းဆုံးရိုက်ချက်မှာ FirefoxOS ဖုန်းဖြစ်သည်။
“ မင်းလိုချင်တာကိုဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းကမင်းကိုမလွတ်မြောက်စေဘူး” ဆိုတဲ့အချက်ကိုမင်းမှားတယ်မဟုတ်လား El Elav ကိုငါသဘောတူတယ် ဒါပေမယ့်လူတိုင်းကမတူကြဘူးထင်လို့လား။ »
၁။ သင်သည်ငြင်းခုံခြင်းမပြုပါက (ထိုကဲ့သို့သောငြင်းဆိုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏တရားမျှတမှုကိုပေးအပ်ပါ)၊ ၎င်းကိုအဘယ်ကြောင့်ဖော်ပြသနည်း။ တ ဦး တည်းထင်မြင်ချက်, ဤကိစ္စတွင်အတွက်အခြားအကြောင်းပြချက်မျှတမှုမရှိဘဲငြင်းပယ်အချည်းနှီးဖြစ်၏။
၂။ ထင်မြင်ချက်ဆိုသည်မှာတစ်ခုချင်းစီ၏အမြင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်ထင်မြင်ချက်သည်သင်၏ထင်မြင်ချက်များသည်အဓိပ္ပာယ်မရှိသောနေရာတွင်အခြားသူ၏ထင်မြင်ချက်ကိုသင်တန်ဖိုးသတ်မှတ်သည့်အချိန်တွင်ဖြစ်သည်။
@Alejandro - ကျွန်ုပ်၏လွတ်လပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်မှားသည်ဖြစ်စေမှားသည်ဖြစ်စေသူသည်ကျူးဘားတွင်ရှိနေပြီးမက္ကဆီကိုတွင်ရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် @elav နှင့်ငြင်းခုံရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကကျနော့်ထက်လွတ်လပ်ခွင့်ပိုနည်းတယ်၊ ဤနေရာတွင်ဖြစ်ပျက်နိုင်သည့်အရာနှစ်ခုရှိသည်။ သူသည်လွတ်လပ်မှုကိုအမှန်တကယ်မည်သည်ကိုမသိသည်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်နားမလည်နိုင်သည့်အတိုင်းအတာအထိသူတန်ဖိုးထားသည်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြည့်အစုံကွဲပြားသောကမ္ဘာများ၌ရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့သောကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများအောက်တွင်သင်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းသင်“ ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း” မပြုလုပ်နိုင်ပါ၊ အဓိပ္ပါယ်မရှိပါ။
@Manuel Escudero, မင်းရဲ့တရားမျှတမှုဆိုတာပထ ၀ ီအနေအထားအရကွာခြားမှုလား။ ဒါကမင်းရဲ့တရားမျှတမှုလား။ ပြီးတော့မင်းတို့ငါ့ကိုသူတို့ကမတူကွဲပြားတဲ့ "လောက" မှာနေထိုင်ကြောင်းစာလုံးကြီးတွေနဲ့ရေးထားသလား။ သင်မက္ကစီကိုမှာအခု Martian ဘာတွေလုပ်နေလဲ
မိခင်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်လုပ်ပါ စကားမစပ်, မင်းရဲ့ iPhone ကို, ဂုဏ်ပြုလွှာ, ငါတို့ရှိသမျှအဘို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ပျက်သောအရာ။
@Elav ကျေးဇူးပြု၍ စာမျက်နှာ၏အရည်အသွေးကိုမလျှော့ပါနှင့်။
စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်ကြည့်ပါ၊ ငါမင်းရဲ့စာသားအားလုံးကိုဖတ်နေပေမဲ့မှတ်ချက်တွေကိုကြည့်ဖို့မင်းဆင်းသွားတော့မင်းငါ့ကိုစိတ်ထိခိုက်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်။ သန့်ရှင်းသောဘောလုံးကိုသင့်ရဲ့လွတ်လပ်မှုနှင့်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုပြောပါ၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာတစ်ခုတည်းသောစစ်မှန်တဲ့စစ်မှန်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျန်အပိုင်းကတော့အမှိုက်ဖြစ်တယ်၊ အဲဒါဟာရွေးချယ်နိုင်သည့်စွမ်းအားဖြစ်တယ်၊ ငါဆိုလိုတာကငါ့ကိုငါ့ကိုမျက်နှာဒါမှမဟုတ်မြည်းမှာရိုက်ကူးဖို့ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသလား။
ဒါပေမယ့်စျေးပေါတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကကျွန်တော့်ကိုမှားယွင်းစေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး၊ ကျူးဘားမှာသူတို့ဟာမက္ကဆီကိုလိုရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာလိမ်လည်မှုကတဆင့်အုပ်ချုပ်တဲ့တိုင်းပြည်မှာထက်လွတ်လပ်မှုပိုနည်းတယ်လို့ပြောတာကမှားတယ်။ ဥပမာစပိန်နိုင်ငံတွင်လူ ဦး ရေ၏သုံးပုံတစ်ပုံသည်ဆင်းရဲမွဲတေမှုနှင့်ကျူးဘားတွင်ရှိနေသည်ဟုအန်ဂျီအိုများအဆိုအရ ၂၀၁၄/၁၅ တွင်ပပျောက်သွားမည်ဟုဆိုသည်။ ဒီနေရာမှာစပိန်မှာလူတွေကိုသူတို့ရဲ့အိမ်ကနေနှင်ချလိုက်တယ်။ လိုအပ်ရင်ကလေးတွေကိုအိမ်ရှင်ဆီခေါ်သွားတယ်။
ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆန္ဒမဲ ၄၈% ဖြင့်အကြွင်းမဲ့အများစုအုပ်ချုပ်သောပါတီတစ်ခုမှအာဏာရှင်စနစ်တွင်ရှိစဉ်အခြေအနေသို့ ဦး တည်စေသောပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုပြုလုပ်သည်။
ကောင်းပြီ, ငါခေါင်းစဉ်ကိုချွတ်တယ်။ သင်ကပြည်နယ်တစ်ခုလိုချင်တဲ့သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုပေးတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကပိုင်ဆိုင်တဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းနဲ့ပိုမိုလွတ်လပ်ခွင့်ရှိသည်ဟုပြောပါ၊ ၎င်းသည်မိုဘိုင်းအတွက်တည်ရှိသည်ကိုတွေ့ရှိပါကကင်မရာသို့မဟုတ်အသံဖမ်းစက်ကိုပိတ်ထားနိုင်သည့်ယန္တရားတစ်ခုကိုတီထွင်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဆန္ဒပြမှုတစ်ခုမှာလွတ်လပ်မှုမဟုတ်ပါ။ မင်းကမိုဘိုင်းကို root လုပ်ဖို့လိုပြီလို့ပြောပြီးခွင့်လွှတ်ပါ ဦး ။ ဒီမှာစပိန်နိုင်ငံမှာမိုဘိုင်းဖုန်းတွေကိုဖြန့်ချိရမယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကန့်သတ်မထားနိုင်ဘူး။ ၎င်းတို့ကိုလွတ်မြောက်စေရန်အတွက်သူတို့သည်ယူရို ၁၀ မှ ၂၅ အတွင်းတရားမ ၀ င်သောကုဒ်နံပါတ်ကိုသာတောင်းခံရန်လိုအပ်သည်။ ဤဥပမာကိုကြည့်ပါ။
လွတ်လပ်မှုကိုရွေးချယ်ခွင့်နှင့်ရောထွေး။ အခြားသူများ၏ထင်မြင်ချက်ကိုလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟုသင်ရှုတ်ချသည်။ ကျွန်ုပ်သည်လူတစ် ဦး ၏လွတ်လပ်မှုကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့် ဆို၍ သုံးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်သည်ပျင်းရိသူဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုမစဉ်းစားကြောင်းဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ သင်ပြောသည့်အတိုင်းပင်ဤနေရာတွင်မှတ်ချက်ပေးသူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှသင့်ကဲ့သို့ထင်မြင်ချက်မပေးနိုင်ပါ၊
ပြီးတော့ငါသိတဲ့ sublimetext ကိုသုံးတဲ့အခါမှာငါနဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတာမင်းသိတယ်။ နောက်ကွယ်မှကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏သုံးစွဲသူများကိုအခြားလူများစွာထက် ပိုမို၍ လေးစားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသော application အတွက်အလွန်အကျွံဈေးမကြီးသောကြောင့်ငွေပေးချေမှုသည်ရွေးချယ်စရာမရှိ၊ လိမ်လည်မှုလည်းမရှိပါ။
@O_Pixote_O: သင်၏မှတ်ချက်သည်ရောထွေးနေသောအတွေးအခေါ်များရော၊ သင့် ဦး ခေါင်းသို့ရုတ်တရက်ရောက်လာသည်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်မသိသောအရာများကိုရောနှောထားသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်ဖြေရန်အရေးကြီးသည် -
A) သင်မှန်ပါသည်၊ @ eavav ၏လွတ်လပ်မှုကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှာမှားယွင်းကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်ရေကြောင်းသွားသောအခါပထ ၀ ီအနေအထားအရကွဲပြားခြားနားမှုကိုနားလည်သဘောပေါက်သောအခါပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ မက္ကဆီကိုနှင့်ကျူးဘားနှင့် ပတ်သက်၍ မူမက္ကဆီကိုသည်သင်လိုချင်သောသူမည်သူမဆိုအုပ်ချုပ်သည်ဆိုသော်လည်းကျူးဘားတွင်လွတ်လပ်မှုများစွာရှိသည်။ (သို့မဟုတ်သင်မြင်လျှင်ကန့်သတ်ချက်များစွာရှိသည်) ကျွန်ုပ်မည်မျှဖြစ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ ဥပမာအားဖြင့်၊ တိုင်းပြည်မှထွက်ခွာရန် (သို့) အမေရိကန်ကဲ့သို့သောနိုင်ငံသို့ပြန်သွားရန် (မကြာသေးမီကစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်မရှိသလောက်နည်းသောဥပမာတစ်ခုပေးရန်) သို့သော်ပွတ်တိုက်မှုတစ်ခုသာရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်မြင်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူကျူးဘားတွင်အမေရိကန်ဂီတအဖွဲ့များမှဖျော်ဖြေပွဲများကိုသူတို့မရရှိကြသည်။ (Audioslave မှနောက်ဆုံးသူမှာငါထင်သကဲ့သို့နောက်ဆုံး) ။ သူ့ဟာသူတွင်၎င်းသည်၎င်း၏အုပ်စိုးရှင်များက "ကမ္ဘာနှင့် ပို၍ နီးစပ်သော" နိုင်ငံဖြစ်သည်။ သူတို့သည်အင်တာနက်သုံးစွဲမှုနည်းပါးသည်။ သူ့ဟာသူပြောရလျှင်မည်သူ့ကိုမျှစာရင်းမသွင်းဘဲ“ သူတို့လိုချင်တာကိုလုပ်ဖို့” စွမ်းရည်ပိုနည်းသောကြောင့် "ဒါကမက္ကဆီကိုထက်လွတ်လပ်မှုနည်းတယ်" ဟုဖြစ်သည်။ "ကျူးဘားတွင်မလုပ်နိုင်သောအရာများ" (နှင့်အပြန်အလှန်မက္ကဆီကိုအတွက်) ကို Google အမြန်ရှာဖွေရုံဖြင့်ကျွန်ုပ်၏အမြင်ကိုသဘောပေါက်ပါလိမ့်မည်။ (ဒီနေရာမှာမက္ကဆီကိုမှာအနောက်တိုင်းတရားဝင်မှုအတွက်သင်လုပ်နိုင်သမျှလုပ်နိုင်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုအပျော်အပါးမသတ်နိုင်သော်လည်း၊ သင်သည်ထောင်မှလွတ်မြောက်ပြီး၊ ရာဇ ၀ တ်မှုအဖြစ်မှတ်ယူခြင်းမခံရလျှင်၊ မင်းကိုဖမ်းပါဒီမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာနေတဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းဟာဟားခါးဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားငါတို့ဒီမှာလွတ်လပ်ခွင့်အခွင့်အရေးရှိတယ်။ ဒါကြောင့်ငါဥပမာများစွာပေးနိုင်ပေမယ့်ငါကအကောင်းဆုံးလူတစ် ဦး မဟုတျပါဘူး။
"မင်းကိုပြည်နယ်တစ်ခုလိုချင်တဲ့သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုပေးတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ပိုလွတ်လပ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုပါစို့ ... "
နိုင်ငံအားလုံးမှကုမ္ပဏီများအားလုံး၊ မည်သည့်စက်မှုလုပ်ငန်းကိုမဆိုသင်လိုချင်သော (၄ င်းတို့၏ဖောက်သည်များနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းထားသည့်) မည်သည့်လုပ်ငန်းကိုမဆိုသူတို့က“ သူတို့လိုချင်သည့်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုပြည်နယ်တစ်ခုသို့ပေးသည်။ ” အထူးသဖြင့် "သုညဗဟုသုတ" ရှိသူ၊ သို့မဟုတ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအချက်များမရှိသောသူများ မှလွဲ၍ မည်သည့်နိုင်ငံတွင်မဆိုအရည်အချင်းပြည့်မီသောလိုအပ်ချက်များ (သင်သည်သင်သည် "အကျိုးစီးပွားစိတ်ဝင်စားသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်") မှသင့်အားသတင်းအချက်အလက်မပေးသောမည်သည့်နိုင်ငံတွင်မှကုမ္ပဏီမရှိပါ။ ပြည်နယ်ရန်။ ၎င်းသည်နိုင်ငံအားလုံးနှင့်ကုမ္ပဏီအားလုံးတွင်ဖြစ်ပျက်နိုင်သော်လည်း၊ သင်သည်“ အရေးကြီးသောပစ်မှတ်” အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရမှသာမဟုတ်ပါကသင်၏သနားစရာဘဝသည်ပြည်နယ်အားရှုတ်ချစရာမဟုတ်ပါ။
C) နိုင်ငံအားလုံးရှိ "မိုဘိုင်းသော့ဖွင့်ခြင်း" တွင်အော်ပရေတာကိုသင်မေးနိုင်သည်။ သို့သော်တစ်ခုမှာ root လုပ်ဖို့ဖြစ်သည်၊ နောက်တစ်ခုကဖြန့်ရန်ဖြစ်သည်၊ နောက်တစ်ခုကတော့ bootloader ကိုသော့ဖွင့်ရန်နှင့် ROM တစ်ခုထည့်ရန်ဖြစ်သည်။ သင်သည်၎င်းကိုသော့ဖွင့်ရန် (၂၅) ယူရိုကိုပေးချေသည် (သို့မဟုတ်သူတို့ကသင့်ကိုရောင်းပေးသည်) ဟူသောအချက်သည်ဖုန်းသည်အမြစ်တွယ်နေသည် (သို့မဟုတ် bootloader သော့ဖွင့်ခြင်းတို့ဖြင့်) ကိုအခြားတပ်ဆင်လိုပါကသင်သည်ဤလုပ်ငန်းစဉ်များကိုလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည် သင်၏ဖြန့်ချိ android အပေါ် ROM ကို။ ဖြန့်ချိလိုက်သောမိုဘိုင်းသည်မည်သည့်အော်ပရေတာနှင့်မဆိုအသုံးပြုနိုင်သည့်မိုဘိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်ပြီး၎င်းသည် bootloader ကိုသော့ဖွင့်နိုင်သည် (“ ချည်ထားသော” မိုဘိုင်းဖုန်းများတွင်ဤရွေးစရာမရှိသေးပါ၊ အကယ်၍ သင်သည် hardware အဆင့်တွင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်းလုပ်ရန်သင်ငွေပေးချေရမည်။ မင်းရဲ့အော်ပရေတာငါမလွှတ်ချင်ဘူး။ )
D) @elav am သို့ရောက်သောမှတ်ချက်ကိုကျွန်ုပ်ပြန်ပြောသည့်လိုင်း၏အပြင်ဘက်တွင်မည်သည့်နေရာ၌မဆိုကျွန်ုပ်သည်ဤနေရာတွင်ပြောဆိုသူများအားရှုတ်ချသည်။
Elihu ariza ဟုသူကပြောသည်
ခင်ဗျားရဲ့ဆောင်းပါးကိုကျွန်တော်တကယ်သဘောကျတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကစိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်စိတ်ကူးမရှိဘဲနဲ့မင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပြရုံသာမကသင်ပြောတာကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသဘောတူတယ်၊ လွတ်လပ်မှုမှာကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့လုပ်ရပ်တွေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပါဝင်တယ်၊ ပြီးတော့ Firefox OS ခေါင်းစဉ်ကိုကောင်းကောင်းလာနိုင်လို့ဖြစ်တယ်။ , ကျွန်ုပ်သည် Android ကိုယ်နှိုက်ထက်ပိုပြီးနှစ်သက်သည် (အဓိကအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးလက်ရှိကိုဆန့်ကျင်လိုသောကြောင့်)၊ Firefox OS တွင်စနစ်ကိုအမြစ်တွယ်ပုံနှင့်ပတ်သက်သောသင်ခန်းစာများရှိပြီးသားဖြစ်သည်။ Firefox OS တွင်၎င်းစနစ်သည်အသုံးပြုသူများအတွက်အဆင်ပြေစေရုံသာမကပြင်ဆင်မှုများကိုပြုလုပ်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် (nonsense ကြားတွင်တေးဂီတကိုဖုန်းမြည်သံအဖြစ်ထားခြင်း) စနစ်သို့ parameters များကိုပြောင်းလဲခြင်းသည်ရိုးရှင်းပါသည်။ ဆောင်းပါးအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသလိုပဲ
Elihu Ariza အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်၏ပို့စာတွင်စာရေးသူမှကျွန်ုပ်ရရှိသောဆောင်းပါးများကိုစစ်ထုတ်ရန်နည်းလမ်းမရှိသလား။ ဤကဲ့သို့သောရယ်စရာကောင်းသောဆောင်းပါးများကိုကျွန်မမတွေ့လိုတော့ပါ။ Feedly မှဆိုဒ်တစ်ခုလုံးကိုဖယ်ရှားရန်မလိုတော့ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Feedly ထဲထည့်ပါ https://blog.desdelinux.net/author/
Bravo! အခြားသူများရဲ့ရွေးချယ်မှုနှင့်အတွေးအခေါ်များမည်သို့ပင်ရှိစေကာမူလွတ်လပ်မှုသည်သင်လိုချင်တာကိုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်တွင်သင်သည်ဤမျှရှင်းပြချက်များစွာမပေးသင့်သော်လည်းဤနည်းဖြင့်သင်သည်အခြားသူများ၏ထင်မြင်ယူဆချက်များကိုအာဏာအချို့ပေးခြင်းဖြင့်အဆုံးအဖြတ်တစ်ခုစီကိုမျှတစေသည်။ တခါတရံ၎င်းတို့သည်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများကိုလူများနှင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းကိုမေ့ပြီးသူတို့အဖွဲ့ဝင်များကိုကန့်သတ်ခြင်း၊ တရားစီရင်ခြင်းနှင့်အပြစ်ပေးခြင်းတို့သည်အသိုင်းအဝိုင်းမဟုတ်ဘဲဂိုဏ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ လေးစားပါတယ်
ငါ haha ​​မှတ်ချက်များကိုလျှော့ချရန်ကြိုးစားခဲ့ရသည်, ဒါကြောင့် "ဤမျှလောက်ပြန်"
အချို့သောနည်းပညာပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ စစ်မှန်သောလွတ်လပ်မှုကိုရရှိရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာကမ္ဘာပေါ်ရှိဆော့ (ဖ်) ဝဲအားလုံးသည်အခမဲ့ဖြစ်သည် (သို့မဟုတ်အရာအားလုံးသည်စီးပွားဖြစ်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ထိုစိတ်ကူးကိုမကြိုက်ပါ) ဖြစ်သည်။ ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) အမျိုးအစားနှစ်မျိုးတည်ရှိခြင်းကမတူညီသောလွတ်လပ်မှုများသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုတားဆီးစေသည်။ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုသာအသုံးပြုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုကန့်သတ်ထားသည်။ သို့သော်စီးပွားဖြစ်ဆော့ဗ်ဝဲကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏လွတ်လပ်ခွင့်ကိုလေ့လာခွင့်နှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုသည်။
စိတ် ၀ င်စားစရာအချက်တစ်ချက်ကိုစိတ်ပညာ၌စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျော်ရွှင်မှုနှင့်သဘာဝပျော်ရွှင်မှုဟူသောအယူအဆဟုလူသိများသည်။ ၎င်းမှာအခမဲ့ - စီးပွားဖြစ်ဆော့ (ဖ်) ဝဲနှင့်သက်ဆိုင်သကဲ့သို့ဆိုရှယ်လစ် - အရင်းရှင်စနစ်နှင့်လည်းအလားတူဖြစ်သည်။
သဘာ ၀ ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာသင်ရချင်တာရတဲ့အခါအမြဲရတယ်။ စီးပွားဖြစ်ဆော့ဗ်ဝဲထုတ်ကုန်များသည်ဤကဏ္specialistsတွင်အထူးကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ရွေးချယ်စရာများကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်သူတို့သည် ပို၍ ပျော်ရွှင်မှုကိုရရှိစေသည်။ ဒါဘယ်လိုလဲ အကယ်၍ သင်သည် mac တစ်လုံးဝယ်လျှင်၎င်းသည်ရေရှည်တွင် (အခြားမရှိသောကြောင့်) ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်မှုရှိ၊ မရှိနှင့်သင် (OS OS အကြောင်းပြောဆိုလျှင်) နှင့်သင်ကိုယ်တိုင်နှောင့်ယှက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်မှာနည်းပါးသည်။ တစ်ရက်မှာသင်ပြောနိုင်သည့်အန္တရာယ်ရှိသည် - အိုး! ကြည့်ပါ၊ Manjaro ဒီမှာရှိတယ်၊ Fedora မှာဒီရှိတယ်။ Ubuntu! နှင့်ငါ၌တည်ရှိ၏ distro မဟုတ်ပါဘူး !! » သင်ပြောင်းလဲရန်ဆုံးဖြတ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အားပိုမိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးသော်လည်းသင့်ကိုနှစ်သိမ့်မှုနည်းသောကြောင့်၎င်းသည်သင့်ကိုပျော်ရွှင်မှုနည်းစေသည်။ ခဏကြာတော့ဒြပ်ပျော်ရွှင်မှုရလာပြီး၎င်းသည် "သင်ရရှိသမျှကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ခြင်း" မှရရှိသောအရာများဖြစ်သည်။ သင်က `အိုကေ၊ ငါ Fedora ကိုလာနေပြီးဒီမှာဒီမှာတပ်ဆင်လို့မရဘူး။ နောက်ဆုံးပေါ် Photoshop CS6 မူကွဲ, ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံးငါ၌ GIMP, Krita စသည်တို့ရှိသည်။ »
ဤနေရာတွင်လှည့်ကွက်သည် (အားဖြင့်) ကြားဝင်ဖြန်ဖြေရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုသင်မသက်သာနိုင်သမျှကိုသင်မပေးနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ (ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးတော့ဒါကိုငါမြင်ရပြီ) ဒါကြောင့်ငါ Fedora Linux နဲ့ငါ့ iPhone ကိုသုံးရတာပျော်တယ်။
ရွေးချယ်မှုနည်းသောပျော်ရွှင်မှုကိုပိုပေးသောဖြစ်စဉ်အပေါ်သင်မှတ်ချက်ပေးသည့်အရာကိုဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တွင် elav မှဝေမျှထားသည်ထင်သော TEDtalk တွင်မှတ်ချက်ပေးသည်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လွတ်လပ်မှုကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဟာရှုပ်ထွေးတယ်ထင်တယ်။ ငါတို့ပြောနိုင်တာကအဲဒါဟာငါလိုချင်တာကိုလုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ပဲ။ ငါ့အဘို့နှစ်ခုထင်ဟပ်ဒီချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ပေါ်ထွန်း။
ပထမတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်သည်ရွေးချယ်မှုများစွာကိုလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရှိသော်လည်း၎င်းတို့အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်၏လွတ်လပ်ခွင့်၏အမည်တွင်မှန်ကန်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်ကကလေးတစ်ယောက်ကိုရိုက်နှက်ချင်လျှင်၊ သူတို့ကလွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်အတွက်တော့၎င်းသည်မမှန်ကန်ပါ။ ဒီအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုအပြည့်အဝလက်ခံခြင်းဟာပြီးပြည့်စုံတဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုငါမလိုလားဘူး။ ၎င်းကိုလက်ငင်းလယ်ပြင်သို့ရွှေ့လိုက်ခြင်းအားဖြင့်လူအများစုကိုခွင့်ပြုတဲ့အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲပရိုဂရမ်များဆိုတာငါယုံကြည်တယ်။ MS Office နှင့် Libreoffice ကိုဥပမာတစ်ခုအဖြစ်ငါပြမည် (ရုံးသုံးအစုံသည်အလွန်အရေးကြီးသည်ဟုထင်သောကြောင့်) လူအများစုက MS Office နှင့်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ပညာရေးအမြောက်အများကိုအသုံးပြုကြသည်။ လိုင်စင်များသည်လူတိုင်းမတတ်နိုင်သောငွေပမာဏများစွာကုန်ကျသည်။ အဲဒီအစားလူတိုင်း Libreoffice ကိုသုံးနိုင်သည်။ ငါ Libreoffice ကိုသုံးပြီးစာရွက်စာတမ်းများ (အလုပ်၊ တက္ကသိုလ်) ကိုမျှဝေချင်သည့်အခါ libreoffice ကို သုံး၍ ကျွန်ုပ်ကိုကန့်သတ်သောပုံစံနှစ်မျိုးလုံး (Libreoffice မှယောက်ျားများကအားစိုက်ကြိုးပမ်းသော်လည်း) အကြားလိုက်ဖက်ညီသောပြproblemsနာများရှိသည်။ ဤအမှု၌အမှန်တကယ်ပြproblemနာမှာ MS Office ကိုပိတ်ထားခြင်းမဟုတ်ပဲ၎င်းသည်ပိတ်ထားသောပုံစံကို သုံး၍ စံပုံစံကိုမသုံးခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့နောက်ပြနာမှာကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ရပ်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့ထက်ကျော်လွန်သောအကျိုးဆက်များရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်လွတ်လပ်ခွင့်ရှိသော်လည်း၎င်းသည်တာဝန်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်လွတ်လပ်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းအားတာ ၀ န်ရှိရှိဖြင့်အသုံးပြုခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ ၎င်းသည်သူတစ်ပါး၏လွတ်လပ်ခွင့်ကိုမဖြတ်ဘဲ၎င်းတို့အားအကြီးအကျယ်အားပေးသည်။
ဒုတိယရောင်ပြန်ဟပ်မှုတစ်ခုမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်လွတ်လပ်မှုသည်သင်ပြုလုပ်ရမည့်သတင်းအချက်အလက်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဤအရာကိုကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါကသတင်းအချက်အလက်အားလုံးမပါဘဲဆုံးဖြတ်ချက်ချသူသည်အမှန်တကယ်အခမဲ့လား။ သင်၏ရွေးချယ်မှုသည်အခြေခံအုတ်မြစ်ကောင်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့် OS ကိုရွေးချယ်သောအခါနည်းပညာကျွမ်းကျင်သူအကြောင်းပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ ငါကွန်ပျူတာအတွက်အသစ်ရောက်ရှိလာသောအကြောင်းပိုစဉ်းစားနေပြီး၊ များသောအားဖြင့်၎င်းတို့တွင် (Windows, MS Office) တွင်၎င်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ အခြားရွေးချယ်စရာများသို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်မရှိပါ။ သငျသညျမှအကျွမ်းတဝင်ပြီးတာနဲ့ကလူကိုပြောင်းလဲရန်ခက်ခဲသည်။ ဤလူများသည်ယခုသူတို့၏ ၀ တ်စားဆင်ယင်နေထိုင်ရန်“ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆုံးဖြတ်ရန်” ဆုံးဖြတ်ကြသော်လည်းသူတို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်အားဤကန ဦး ရွေးချယ်စရာများမရှိခြင်းကြောင့်သာဖြစ်စေသည်။ ဒီတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာတကယ်ကိုလွတ်လပ်လား။ ဒီရောင်ပြန်ဟပ်မှုနှင့်အတူငါသာလွတ်လပ်ခွင့်အကြွင်းမဲ့အာဏာမကျမည်အကြောင်းအကြံပြုချင်တယ်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောရရှိနိုင်သည့်သတင်းအချက်အလက် (နှင့်နားလည်နိုင်စွမ်း၏သင်တန်း) ကဲ့သို့သောအခြားအချက်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ကျနော့်အမြင်ကိုအတိုချုပ်ပြောရလျှင်မည်သူမဆိုသူတို့လိုချင်တာကိုလွတ်လပ်စွာသုံးနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ သို့သော်ကျန်ပြည်သူလူထု၏လွတ်လပ်မှုကိုမြှင့်တင်ခြင်းမပြုပါကဤရွေးကောက်ပွဲများသည်ဝေဖန်မှုများကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်သင်အမြဲတမ်းဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏အမှန်တကယ်လွတ်လပ်မှုကိုအမြင့်ဆုံးရရှိစေရန်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အခြားနည်းလမ်းများအကြောင်းကိုအကြီးမြတ်ဆုံးဖော်ပြရန် (နားလည်ရန် (သင်ကြားရန်) ကြိုးစားရန်လိုအပ်သည်။
နောက်ဆုံးဆောင်းပါးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုကျွန်ုပ်သဘောမတူသော်လည်းအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ၏အယူအဆဆိုင်ရာအုတ်မြစ်များကိုအပြုသဘောဆောင်သောဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုသည်အရေးကြီးသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရာထူးများကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပြီးကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာငြင်းခုံနိုင်ရမည်။
ရှင်းနေသည်မှာသင် Sea_chello နှင့်သဘောတူသည်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြင့်လိုက်ပါသွားအားလုံးအကြောင်းတရားများရန်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ တရား ၀ င်မူဘောင်သည်လက်တွေ့တွင်ထိရောက်သောလွတ်လပ်ခွင့်ကိုသတ်မှတ်ထားသည်။ ပေါင်းစည်းညီညွတ်မှုနှင့်လူမှုရေးအတူတကွတည်တံ့ရန်အတွက်လေးစားရမည်။ iOS7 ကိုအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအသင်းများနှင့် Admon များတွင် ၀ ယ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟန်ဆောင်။ မရပါ။ အများပြည်သူသုံးသို့မဟုတ်တန်ဖိုးကြီးသောပစ္စည်းကိရိယာများ၊ လူ့အဖွဲ့အစည်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသည်အခြားသူများ၏စည်းလုံးညီညွှတ်မှုအပေါ်တွင်နေထိုင်ရမည်။ သို့ဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ဖျားနာသူများသို့မဟုတ်ဒဏ်ရာရသူများကိုကူညီရန်ငြင်းဆန်ခြင်းကိုရာဇ ၀ တ်မှုတစ်ခုဟုပြောခြင်းဖြစ်သည်
တနည်းအားဖြင့်တိုတိုပြောရရင်ပိုကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာအငြင်းပွားမှု၊ စီးပွားဖြစ်ဆော့ဗ်ဝဲ (သို့) ဟာ့ဒ်ဝဲများ၏ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားမှုဟာအနည်းဆုံးကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှုရှိသည်။ သတိရှိအစိုးရများနှင့်၎င်းတို့နိုင်ငံများသည်ပညာရှင်များမှဥပဒေများကိုတမင်တကာလေလံဆွဲကြသည်။
အလွန်ကောင်းတဲ့ဆောင်းပါး။ သငျသညျ STALLMAN ဆောင်ပုဒ်ကစားအထူးသဖြင့်အခါ။ တကယ်ကိုသွားပါ၊ လွတ်လပ်မှုကိုသူ၏ဖြစ်တည်မှုနှင့်ဝေဖန်မှုပုံစံများကိုကျွန်ုပ်မမြင်ပါ။ သူသည်ဆိုရှယ်လစ်အနေဖြင့်ခေါ်ဝေါ်သော်လည်းသူမုန်းသောအရာများအပေါ်တွင်နေထိုင်သည် (ကြာရှည်စွာ) မည်သည့်အရာကမျှထည့် ၀ င်ခြင်းမရှိသောအာဏာရှင်တစ် ဦး အနေနှင့် ပို၍ မြင်ပါသည်။ ငါ iPhone အသုံးပြုရတာကိုကြိုက်တယ်၊ Android (Samsung Galaxy 3) ရှိတုန်းကအရာရာတိုင်းနီးပါးပိတ်ဆို့ထားလို့ပါ (သင်အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့) operating system (PC OS) သုံးခုစလုံးနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာကျွန်တော် ၀ မ်းသာပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည် Windows ထက် Debian နှင့် Mac OsX ကိုပိုမိုအသုံးပြုသည်။ လွတ်လပ်မှုနှင့်ရူးသွပ်နေသောအရာအားလုံးကြောင့်မဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်သက်သောင့်သက်သာရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ လူတစ် ဦး သည်သူတစ်ပါး၏ခံစားချက်ကိုသူတစ်ပါး၏ခံစားချက်ဖြင့်မဟုတ်ဘဲသုံးစွဲသင့်သည်ကိုပြောသင့်သည်မှာသေချာသည်။
Stallman သည်အလွန်ပြင်းထန်သောပါ ၀ င်မှုလှည့်စားမှုများရှိသော narcissistic ရူးသွပ်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
Stallman ၏ဆိုလိုရင်းကိုအလွန်အမင်းလွဲမှားစွာကောက်ယူမိခြင်းမှာသနားစရာဖြစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်များ၏တိုက်ပွဲအားအင်အားကြီးမားစွာဖြင့်အနိုင်ရလိမ့်မည်ဟုထင်ရသည် (Apple, MS, Google)
ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကပိုက်ဆံကိုမုန်းသလား၊ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲသဘောတရားကိုဖန်တီးသူကဘာကိုမျှအထောက်အကူမပေးသလောအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲအယူအဆကိုဖန်တီးသူသည်သူ့ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးမှုတွင်မှားယွင်းနေသည်။ လူတိုင်းတွင်ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်စွာဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ကိုတီထွင်သည်။ ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) ဆော့ဗ်ဝဲလွတ်လပ်မှုသည်တံတားပေါ်မှခုန်ချခြင်းနှင့်မည်သို့သက်ဆိုင်သနည်း။
လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟုယုံကြည်သောလူများရှိသည်။ သို့သော် အကယ်၍ သူတို့သည်လိမ်လည်မှုနှင့်အယူအဆမှားများအပေါ်အခြေပြုပါက၎င်းတို့သည်မည်သည့်လွတ်လပ်ခွင့်အကြောင်းပြောနေကြသနည်း။
Francisco Rangel ဟုသူကပြောသည်
အကယ်၍ Stallman ၏အရာသည်ရူးသွပ်မှုဖြစ်လျှင်သူ၏ရူးသွပ်မှုကသူငယ်ချင်းရစ်ချတ်သည်အလွန်စိတ်ကောင်းသောသူဖြစ်ကြောင်းပြသသည်။ အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်ထင်သည်မှာကျွန်ုပ်ဘာမှမသိပါ။
Francisco Rangel ကိုပြန်သွားပါ
ပါဝါလှည့်စားခြင်းနှင့်အတူ Stallman? ဟုတ်သည်၊ အထူးသဖြင့်ခွဲဝေမှုကိုအတင်းအကျပ်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အတူ။ ဒါဟာမဖြစ်မနေမဟုတ်ဘဲအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ဖိတ်ကြားသင့်ပါတယ်။
Stallman ဆိုရှယ်လစ်လား သူကဆိုရှယ်လစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုသတိရစေတယ်လို့သူကမပြောခဲ့ပါဘူး။
ဆိုရှယ်လစ်စနစ်သည်ငွေကိုမုန်းသလား။ အတူတူပါပဲ သူကသူတို့ရဲ့အရင်းခံအရင်းရှင်ဝါဒကိုမုန်းတီးသည်လိုသူတို့ဟာတစ်ခုခုကိုမုန်းတီးပြီးသူတို့ရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံကိုနေထိုင်ကြသည်ဟုပြောခဲ့သည်။
အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲအယူအဆကိုဖန်တီးသူကဘာတစ်ခုမှမထောက်ပံ့ဘူးလား နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်သူသည်စာသင်ကြားခြင်းဖြင့်သာနေထိုင်သည်။
အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲအယူအဆကိုဖန်တီးသူကသူတို့ဖန်တီးရာမှာမှားနေသလားလူတိုင်းကသူတို့ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်သောဆော့ဗ်ဝဲ၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုတီထွင်ခွင့်ရှိသလား။ မင်းရဲ့ဖန်တီးမှုကိုမင်းမမှားဘူး၊ အဲဒီဖန်တီးမှုကိုအခြေခံတဲ့အယူအဆမှားနေတယ်။
Morpheus သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်လက်၌အိပ်ပျော်သွားပြီး MacLinWin ပြောခဲ့သည့်အကြောင်းအရာများကိုနားလည်မှုလွဲနေသည်။
«ဟုတ်တယ်။ အထူးသဖြင့်ခွဲဝေမှုကိုအတင်းအကျပ်တိုးမြှင့်တာနဲ့အတူ။ ဒါဟာမဖြစ်မနေမဟုတ်ဘဲအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ဖိတ်ကြားသင့်ပါတယ်။ "
ထိုအရာမှန်လျှင်ပင်၎င်းသည်သင့်အားမည်သည့်အာဏာကိုပေးသနည်း။ အဖြစ်မှန်မှာခွဲဝေမှုကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်း၊ အတင်းအကျပ်မပြုစေခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ တောင်းဆိုလိုသည်မှာကြမ်းတမ်းသောလိုင်စင်များ (သို့) promonopoly ဥပဒေများကသင်လိုချင်လျှင်ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်အခွင့်အရေးကိုဖယ်ရှားပေးခြင်းဖြစ်သည်။
"နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်သူဟာသင်ကြားပို့ချမှုဖြင့်သာအသက်မွေးသည်။ " y? ဒါကအထောက်အကူပြုသည်မဟုတ်လော ထည့် ၀ င်မှုများသည်ကုဒ်နံပါတ်နှင့်ဖြစ်ရမည်ဟုအဘယ်မှာပြောသနည်း။
"မင်းရဲ့ဖန်တီးမှုကိုမင်းမမှားဘူး၊ အဲ့ဒီတီထွင်မှုအပေါ်အခြေခံထားတဲ့အယူအဆမှားနေတယ်။ " သငျသညျထိုအဖြေကိုပိုမိုတစ်ခုခု elaborated လျှင်ကောင်းပါတယ်။
ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့် ပို၍ ဆိုးဝါးသောရှုပ်ထွေးမှုများ:
၁ - လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် = အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ? လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်သည်ကျွန်ုပ်အသုံးပြုသောဆော့ (ဖ်) ဝဲနှင့်ကျွန်ုပ်လိုချင်သောအတိုင်းအသုံးပြုရန်၊ မျှဝေရန်၊ ပြုပြင်ရန်၊ ရောင်းရန်အတွက်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရန် (လွတ်လပ်မှုနှင့်ကွဲပြားသည်) လွတ်လပ်သောရွေးချယ်မှုနှင့်မပတ်သက်ပါ။
2- အရင်းရှင်ဝါဒ = ငွေလား။ အရင်းရှင်ဝါဒသည်ငွေတီထွင်မှုပြီးနောက်ရာစုနှစ်များစွာ (ထောင်စုနှစ်များစွာ) ရာစုနှစ်များစွာမှမွေးဖွားခဲ့သည်။ တရုတ်၊ ကျူးဘား၊ ရန်ကီး၊ ပိုလန်နှင့်အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံများအားလုံးသည်လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးနှင့်အတွေးအခေါ်ကွဲပြားခြားနားမှုမရှိဘဲငွေကိုတပ်မက်ကြသည်။
၃ - ဆိုရှယ်လစ်စနစ် = အာဏာရှင်စနစ်လား။ ငါ့တိုင်းပြည်မှာငါတို့သမိုင်းမှာအာဏာရှင်စနစ်တွေအများကြီးခံစားခဲ့ရပြီးသူတို့အားလုံးဟာအရင်းရှင်စနစ်ပဲ။
4- အစီအစဉ် = အထောက်အကူပြု? Stallman သည်သဘောတရား (FS)၊ လိုင်စင် (GPL)၊ ပထမဆုံး OS စီမံကိန်း (GNU)၊ အသုံးအများဆုံး compiler (GCC)၊ ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသောအယ်ဒီတာ (EMACS), ဘာသာရေး (SAN IGNUCIUS) ကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ ကြောင်းအထောက်အကူပြုမပါလျှင်!
၅ ထင်မြင်ချက် = အင်အားလား။ Stallman သည်အချို့သောအတွေးအခေါ်များတွင်မဟုတ်ဘဲအခြားသူများ၌ပါသည်ဟုသူထင်သည် (သူ၏တပ်များအလွန်ကောင်းစွာမစွမ်းဆောင်နိုင်ပါ။ SARCASM detector ကိုချိုး ဖျက်၍ ဘာသာရေးဆိုင်ရာပြissueနာဟုထင်မြင်သူအမြောက်အများရှိသည်။ ) သို့သော်မည်သူမျှကျွန်ုပ်အားဤသို့စဉ်းစားရန်တွန်းအားမပေးပါ။ ။ ကျွန်ုပ်သည်မျှတသည်ဟုယူဆသောစိတ်ကူးများနှင့်ဖြန့်ဝေပိုင်ခွင့်ကိုကျွန်ုပ်ကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်ကိုဘာသာရေးစိတ်ကူးယဉ်ဆန်သူတစ် ဦး သို့မဟုတ်“ အိပ်မက်ဆိုး” အဖြစ်သဘောထားခြင်းအားဖြင့်ထိုလွတ်လပ်မှုကိုကျွန်ုပ်မှမဖယ်ရှားပါနှင့်။ ကြောင်းမကောင်းတဲ့ကုသမှု၏လုံလောက်သော။ ငါသူတို့ကိုယ်တိုင်အသိပေးရန်၊ သူတို့ကိုယ်သူတို့ပညာပေးရန်၊ ဤအမျိုးအစားနှင့် ပတ်သက်၍ ထင်မြင်ချက်များကိုမသိဘဲအသိပေးရန်တောင်းဆိုသည်။ အသိပညာကသင့်ကိုတကယ်လွတ်လပ်စေပါလိမ့်မယ်။ (ဒါကြောင့်လည်းငါတို့အစီအစဉ်တွေရဲ့ကုဒ်ကိုသိချင်တယ်)
ဒါပေမယ့်မင်း Manuel ကဘယ်လောက်မှားသလဲ ... Stallman ဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတာမင်းမသိဘူး။ ဤသူသည်ငါအာဏာလုံးဝမလိုချင်ပါ၊ သူလိုချင်သည်မှာအသုံးပြုသူများအတွက်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ narcissist နှင့်စပ်လျဉ်းသူကသူ့သဘောထားကိုဘယ်တော့မှကြောင်းအပြင်မှတပါးသူ၏လှုပ်ရှားမှုနှင့်မဆိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအခြေအနေတွင်ထဲကဖြစ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။
ဒီ post ကိုကျွန်တော်နားမလည်တာတစ်ခုတည်းပါ၊ Stellman ကိုဘာကြောင့်ဝေဖန်တာလဲ။
၎င်းသည်လှုပ်ရှားမှု၏ ဦး ခေါင်းနှင့်မြင်နိုင်သောမျက်နှာဖြစ်သည်။ အရာအားလုံးကဲ့သို့သောအကောင်းဆုံးအပြုအမူရှိပြီး၎င်းသည်မည်သို့ဖြစ်သင့်သည်ကိုပြောရန်တာဝန်ရှိသည်။ သို့သော်၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်သင့်အားတွန်းအားပေးသည်သို့မဟုတ်သင်သွားမည်ဟုမည်သည့်အချိန်၌မျှမကြားရပါ။ ဒါကိုမလုပ်တဲ့အတွက်အဆုံးမဲ့ကွင်းဆက်ကိုအပြစ်ပေးခြင်း (စိတ်မကောင်းစရာဟာသ) ။
သူကအခမဲ့မဟုတ်တဲ့အရာမှန်သမျှကိုအသုံးမပြုဖို့တိုက်ရိုက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်လူတွေဟာသူတို့မှာဘာဆဲလ်ဖုန်းရှိသလဲဆိုတာကြည့်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ကွန်ပျူတာများမှာတားမြစ်ထားသောဆော့ဖ်ဝဲများရှိ၊ မရှိသိချင်ရင်သူတို့ကိုထုတ်ပစ်လိုက်တယ်လို့မထင်ပါဘူး။
မက်ဆေ့ခ်ျ (Stellman နှင့်အခြားသူတစ် ဦး ဦး) ကိုလည်းသင်နားလည်ရပေမည်။ သင်နှင့်အဆင်ပြေပါက၎င်းကိုသင်တတ်နိုင်သလောက်နှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်မလုပ်နိုင်သည်ကိုအသုံးပြုပါ။
သို့သော်ဤ "အာဏာအလွန်ပြင်းထန်သောလှည့်စားမှုများရှိသည့် narcissistic အရူး" ကမှတ်ချက်ချသည်မှာသူနှင့်သင်၏ပြproblemနာသည်နောက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
သူသည်ညအချိန်တွင်လက်နက်ကိုင်များမှလူများအား GNU / Linux နှင့်၎င်းနှင့်လက်ခံသောပရိုဂရမ်များစာရင်းကိုတပ်ဆင်ရန်နှင့်တပ်ဆင်ရန်ခြိမ်းခြောက်နေပြီး၊ အခြားမည်သည့်အရာကိုမဆို install လုပ်ခွင့်မပြုပါ။
ငါကသူ့ကိုမနှစ်သက်တဲ့သူမဟုတ်ဘူး၊ သူရဲ့မြင်ပုံ၊ အပြုအမူဟာသူရဲ့စာကိုအပြည့်အ ၀ ဖြည့်ဆည်းပေးတာဖြစ်လို့သူ့ကိုကြည့်ရတာ၊ အပြုအမူကကောင်းတယ်။ အပြင်ဘက်မှာနားထောင်ဖို့ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့ငါထင်တယ်။
Alfredo Levy ဟုသူကပြောသည်
အထူးသဖြင့်လူတစ် ဦး ချင်းစီသည်ဆဲလ်ဖုန်းများနှင့်ကွန်ပျူတာများနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့လိုချင်သောအရာအတော်အတန်လုပ်နိုင်ကြသည်။ iOS သို့မဟုတ် Android ကိုသုံးပါ။ စသည်တို့ကိုသင်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သင့်အတွက်မည်သူမျှလက်ညှိုး ထိုး၍ မရခြင်းသည်ကောင်း၏။
0 - အခမဲ့အရာများကိုအသုံးပြုခြင်း၏ဥပမာကိုအားပေးခြင်းနှင့်သတ်မှတ်ခြင်း (ဥပမာ github သည်အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲကိုဖန်တီးခြင်းနှင့်အားပေးခြင်းအတွက်ကြီးမားသောခုန်ခြင်းဖြစ်သည်) ဤအချက်သည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အရာဝတ္ထုများနှင့်ဤအတွေးအခေါ်များကိုမသင့်လျော်သောအတွေးအခေါ်ကိုဖြန့်ဖြူးသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကပေါ်လစီနှင့်ယေဘူယျအားဖြင့်ရောက်ရှိလာသောဟာ့ဒ်ဝဲကဲ့သို့သောအခြားနေရာများသို့ပြန့်နှံ့စေသည်။
၁။ သင်၏အကြံဥာဏ်ကိုအခြားသူများကပြုလုပ်သောကုဒ်များကိုပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းမှ စ၍ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုမြှင့်တင်ပါ။
2 - လုံခြုံရေးကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်တယ်၊ များစွာသောလူတွေကဒီဆော့ဗ်ဝဲရဲ့လုံခြုံရေးကိုစစ်ဆေးပြီးအတည်ပြုနိုင်တယ်။
၃ - ရွေးချယ်ရာတွင်ရွေးချယ်စရာများပိုမိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တွင်ဆဲလ်ဖုန်းအဟောင်းရှိပါကရပ်ရွာတစ်ခုမှထိန်းသိမ်းထားသည့်ဆော့ဖ်ဝဲအဟောင်းကိုသုံးရန်ရွေးချယ်နိုင်သည် (ဤတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ပြင်ပရှိပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှုနှင့်အသိုင်းအဝိုင်းမျိုးဆက်သစ်များအချက်နှစ်ချက်ရှိသည်။ )
၄။ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ သင်အသုံးပြုနေသောဆော့ဖ်ဝဲကိုပြင်ဆင်တည်းဖြတ်နိုင်ပြီးဖြစ်နိုင်သည်။
6 - ဒါဟာသင့်ကိုထိန်းချုပ်ပေးတယ်။
Alfredo Levy အားပြန်ပြောပါ
ဒီမှတ်ချက်ကိုကျွန်တော်သဘောတူတယ်။ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲရဲ့ကြီးကျယ်တဲ့ပံ့ပိုးမှုများကိုငြင်းဆိုခြင်းမရှိပါ (ဥပမာ - WordPress၊ Joomla, GitHub, Subversion, GCC, SourceForge Firefox, စသဖြင့်) ။ သင်နှင့်အဆင်ပြေသောဆော့ဝဲလ်ကိုဖွင့်ခြင်းကိုရပ်ပါ (ဖွင့်ပါသို့မဟုတ်မဖွင့်ပါ) နှင့်ပျမ်းမျှအသုံးပြုသူ (သူတို့သုံးသောဆော့ဖ်ဝဲသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်ဆိုပါကသူတစ်ပါးကိုအပြစ်မတင်ဘဲသူကိုဖိတ်ခေါ်မည့်အစား)“ အခမဲ့” ဆိုသည့်ဆော့ဝဲကိုအသုံးပြုပါ။ အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲကို သုံး၍ SOFTWARE ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုပြသရန် Stallman နှင့် ပတ်သက်၍ Stallman ကကောင်းသည်ဟုပြောခဲ့ဖူးသည် - တစ်ချိန်က Stallman က“ လွတ်လပ်မှုသည်ချမှတ်ထားသည့်ရွေးချယ်စရာအနည်းငယ်အကြားရွေးချယ်နိုင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲသင်၏ဘဝကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာမင်းရဲ့ဘယ်သူဖြစ်မယ်၊ ဘယ်သူလဲဆိုတာမရှိဘူး။ လွတ်လပ်မှုဆိုတာမရှိဘူး။ Stallman ကိုမာစတာလိုမလိုချင်ဘူး
iOS နဲ့ iPhone ဟာအခမဲ့ဖြစ်ပြီးဆော့ဖ်ဝဲအဆင့်မှာအခမဲ့စကားပြောပေမယ့်တစ်နေ့တာမှာတော့သူတို့ကသင့်ကိုတစ်နည်းနည်းနဲ့ချည်နှောင်ပြီး Android လိုမျိုး (ဒီထက်မက၊ မနည်းလှတဲ့) အပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးကိုကျွန်တော်သဘောမတူပါဘူး။ iCloud, Gmail စသည်ဖြင့်သူတို့၏နည်းပညာများကသင့်ကိုပြသည်။ မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆို Android ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်တယ်လီနောအော်ပရေတာနှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းသို့မဟုတ်ပိုမိုဆိုးရွားစေခြင်းသို့မဟုတ်ပိုမိုဆိုးရွားခြင်းတို့အတွက်အသုံးမ ၀ င်ပါ။ ထို့နောက်၎င်းတွင်ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသည့်ဆော့ဖ်ဝဲအချို့ရှိပြီး၎င်းကိုဖယ်ထုတ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ LG သည် Orange နှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုသောအခါ၎င်းကိုအမြစ်တွယ်ရန်နှင့် Orange TV ကိုဖယ်ထုတ်ရန်လိုသည်။ နိမ့်ကျသောမိုဘိုင်းဖုန်းတွင်ကျွန်ုပ်အတွက်အသုံးမကျသည်။ ၎င်းသည် IE နှင့် Microsoft ၏လုပ်ဆောင်မှုနှင့်များစွာကွာခြားသည်မဟုတ်။
Android ဒါမှမဟုတ် Linux ကိုလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ဖို့ဆိုတာဟန်ဆောင်မှုအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းတွေ့ခဲ့ဖူးတယ်။ လူတွေက PS3 ကို Ouya (အခမဲ့ console) ဝယ်ဖို့လောင်နေတာမျိုးမတွေ့ရဘူး။ ငါ Linux နဲ့ Android ကိုသုံးတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကငါပိုကြိုက်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကငါလိုချင်တာလေ။ ကျွန်ုပ်သည်နွေရာသီတွင် FirefoxOS သို့အသွင်ပြောင်းလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်သည်ရပ်ရွာကိုအထောက်အပံ့ပေးသောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဝဘ်ပရိုဂရမ်မာတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး၎င်းအတွက်စနစ်အတွက်အသုံးချပရိုဂရမ်များတီထွင်လိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ထိုအကြောင်းပြချက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်ဒီဇိုင်နာကိုမဆို GIMP ကိုမစည်းကြပ်တော့ပါ။ အခုဆိုရင်ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာမျက်စိနီကိုတို့ထိချင်တဲ့တစ်ယောက်ယောက် GIMP နဲ့ကပ်ထားဖို့လိုတယ်။
လူတစ် ဦး စီသည်မိမိကိုယ်တိုင်နှင့်မိမိလိုအပ်ရာနှင့်မိမိဆန္ဒရှိရာကိုလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ကြသည်
@Katio ဤမှတ်ချက်တွင်အကြောင်းပြချက်ကောင်းတစ်ခု air ရှိပါသည်
စဉ်းစားရန်၊ ဆင်ခြင်ရန်သို့မဟုတ်အလုပ်မလုပ်လိုသူများအတွက် Linux သည်မဟုတ်ပါ။
superuser ဖြစ်ရန်သို့မဟုတ် Firmware အခန်းကိုပြောင်းရန်ကြောက်ရွံ့သော android နှင့်လည်းအလားတူဖြစ်ပျက်သည်။ သူတို့၏ဖုန်းသည် linux ကိုသိပ်မသိသောသူများဖြစ်ပြီး၎င်းကိုလုပ်ရန်အလွန်ပျင်းရိသည်။ ၎င်းတို့ကိုကိုင်တွယ်သောအရာများကိုမသိဘဲမသိတတ်သူများဖြစ်သည်။
ငါခိုင်လုံတဲ့အငြင်းအခုံဖြစ်မယ်လို့မထင်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းကပိုပြီးမိုက်မဲတဲ့လူတစ်ယောက်မဟုတ်တဲ့အတွက်မင်းရဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကမင်းဟာ Windows7aero မှာမဟုတ်ဘူး၊ ငါကပိုပြီးထက်မြက်တဲ့သူတစ်ယောက်လို့ပြောလို့မရဘူး။ ၎င်းသည် "အသုံးပြုသူသည်ပျင်းရိလျှင်အဆင်သင့်ဖြစ်ဖြစ်၊ မဖြစ်လျှင်" iOS တွင်ပျောက်ဆုံးနေသောအရာများနှင့်ထပ်မံရှုပ်ထွေးမှုများမရှိဘဲကာလများလည်းရှိသည်။ သင်သည်သင်၏ကော်ဖီစေ့များကိုစိုက်ပျိုးနိုင်သည်၊ နံနက်ယံ၌ပြုတ်ရည်ပြုလုပ်ရန်ကင်နှင့်ကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်နိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းကိုသင်လုပ်သည်ဖြစ်စေ၊ ရေကိုချက်ပြုတ်ရန်၊ ချက်ပြုတ်ရန်အတွက်ဖြစ်စေချက်ချင်းအသုံးပြုသည်ဖြစ်စေသင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းလုံးဝမဖော်ပြပေ။
Na na na na naaaaaaa, ဤဖွင့်ဟချက်သည်ဤထင်မြင်ချက်သည်ထူးခြားချက်ကိုဖော်ပြသည်။
ကြည့်ပါ၊ Carlo၊ ကျွန်ုပ်ပြောမည့်အရာသည်တော်တော်လေးရိုင်းစိုင်းကြလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းရိုးရှင်းရိုးရှင်းပါသည်၊ ၎င်းကိုနှလုံးမသွင်းပါနှင့်
Linux ဆိုတာ Android လိုလူတွေကိုစဉ်းစားဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကရာစုနှစ်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာမိုက်မဲမှုဖြစ်တယ်။ အနည်းဆုံး GNU / Linux သည်သုံးစွဲသူအတွက်ရှုပ်ထွေးသောလမ်းကြောင်းများရှိသော်လည်း၎င်းသည်ခက်ခဲသောကြောင့်မဟုတ်ပါ။ အသုံးပြုမှုပုံစံမှတစ်ခုသို့အခြားတစ်ခုသို့ပြောင်းလဲသောအခါသင်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသည်။ နည်းပညာပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အလုပ်လုပ်သောသူမဟုတ်ပါ၊ သူသည်သင့်ကိုရိုက်လိမ့်မည်၊ သို့သော်သူက“ ပျင်းရိသူများအတွက်မဟုတ်”၊ အဘယ်သို့သော bullshit …“ Gentoo သည်ပျင်းရိသူများအတွက်မဟုတ်” ဟုပြောပါ၊ ကျွန်တော်ချီးကျူးစကားပြောပါမယ်၊ ဘုရားသခင့ငါ့ကိုမျက်နှာသင်၏ရယ်မောရယ်မော pissed ။
ဒါပေမယ့် Android လား။ ပျင်းရိသည်မဟုတ်လော ဟေ့ဟေ့သံသယမစောင့်ပါ! Android သည်စျေးကွက်တွင်ထူးချွန်သောစနစ်ဖြစ်သည်။ (အရည်အသွေးနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောနေခြင်းမဟုတ်၊ စျေးကွက်လွှမ်းမိုးမှုအကြောင်းပြောနေခြင်းဖြစ်သည်) ၎င်းသည်အရှုံးအတွက်၊ ထုတ်လုပ်ရန်၊ တယ်လီဖုန်းကုမ္ပဏီများအတွက်လုပ်သည်။ သူတို့မလိုချင်ကြဘူး သင်၏ကွန်ပျူတာကို root လုပ်ခြင်း၊ အာမခံချက်ဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများစွာဆုံးရှုံးခြင်းသည် rooting သည်အသုံးပြုသူများ၏လူကြိုက်များသော meta-knowledge အတွင်းမှအချက်တစ်ချက်မဟုတ်ပါ။
ငါအရမ်းချဲ့ထွင်ကြောင်းငါနောက်သို့မလိုက်ကြဘူး, တစ် ဦး မှားယွင်းတဲ့သုံးသပ်အကဲဖြတ်ချက်တွေအပေါ် xD ၏ကာကွယ်ရေးအတွက်, သငျသညျပွောခဲ့ဖူးသောမိုက်မဲအချုပ်အခြာအာဏာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
nano ၏ပျံ့နှံ့ပျံ့နှံ့မှုသည် nano (သူသည်ငါ့ကိုပြတင်းပေါက်ကွန်ပျူတာတစ်ခုဝယ်ပေးသော်လည်း ubuntu autoinstall ကို "nerd thing") ဟု nano ကပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းသည် firmware ကိုဖုန်းသို့ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ nano admin ဘာလဲ သင်ဘာလုပ်ပါသလဲ? သင်စာရေးနေစဉ်သင်ဟာကွန်ပျူတာအကြောင်းတစ်ခုခုသိသောအလုပ်လက်မဲ့ gachupin နှင့်တူသည်။
သေချာသည်မှာမန်နူရယ်သည်ထိုနည်းဖြင့်တုန့်ပြန်ရန်ပိုမိုဉာဏ်ရည်ရှိသူ၊ သူ့အတွက်ကောင်းသည်၊ မှတ်ချက်များကိုသူမည်သို့တုံ့ပြန်သည်ကိုဖတ်ရန်ကျွန်ုပ်အား enter ည့်ခံခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့် nano ကိုမင်းပြန်ဖြေတဲ့နည်းကငါ့ကိုဝမ်းနည်းစေတယ်။
P.S. ငါထင်တာ ၃ ပတ်လောက်လောက်ရှိပြီ၊ ကားလို့စ်ကိုနှလုံးမသွင်းဘူးဆိုတာသဘောပေါက်သွားတယ်
ဟားဟားအကြောင်းပြချက်များနှင့်ငြင်းခုန်မှုများ၊ ပြောရန်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းသည် - ကျွန်ုပ်သည် iPhone ဝယ်ပြီးကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်ပိုင်ဆိုင်သည်။
အချိန်ကာလရှိသင့်သည်။ ငြင်းခုံရန်မလိုပါ။ ၎င်းသည် ၀ င်းဒိုးကိုသုံးသူများကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ သူတို့သည်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနှင့် ပတ်သက်၍ မကောင်းသောစကားများကိုပြောဆိုခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဆင်ခြေပေးကြသည်။
သင်၏လုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့်သင်သည်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုမပံ့ပိုးပါ၊ သို့သော်ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်သင်သည်ကုမ္ပဏီများသည် windows အားပုံမှန်အားဖြင့်တပ်ဆင်ပြီးဖြစ်သည်၊
သင်ပြောရမည့်စကားမှာ - ကျွန်ုပ်သည်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုနှစ်သက်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုခံစားမိသောကြောင့်သီးသန့်သုံးစွဲသည်။
ငါ Linux ကိုကြိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့်ရုံးအထုပ်အတွက်ငါပေးရတယ်။ android ထက်ရွေးချယ်စရာပိုများပါတယ် ios, အသိုင်းအဝိုင်းကိုသူတို့အခမဲ့ဖြစ်ကြောင်းသတိပေးပါ။ သင်ဘာကြောင့်သူတို့ကိုမပေးရသနည်း။
ဆုံးဖြတ်ချက်ချသောကြောင့်သင်ဟာအခမဲ့ဖြစ်သည်။ သို့သော်ထိုအရာများထဲမှတစ်ခုကိုဝယ်ယူခြင်းဖြင့်သင်သည်စစ်မှန်သောအခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုအထောက်အပံ့မပေးကြောင်းသတိပြုသင့်သည်။ (အကယ်၍ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲအကြောင်းပြောနေသည်ဆိုပါကလုံးဝမထောက်ပံ့သော)
အမှန်တရားကတော့ခင်ဗျားတို့ဟာတစ် ဦး ချင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပါ။ ဒါပေမယ့်စစ်မှန်တဲ့လွတ်လပ်မှုကိုရှာဖွေတဲ့အသိုင်းအဝိုင်းကိုထောက်ခံတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်ပါဘူး။
၎င်းသည် FSF ၏နောက်ကွယ်စစ်မှန်သောအတွေးအခေါ်ဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်မှုကိုစစ်မှန်သောလွတ်လပ်မှုကိုရှာဖွေနေသောလူထုကိုထောက်ပံ့သောလွတ်လပ်မှု။ ပြီးတော့ငါ့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုဝန်ခံပြီးပြproblemနာကိုငါအသုံးချတယ်။ ကျွန်ုပ်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်မှာသူတို့ကိုယ်သူတို့“ stallman နှင့် GNU fans” ဟုခေါ်ကြသော်လည်းသင်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အယူအဆကိုမသိပါ။ ကျွန်ုပ်၏တောင်းဆိုချက်မှာရှင်းပါသည် - သင် (ကျွန်ုပ်အသုံးပြုသူလွတ်လပ်ခွင့်ကိုပိုမိုထောက်ခံသည်နှင့်အညီ) မည်သည့်အရာကိုမဆိုသင်ထောက်ပံ့နိုင်သည်။ သို့သော်သင်ကိုယ်တိုင်မှန်မှန်ကန်ကန်သင်ကြားထားပုံရသည်နည်းတူသင့်ကိုယ်သင်လည်းအသိပေးရန်လိုသည်
ဝမ်းနည်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်ဟာအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုမပံ့ပိုးဘူးလို့မပြောဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ် I-Buy ကိုဝယ်လိုက်တာက "အိုးထဲကနေ pissing" ပါ။
တောင်းပန်ပါတယ်ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း ကူညီသည် အကန့်အသတ်ဖြင့်သို့မဟုတ်ပုံပျက်နေသည်ကိုလက်ခံသည်။
ပံ့ပိုးကူညီမှုသည် SL အတွက်သင်၏အဝတ်ကိုဆုတ်ဖြဲခြင်းထက်မကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုပေးဆပ်ခြင်းထက်မကပါဝင်သည်။ သင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ဥပမာ၊ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သိလျှင် Manuel က၎င်းသည်ကုဒ်ထုတ်ပေးခြင်းနှင့်ဖြန့်ချိခြင်း၊ သင်ခန်းစာများနှင့် GNU / Linux အသုံးပြုခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မကြာခဏပြုလုပ်သောလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ၌ဖြန့်ဝေသည်ကိုသက်သေပြနိုင်လျှင်၊ သူကစာကြည့်တိုက်များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုပထမ ဦး ဆုံး (ကောင်းကောင်းပြောခဲ့သည်) ထိုအလုပ်ကိုဖြန့်ချိသင့်သည်။ သို့မှသာအဘယ်ကြောင့် iPhone ကိုဝယ်ယူပြီး Apple နှင့် SL များကိုမထောက်ပံ့တော့ပါသနည်း။
ဒါမှမဟုတ်ငါက Android ကိုဝယ်ပြီး Replicant ကိုပိုကောင်းတာလား။ ငါ့ရဲ့စားသုံးသူလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးမှာလား။ ငါ SL ၏အာဇာနည် - hipster ဖြစ်နှင့်ကြွင်းသောအရာနှင့်အတူအဆီမြည်းကိုစား!
ကျွန်တော်တစ်ခုပြောမယ်။ သင်လှောင်အိမ်ထဲသို့ ဝင်၍ သော့ကိုပစ်ချရန်သင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေးချယ်နိုင်သည်၊ သို့သော်နောက်ဆုံးတွင်သင်သည်လွတ်မြောက်တော့မည်မဟုတ်။
ဒါဟာအချက်ကောင်းတစ်ခုပါ ပြီးတော့ Android (ငါ့ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စအရ) ကဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကို iOS လိုပဲငါခံစားခဲ့ရတယ်။
သငျသညျဂရုတစိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလျှင်, ဒါဟာအမှန်တကယ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ Android နှင့် iOS သည်သုံးစွဲသူများအပေါ်တူညီသောထိန်းချုပ်မှုကိုပြုလုပ်သောကြောင့်ကန့်သတ်သည်။ ဘယ်ရွေးချယ်မှုပဲဖြစ်ပါစေသင်အမြဲတမ်းလှောင်အိမ်ထဲရောက်သွားလိမ့်မယ်။
သင် Diazepan XD ဘယ်လောက်ကောင်းသလဲ။ ကျွန်ုပ်သည်ဂူးဂဲလ်၏ android နှင့်ထုတ်လုပ်သူများထုတ်ကုန်များပေါ်တွင်ဖြန့်ဖြူးသောအရာများကိုရည်ညွှန်းနေခြင်းဖြစ်သည်။
@Xlash: ဟုတ်ကဲ့၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ - iOS ဟာ (နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင် ၂ ခုထဲက) ကျွန်တော့်အမြင်မှာတင်းကျပ်မှုနည်းတဲ့ဆဲလ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် android လှောင်အိမ်ကိုကျွန်တော်ပိုနှစ်သက်ပါတယ်။ လူတိုင်းငါးအကြံဥာဏ်လိုတယ်၊ ၎င်းသည်ငါး၏နိယာမသဘောတရားနှင့်တူပြီး၊ သေးငယ်သောငါးကန်ထဲတွင်ရှိနေခြင်းသည်သင့်ကလေးအားပြောပြသည် -
"သင်လိုချင်တာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကန့်အသတ်မရှိပဲရှိနိုင်တယ်" (ကြည့်ရှုသူရှုထောင့်မှကြည့်ပါ) ၎င်းသည်ရယ်စရာကောင်းသည်။ အကြောင်းမှာဆင်းရဲသောငါးများသည်ငါးဖမ်းနေသောကြောင့်ပိတ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပြproblemနာကမှန်သည်၊ ငါးကန်ကသူတို့ကိုကန့်သတ်သောအရာမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းတို့သည်ကောင်းစွာချိုးဖောက်နိုင်သည်၊ သို့သော် အကယ်၍ ၎င်းတို့ချိုးလိုက်လျှင်ဘာဖြစ်မည်နည်း။ (မင်းရဲ့ခေါင်းကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ) မြေပေါ်မှာငါးညှပ်နေတယ်။ လေဖြတ်ခြင်း။ ဒါကလွတ်လပ်ခွင့်ရဲ့အခြားတစ်ဖက်ပဲ။ ငါကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်၊ ဒီထက်ပိုပြီး၊ လှောင်အိမ်တစ်ခုကိုရွေးရမယ်ဆိုရင်၊ iOS ကိုရွေးလိုက်တယ်။
ငါဇာတ်လမ်းကိုကြိုက်တယ်😀သင်မူကားသင်လှောင်အိမ်တစ်ခုကိုလည်းရွေး။ မရပါ။ သင်သည်အတွင်းထဲ၌မရှိသောကြောင့်သေမည်မဟုတ်၊ မဟုတ်ပါ၊ ဤကိစ္စတွင်ရှိသည့်ငါးတိုင်သည်သင့်ကိုမကန့်သတ်ပါ၊ သင်ကိုယ်တိုင်ကန့်သတ်ခြင်းနှင့်ငါ့ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါသည်
@XSlash: သွက်ချာပါဒဟာစကားပြောသာသာ။ သင်လှောင်အိမ်ကိုမရွေးပါက၊ သင်သည်လေဖြတ်ခြင်းခံရလိမ့်မည်။ စံနမူနာပြဥပမာ Linux ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူတွင်လွတ်လပ်မှုများစွာရှိပြီးရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ လူများသည် Linux ကိုတပ်ဆင်လိုပါက၎င်းတို့သည် ၀ င်ရောက်ဖြေရှင်းနိုင်မည့်ဆုံးဖြတ်ချက်များစွာကိုပြုလုပ်ရပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်းမှဖယ်ထုတ်လိုက်ရမည်။ ၀ င်းဒိုးသို့မဟုတ်မက်များကဲ့သို့သောအရာများကိုရွေးချယ်ရန်မတောင်းဆိုသောရွေးချယ်စရာများနှင့်အတူနေခြင်းက ပို၍ ကောင်းသည်။
၎င်းသည်ဥပစာပြုထားကြောင်းငါသိ၏၊ သင်၏ဥပမာကိုလိုက်လျှောက်ပါ။ D. ငါရွေးချယ်သောလွတ်လပ်မှုနှင့်ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး, သငျသညျလေဖြတ်ခြင်းဖြင့်လေဖြတ်ခံရကြောင်း, ထိုလမ်းမမြင်ရပါဘူး, သင်ဆဲမရွေးရသေးရင်တောင်သင်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်နိုင်သည်။ ပြproblemနာကအလွယ်ကူဆုံးကိုအမြဲရွေးတာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းအလွယ်ဆုံးအလွယ်ဆုံးကတော့အကောင်းဆုံးလို့မဆိုလိုဘူး။ ဒီကိစ္စမှာ (OS ပြောခြင်း) ကပိုဆိုးတယ်။
Diazepan ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါဖတ်ပြီးပြီ။ D. ဒါပေမယ့်ဒီအရာဟာသတင်းအချက်အလက်တွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး၊ အသိပေးမှုမရှိတော့ဘူး၊ အဲဒါကိုတစ်ခြားရှုထောင့်ကကြည့်ပြီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသွားမှာပါ။
@Xslash: "လွတ်လပ်မှုဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုရင်၊ လူတွေကိုသူတို့မကြားချင်တာကိုပြောဖို့အခွင့်အရေးအားလုံးအထက်မှာပဲ" George Orwell - လယ်ယာမြေအပေါ်ပုန်ကန်မှု
ငါအခြားမှတ်ချက်ကနေချေး။ မင်းမှတ်ချက်ပေးနေတယ်၊ ​​ဒါကငါတို့နှစ် ဦး စလုံးလွတ်လပ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပဲအားဖြည့်ပေးတယ်😉
Joer, သင်သည်ဤမှတ်ချက်နှင့်ငါ့ကိုရယ်မောစေ၏။ တစ်နည်းပြောရရင် IOS ဆဲလ်ဟာပိုပြီးတော့သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးပိုကောင်းတယ်ဆိုတာကိုနားလည်အောင်သင်ပေးတယ်။ ဒါကြောင့်ငါထောင်ချလိုက်တယ်။ စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောအစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ သူသည်မည်သည့်အကျဉ်းထောင်တွင်နေရမည်ကိုသူရွေးချယ်နိုင်သောကြောင့်လွတ်လပ်သည်ဟုဆိုသူတစ် ဦး ဦး
မင်းမှာတွေ့ရတဲ့ပြနာကမင်းဟာမင်းရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုတရားမျှတစေချင်တယ်၊ မင်းကမင်းကမင်းကပိုလွတ်လပ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။ ငါတစ်ခုခုအကြောင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ကြောင်းကိုလျှင်, လွတ်လပ်မှုနှင့်အတူတာဝန်ဝတ္တရားလာသည်။ ဒါကရွေးကောက်ပွဲတွေအတွက်အကြပ်အတည်းပဲ၊ သူတို့မလွယ်ဘူး။ သို့သော်မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူရွေးကောက်ပွဲများသည်လွတ်လပ်သောဆော့ဝဲ၏စွမ်းအားကိုပြသနေသည်။ ဒါဟာလွယ်ကူခြင်းရှိမရှိအကြောင်းကိုမဟုတ်ပါဘူး။ သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုဗဟုသုတ၊ အသိပညာဆည်းပူးရန်လိုသည်။ သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းကိုခံယူမှသာလျှင်၎င်းကိုကျော်လွှားလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ၎င်းဆိုပါက၎င်းကို“ ကျွန်စနစ်နှင့်မသိမှု” ၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တစ်လုံးတည်းသာရှိသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်၎င်းသည် OS တစ်ခုနှင့်အညီမည်သို့လုပ်ဆောင်သင့်သည်ကိုစဉ်းစားစေသည့်အစိတ်အပိုင်းအတွက်စီးပွားဖြစ်ဆော့ဝဲလ်မှလာသည်။ သင့်အမြင်။ ၎င်းသည် Windows သို့မဟုတ် MacOS အသုံးပြုသူ linux သို့ရောက်သောအခါအကြီးမားဆုံးပြproblemနာဖြစ်သည်။ Apple က ITS ၏အယူအဆကိုစမတ်ဖုန်းဖြစ်သင့်သည်သို့မဟုတ်လုပ်ပါက၎င်းသည်သင်၏စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံနှင့်အတူလုပ်လိမ့်မည်၊ သို့သော်အဆင်ပြေသည်။ ငါသိသည်အကြောင်းကား၊ ဒါကြောင့်မို့လို့ modular ဖုန်းတွေရဲ့စိတ်ကူးကိုကျွန်တော်သဘောကျမိတယ်။ နောင်အနာဂတ်မှာသူတို့တကယ်အောင်မြင်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါဟာလက်ရှိနှင့်သာမန်စမတ်ဖုန်းဒီဇိုင်းများကိုငြီးငွေ့နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ စျေးကြီးပြောနေစရာမလိုဘဲ .... ။
ဤအကြောင်းကြောင့်, Manuel, သင်အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းရွေးချယ်သောကြောင့်, သင်ပိုမိုလွတ်လပ်သောဖြစ်ကြောင်းမပြောနိုင်ပေမယ့်ငါကလက်မခံချင်မလိုချင်သောရိုးရှင်းသောအချက်ကိုအဘို့အကအရေးကြီးဆုံးအရာ, လွတ်လပ်ခွင့်နှင့်အသိပညာနှင့်အသိပညာကွာယူဘို့တာဝန်။ ပိုမိုခက်ခဲ။ မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုရှိစေသည်။
Linux အတွက်၎င်းကိုကျွန်ုပ်သဘောကျသည်။ စနစ်သည်မကောင်းစွာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့်စနစ်မကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်ဟုမပြောနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ လုံလောက်သောဗဟုသုတမရှိသေးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်ပြုလုပ်လိုသောအရာများကိုရရန်ဖြစ်သည်။ အဲဒါကကျွန်တော့်ကိုတာဝန်ယူမှုနဲ့ကိုယ်ကိုကိုယ်သိသောစိတ်ကိုပေးတယ်။ ဒါကမလွယ်ဘူး၊ တစ်ခါတလေငါ့ကိုစိတ်ပျက်စေတယ်။ သို့သော်မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူကျွန်ုပ်သည်အားစိုက်ထုတ်ပြီးစက်ရုံမှအလုပ်လုပ်သည်ဟူသောပျော်ရွှင်မှုကိုထင်မြင်ယူဆခြင်းထက်ကျွန်ုပ်၏စနစ်ကိုမည်သို့လုပ်ဆောင်သည်၊ မည်သို့တိုးတက်အောင်လုပ်ရမည်ကိုကြိုးစားအားထုတ်။ ကြိုးစားရသောအခါကျွန်ုပ်၏အကြီးမားဆုံးကျေနပ်မှုမှာ၊ တစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ။
ကျွန်ုပ်သည်စီးပွားဖြစ်ဆော့ဝဲလ်များကိုစိတ်မ ၀ င်စားပါ။ ၎င်းသည်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသောကြောင့်အဆင်ပြေပါသည်။ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါသည်။ ဒီဇိုင်းတွင်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းကြောင့်အများအားဖြင့်မလိုအပ်ပါ။
၎င်းသည်ရှင်းလင်းပြတ်သားသောဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြတင်းပေါက် ၈ ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ပထမဆုံး PC ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ထိတွေ့သူ၊ အလွန်ရိုးရှင်းသော်လည်း၊ Windows 8 ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုလိုချင်သောအသုံးပြုသူနှင့်၎င်းထိန်းချုပ်မှုကိုရယူလိုလျှင်မည်သည့်အရာနည်း။ ဤအင်္ဂါရပ်များသင့်အတွက်အသုံးမ ၀ င်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်မှပျောက်ကွယ်သွားပြီလား။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုစိတ်ရှုပ်စေသည်။ မည်သည့်အသုံးပြုသူကိုမှပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောမထားသင့်ပါ။ သင်ပြောသည့်အတိုင်း Linux ကလုပ်သည်။ ရွေးချယ်မှုများနှင့်ဖိစီးမှုများသော်လည်းမည်သည့်အသုံးပြုသူကိုမှခွင့်မပြုသင့်ပါ။ သို့သော်အသေးစိတ်မှာမည်သူမည်ဝါ၏လွတ်လပ်ခွင့်သည်အလီဘာဘာမဟုတ်ပါ။
အော်ပရေတာမှပေးထားသော Android သည်အခမဲ့မဟုတ်ပါ။ စီးပွားဖြစ်အပလီကေးရှင်းများပါရှိသော Android သည်အခမဲ့မဟုတ်ပါ။ စီးပွားဖြစ် application များ (Steam ကဲ့သို့) ရှိသောမည်သည့် GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးမှုမျှမလွတ်လပ်ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ Andorid မှာ terminal ကိုထပ်မံလွတ်အောင်လုပ်ရန်သည်ရှုပ်ထွေးသော်လည်း iOS တွင်၎င်းကိုလုပ်ရန်နည်းလမ်းမရှိချေ။ iOS ဆော့ဖ်ဝဲကိုပြုပြင်မွမ်းမံရန်နည်းလမ်းမရှိပါ။ ဘယ်တော့မှဘာမှလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။
ပြနာကဘာပဲပြောပြောငါဟာငါလုပ်နိုင်တာငါရွေးပိုင်ခွင့်ရှိတာပဲ။ ဒါကငါ့ကိုမမြင်ဘူးလား၊ မင်းအဲဒီလိုမြင်ရင်မမြင်ဘူးဆိုရင်အဲဒါကိုမပြောင်းနိုင်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒါဟာမသင့်တော်ဘူး။ မင်းရဲ့အတွေးအခေါ်ကိုပြောင်းလဲဖို့ငါ့အချိန်ကိုဖြုန်းတီးပစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲဒါဟာမထိုက်တန်ဘူး။ ငါမင်းကိုမသိဘူး၊ မနက်ဖြန်သေရင်ငါဂရုမစိုက်ဘူး၊ ငါ့ကိုမသိဘူး၊ မနက်ဖြန်ငါသေရင်မင်းဂရုမစိုက်ဘူး၊
Manuel ကိုအမှားမလုပ်မိအောင်သတိပြုပါ၊ ကုမ္ပဏီများသည်သူတို့ဖောက်သည်များ၏ခေါင်းကိုစားခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုလုပ်ပြီးပြီဟုသင့်အားစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်မကြိုးစားပါ။ ငါကြိုးစားကြည့်တာကအသိပညာကိုဖန်တီးဖို့၊ အရာတွေကိုသူတို့ဖြစ်သကဲ့သို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့သူတို့ကိုမြင်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။
အမှန်စင်စစ်သင်သည်ငါ့ကိုမသိကြပါနှင့်ငါသည်သင်တို့ကိုမသိရပါဘူး, ဒါပေမယ့်သင်ကတစ်ခုခုသိရသလဲ မင်းသေရင်ငါဂရုမစိုက်ဘူးဘာကြောင့်လဲသိလား ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းလိုစမတ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ကငါလိုလွတ်လပ်မှုကိုတန်ဖိုးမထားဘဲထွက်ခွာမယ်ဆိုရင်ရှက်မိမှာပါ။
၁၀၀% အခမဲ့မဟုတ်ပါဘူး ပုံကြီးချဲ့။ မပြောပါနှင့်၊ များသောအားဖြင့် distros အများစုတွင် blobs နှင့်အတူဘုံ kernel ပါရှိသည်။
ဆိုင်မွန် အိုရိုနို ဟုသူကပြောသည်
iOS ကိုမသိသောကြောင့်အခြေအနေအချို့လိုအပ်သည်။ မေးခွန်းနှစ်ခု:
- Jailbreak သည်ဘာအတွက်အသုံးပြုသနည်း။
- Jailbreak လုပ်ရန်ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်မရှိတော့ကြောင်းအတည်ပြုရန်ဘာပြောင်းလဲသွားသနည်း။
Jailbreak ကိုအက်ပလီကေးရှင်းထဲသို့ ၀ င် ရောက်၍ မရနိုင်သောအက်ပလီကေးရှင်းများမှတစ်ဆင့်အိုင်ဖုန်းတွင်ပုံမှန်မပါ ၀ င်သောလုပ်ဆောင်မှုများကိုရယူသည်။ သို့သော် Cydia ကဲ့သို့သော“ အနက်ရောင်စျေးကွက်များ” မှတစ်ဆင့်ရရှိနိုင်သည် JB သည်နည်းလမ်းတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ သင်၏အက်ပလီကေးရှင်းတွင်အက်ပလီကေးရှင်းများအက်ပလီကေးရှင်း (သွင်းရန်၊ သို့သော်ငွေမသွင်းဘဲ) ကိုထည့်သွင်းရန်။ ယနေ့တွင် iOS သည် JB မှတဆင့်ရရှိသောလုပ်ဆောင်မှုများစွာကိုပေါင်းစပ်ထားပြီးဖယ်ထုတ်လိုက်သောအနည်းငယ်သာယင်းကိုလုပ်ဆောင်ရန်မထိုက်တန်ပါ။ မည်သည့်စက်ပစ္စည်းမှမဆိုဖိုင်များပို့ရန်နှင့်လက်ခံရန်ဖြစ်သည်။ အမှုအရာမှာ instashare (သို့) dukto ကဲ့သို့အပလီကေးရှင်းများအနေဖြင့်ပျော်ရွှင်မှုလုပ်ဆောင်နိုင်မှုကိုရရှိရန် JB အပြင် root ကို xploits မှတစ်ဆင့်ရရှိသောကြောင့်သင်၏ကိရိယာတွင် malware ထည့်သွင်းထားသည်။ ထို့အပြင်မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများသည်စျေးကြီးတော့မည်မဟုတ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့် App Store သို့ခရက်ဒစ်ကဒ်ထည့်စရာမလိုပဲ ၀ ယ်ရန်ထောင့်တွင်သင်ဝယ်ယူနိုင်သည့် iTunes prepaid ကဒ်ကိုသင်ကောင်းစွာအသုံးပြုနိုင်သည်။
ဒက်ဘစ်ကဒ်များသည် iTunes တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်တရားဝင်သည်၊ သို့သော်တခါတရံတွင်၎င်းတို့ကဲ့သို့သော Bluetooth ကဲ့သို့သောအချို့သောလုပ်ဆောင်မှုများကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခြင်းသည်အသုံးပြုခြင်းကိုနှောင့်ယှက်စေသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ငွေကို iPhone အတွက်မထုတ်ပစ်ရန် iPod Touch ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။
Manué, ရပ်နားရန်နီးကပ်မရ, ကသင်ထုံးနှင့်အတူဖြည့်ပါလိမ့်မယ်။ Pandev သည်သူ၏ troll blog post ကိုဖယ်ထုတ်ချင်သောကြောင့်ဒေါသထွက်တော့သည်။
ဟားဟား! xD ဒီ nano မဟုတ်လား။ အိုး ... မင်းဟင်ဟင်မင်းမသိတော့ဘူး
ငါက troll မဟုတ်ဘူး၊ ငါကစူပါပါဝါများနှင့်သာလွန်ထူးကဲသောရှုပ်ထွေးသောလူမိုက်၊ xD လေးစားမှုပိုရှိသည်
အရမ်းရယ်ရတယ်၊ ငါ့အတွက်သူရာထူးကိုယူနိုင်တယ်၊ ဒါကြောင့်သူတို့ကငါ့ကို xD fucking ကိုရပ်လိုက်ကြတယ်။
နင်ဂျာကိုဘယ်တော့မှမ stop တော့ဘူး၊
Elav ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုကျွန်တော်မျှဝေပြီး Ubuntu OS ကိုအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုအဖြစ်ထည့်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့၏ကြောင့်လည်းသင့်ရဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစစ်ဆေးပါ http://blog.xenodesystems.com/2014/03/de-android-ios-cronica-de-una.html ငါအခြို့သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ခဲ့သည်။
သင့်ကိုကျွန်ုပ်နားလည်သည်ဆိုပါစို့၊ သင်သည်နိမ့်နိမ့် Android ထုတ်ကုန်နှစ်ခု မှနေ၍ အဆင့်မြင့် IOS ကိရိယာသို့ပြောင်းလဲသွားပြီးကုန်ကျစရိတ်သည်ယခင် ၂ ခုထက်ကျော်လွန်သည် (အရေးကြီးကြောင်းအချက်တစ်ခုဖြစ်သည့်စီးပွားရေးအကြောင်းပြောခြင်းမဟုတ်ပါ) နှင့်၎င်းပေါ်တွင်အခြေခံသည် မင်းရဲ့စမ်းသပ်မှုကိုလုပ်ခဲ့လား
Ferrari ကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီး bocho ရေတွက်လျှင်၎င်းသည် Beetle အရောင်တောက်ပသည်ဖြစ်စေအရေးမကြီးပါ။ သူတို့သည်ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများသာဖြစ်သည်။ ငါထင်တာကခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဟာအေးစက်ပြီးသင်ဘယ်အပိုင်းကိုအာရုံစိုက်သလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်။ ငါ့မှာ Galaxy tab210 "ရှိတာက iPad ipad ထက်ပိုကောင်းတယ်၊ ဈေးလည်းကြီးတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါ 256MB RAM (သို့) 1GB ရှိမရှိဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် Android နဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါငါပြောခဲ့တဲ့တူညီတဲ့ပြproblemsနာတွေက Android မှာရှိနေတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏အကွာအဝေးပေါ်တိုက်ရိုက် မူတည်၍ သင်၏ဆောင်းပါး၌ပါ ၀ င်သောအချို့သောရှုထောင့်များကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့လိမ့်မည် http://blog.xenodesystems.com/2014/03/de-android-ios-cronica-de-una.html။ သင်မထည့်သွင်းသောမှတ်စုများ။
ငါ၌ Razer i ရှိသည်။ ၎င်းသည် core တစ်ခုတည်းဖြစ်သော်လည်း၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည် - အမြန်အချိုး၊ တန်ဖိုး - လဲလှယ်တန်ဖိုး၊ စျေး - သုံးစွဲမှုသည်အလွန်ကောင်းသည်။ ကျွန်မရဲ့ရည်းစားမှာ iPhone 4s ရှိပြီးသူမ Android ဟာဘယ်လောက်တောင်သိသာမြင်သာပြီးအမြင်အာရုံကိုကြည့်ရတာကြိုက်တယ်။
ငါ Galaxy Tab ၏အမှုအရာကို210” ထားလိုက်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါက၎င်းရဲ့ဘက်ထရီက standby မှာ ၄.၅ ရက်၊ အလင်းသုံးစွဲမှု ၂.၅ ရက်နဲ့ပုံမှန် mode မှာ ၁.၈ ရက်အထိကြာရှည်ခံတယ်ဆိုတာကိုစစ်ဆေးပေးပါတယ်။
ငါ cryptonite သည်နှင့်ရိုးရှင်းသော encfs တွေကို (ဤသည်က Android အပေါ် ported GNU / Linux ကိုမှာထုတ်လုပ်ပြီးဘယ်လို) ဖြစ်ပါသည်အခမဲ့နှင့်စမ်းသပ် application ကိုအသုံးပြုသည်။ စာဝှက်ခြင်းဖိုင်တွဲများအတွက်ကြီးသော (မှတ်ချက် - အနိမ့်အဘို့အကြံပြုသည် Processor ကိုအပေါ်မှီခို -အဆုံး)။
IOS ရှိ Quickoffice နှင့် kingsoft ရုံးများသည် Android ထက်ပိုမိုများပြားသည်။ ထို့ကြောင့်သင်စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုအားတည်းဖြတ်လိုပါက IOS7 ကရုံးဝတ်စုံကိုယူဆောင်လာသည်။
သင်ပစ္စည်းတွေမှာသာမက application ecosystem အတွက်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့စျေးနှုန်းအကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါက RazerI သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုကိုအပြည့်အဝကျေပွန်ပြီး၎င်းသည် iPhone အသစ်ထက်များစွာစျေးသက်သာသည်။
Android ကိုပိုမိုနှစ်သက်သည် (လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခြင်း) သည်သင်ပိုမိုလွတ်လပ်သော rom အတွက်ပြောင်းလဲနိုင်သည်၊ Cyanogen Mod, AOKP, ChaOS ROM ကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်များသည်ကုဒ်ဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်နမူနာအချို့ကိုပေးသည်။ IOS သည်ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ပါ။
အတိုချုပ်ပြောရလျှင် Android နှင့် ios နှစ်ခုစလုံးသည်နုပျိုပြီးအလွန်နုပျိုသောစနစ်များဖြစ်ပြီး၎င်းနှစ်ခုလုံးသည်အခြားအရာများမဟုတ်သည့်အရာများအတွက်အသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမှာကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သည်။ BB OS, TIZEN, Firefox OS၊ Salfish၊ UBUNTU ဖုန်းများ။
ဟုတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်သင်ပြောသမျှအားလုံးကပိုပြီးပုဂ္ဂိုလ်ရေးရှုထောင့်ထဲကိုဝင်သွားတယ်၊ ငါဆောင်းပါးကိုထပ်ထပ်ကိုးကားလိုက်ပါတယ်။ မင်းကမင်းရဲ့ android မှာထောင်ပေါင်းများစွာသောအရာတွေကိုလုပ်ဖို့သင်လုပ်နိုင်တာကိုဆန္ဒအလျောက်သင်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာသင်ယူဖို့ဆန္ဒအလျောက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် သင်ပိုမိုလွတ်လပ်သည် (ဆိုလိုသည်မှာသင့်တွင် ROM ပြောင်းလဲနိုင်သည် (သို့) သင်၏ operating system ကို X, Y နှင့် Z အက်ပလီကေးရှင်းများသို့မဟုတ်သင်လိုချင်သည့်အရာများဖြင့် encrypt လုပ်နိုင်လျှင်) ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်စတင်ရန်သင်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့သင်ယူစရာမရှိဘူး။ ဤအပိုင်းရှိအပိုအင်္ဂါရပ်အားလုံးသည် iOS တွင်ရှိပြီးဖြစ်ပြီးအသုံးပြုသူသည်၎င်းကိုထိပုတ်ပါ။ သူတို့ကသင့်အားညွှန်ကြားချက်များ၊ ကိရိယာများဖြင့်ထောင်ချထားခြင်းနှင့်မတူသည်မှာ၎င်းတို့ကိုသင့်အားသော့ခတ်ထားသောအခန်းထဲ ထား၍ သွားရန်သော့ကိုပေးသည်ထက်သင် (android) ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်ရန်သင်ယူရမည်။ သင်လိုချင်သည့်အချိန်တိုင်း (iOS) ထွက်ပါ။
စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီး Razr တစ်ခုတည်းနဲ့ 1GB RAM ပါ ၀ င်တာကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မစဉ်းစားပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကသင့်ရဲ့ terminal ရဲ့ specs တွေလို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဆိုရင် iPhone 4s ထက်တစ်နေ့တာမှာစွမ်းဆောင်ရည်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာပါဘဲ။ တစ်ခုချင်းစီကသူတို့ရဲ့တယ်လီဖုန်းကိုဘယ်လိုသုံးကြလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမေးပြီးပြီ၊ ငါကအတူတူပဲပြန်သွားပါ၊ အဲဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်ပဲ။
ငါ့အမှု၌ရှိသောစီးပွားရေးသည်အချက် (၂) ချက်အတွက်အသုံးမပြုပါ။
ငါ့မှာရှိတဲ့အိုင်ဖုန်းကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီကလက်ဆောင်ပဲ။ သူထွက်သွားရလို့သူကိုစွန့်ခွာခဲ့တယ်၊ ငါမ ၀ ယ်ခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဝယ်ယူမှုစွမ်းအားကခွင့်ပြုလို့ထွက်လာတဲ့အခါ iPhone6ကို update လုပ်ဖို့ငါစီစဉ်နေတယ်၊ (တူညီသောအရာသို့ပြန်သွားသည်၊ ၎င်းသည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ terminal တစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားတစ်ခုသို့သုံးစွဲခြင်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုမအကျိုးသက်ရောက်ပါကကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်အတွက်ဖိအားပေးနေသောအခြားသူများအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အရာအဖြစ်ထိုရှုထောင့်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ) ။
ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်အကြောင်းငါ android ၏ "ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်" သည်စစ်မှန်သောအခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲကိုမည်သို့ပျက်စီးစေကြောင်းဆောင်းပါး၌ရှင်းပြပြီးဖြစ်သည်။ မင်းက ROM တွေ၊ ငါမေးသမျှအကြောင်းပြောတယ်၊ အဲဒါဘာကြောင့်အားသာချက်တစ်ခုလဲ။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေနှင့်အသုံးပြုသူများသည်ပိုမိုလွတ်လပ်ခွင့် (သို့) လုပ်ဆောင်နိုင်မှုများရှိရန်၎င်းကိုရွေးချယ်စရာမလိုပါ။ ဟုတ်ကဲ့ iOS တွင် "CyanogeniOS" ကိုကျွန်တော်တပ်ဆင်။ မရပါ။ အကယ်၍ သင့်တွင်အိမ်၌ဗီတာမင်ဆေးတစ်လုံးပုံစံရှိပြီး၎င်းကိုသင်သောက်နိုင်သည်ဆိုလျှင်သင်က၎င်းကိုလုပ်တော့မည်ဟုမဆိုလိုပါ။ သူ၌မရှိသောတစ်စုံတစ်ယောက်သည်အရှိန်လျော့သွားသည်၊ စတင်ပါကမည်သည့်အရာမျှမလိုအပ်ပါ။ သူတို့ကောင်းစွာစားလျှင် (သူတို့ကိုငါရှင်းပြလျှင်ငါမသိ) ။
အကယ်၍ သင်မှားတယ်ဆိုရင်ဗဟုသုတကသင့်ကိုပိုပြီးလွတ်လပ်ခွင့်ပေးသည်။ အရာရာကိုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိထားခြင်းကသင့်ကိုပိုပြီးလွတ်လပ်စေသည်။ မည်သည့်ဗဟုသုတကိုမဆိုလျစ်လျူရှုသင့်သည်၊ ကုမ္ပဏီများ (သို့) ကုမ္ပဏီများကသူတို့မလုပ်သင့်သောကုန်ပစ္စည်းများနှင့်အတူလုပ်ရန်ဆင်ခြေပေးကြသည်။
သင်၏အက်ပလီကေးရှင်းကိုပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အချက်ဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်မသိရတာလဲ။ သူတို့ကမင်းတို့ကိုပြောတာကဆော့ဗ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ဒါမှမဟုတ်အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်လို့လုပ်ဖို့လိုတာလဲ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သိပြီးသင်ရောင်းချခဲ့သည့်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုနှင့်ပြုလုပ်လိုပါကကျွန်ုပ်မျှမျှတတလဲလှယ်ရန်ဝယ်ယူလိုက်သည်ဆိုပါကသင်မည်သူကငြင်းဆိုလိမ့်မည်နည်း။ ဒါကျွန်တော့်မေးခွန်းပါ အနည်းဆုံး Android ကသင့်ကိုအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ငါ့အဘို့နှစ်ခုစနစ်များအတူတူပင်ဖြစ်သော်လည်း။ ငါ့ကိုစစ်မှန်တဲ့လွတ်လပ်မှုပေးတဲ့စမတ်ဖုန်းပလက်ဖောင်းကိုငါရှာနေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်ငါမတွေ့သေးဘူး။ ဒါပေမယ့်မျက်လုံးတွေတပ်ဆင်ထားတဲ့တယ်လီဖုန်းတွေရဲ့မျက်လုံးကိုကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော့်ဖုန်းမှာရှိသင့်တဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲအကြောင်းကျွန်တော်ပိုပြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောနိုင်ပါတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကကျွန်တော့်ကိုဆုံးဖြတ်တာဒါမှမဟုတ်သင့်ကိုဥပမာပေးသင့်တာပေါ့။
Firefox OS ကိုသုံးချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံးအလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းကိုမျှော်လင့်နေပါတယ်။
Firefox OS ပါ ၀ င်သောမိုဘိုင်းဖုန်းကိုလည်းကျွန်ုပ်စောင့်နေပါသည်။ ယူရို ၂၂၀ အတွက် gueeksphone သည်အမှန်တရားကိုမကြည့်ပါ - p
Gee, ဒီဆောင်းပါးကအများကြီးကျိုးနပ်ပါတယ်။ အမှန်တရားကတော့အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထင်မြင်ချက်အားလုံးကိုအတူတကွစုစည်းထားတာဖြစ်တယ်။ အမှန်တရားမှာလွတ်လပ်မှုကိုလူတစ် ဦး ချင်းစီနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမှာ GNU / Linux ကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုခုခံကာကွယ်သောသူများနှင့် X နှင့် Y အကြောင်းပြချက်များကြောင့်ထိုသို့သောစနစ်ကိုအသုံးပြုရန်အားပေးသောသူများသည်ကျွန်ုပ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ အထူးသဖြင့် operating system (GNU / Linux) သည်ကျွန်ုပ်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီလျှင်၎င်းငါရှာဖွေနေသည်မှာ - ငါ့အတွက်ပြီးပြည့်စုံတယ်
သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ယုံကြည်မှုများကိုသိရှိထားသရွေ့အခြားသူများက fuck go fuck fucking fuck can can can can can can can can can can @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @> @Josmell သည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။
IOSdev ၏ ၀ ယ်မှုအားတရား ၀ င်အသိအမှတ်ပြုရန်အပြည့်အ ၀ အသုံးချလိမ့်မည် အမြစ်တွယ်နေသောအန္တရာယ်များ (AKA superoneclick) သည်သင်လိုချင်လျှင် OS dev ကိုခွင့်ပြုသည်။
ဟုတ်ကဲ့၊ ဆိုလိုတာက iDevices မှာအဲဒီလိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းမျိုးကိုမလိုအပ်ဘူး၊ (jailbreak နှင့်သင်လိုချင်တာရှိပေမယ့်ဆီလျှော်မှုမရှိပါ၊ အဲဒါကိုလုပ်ဖို့အကြောင်းပြချက်မရှိ) android မှာဘာကြောင့် rooting လုပ်ဖို့လိုသလဲ။ အက်ပ်များကိုအမှိုက်ပုံးထဲဖယ်ရှားပစ်ပါသလား။ (အခန်းအနည်းငယ်ကိုသာဖော်ပြရန်) ယုတ္တိမတန်ပါ။ သင် (ဖုန်းကိုအမြစ်တွယ်ခြင်းကဲ့သို့) လက်တွေ့တွင် "တွန်းအား" ခံရခြင်းကြောင့်သင်တစ်ခုခုလုပ်နိုင်သည်ဟူသောအချက်သည်သင်ပိုမိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်မဟုတ်ပါ၊ စတင်ရန်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းစတင်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ၎င်းသည်လုံးဝဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။
PS ငါ၌ရှိသောကျွန်ုပ် iPhone ကိုမ ၀ ယ်ပါ၊ သူစွန့်ခွာရမည့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကပေးသည်။
သင်၏ဆက်သွယ်မှုသည်ပုံမှန်ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့်သင်၏ Bluetooth ကိုအသုံးပြုသောအခါသင်၏ I-device အတွက် I-device မရှိသင့်သောအလားတူနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ပိုဆိုးတာကသင်သဘောမတူဘူး၊ ငါဟာ Apple ကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့ I-experience ကိုသင့်ရဲ့ I-Devices ကိုနည်းမှန်လမ်းကျခံစားချင်ရင် I-Devices ရှိရမယ်။ ငါအားလုံးကိုဆိုလိုတာပါ။ ၎င်းကိုအလုပ်လုပ်စေရန်အထူး fucking cable တစ်ခုကဲ့သို့ !: P
ငါ၏အလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အထက်တွင်ပြောသည်အဖြစ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းက iPhone ကိုသုံးပြီးမင်းရဲ့လွတ်လပ်စွာဆော့ဖ်ဝဲကိုနှစ်သက်တဲ့ကမ္ဘာရဲ့တစ်ဝက်လောက်ကိုတရားမျှတဖို့လိုတယ်၊ မင်းကမင်းရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုရောင်းပြီးမင်းခံစားချက်ကိုခံစားချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်၊ ငါဟာမင်းကိုယုံကြည်လာအောင်လုပ်နေတာပဲ သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုတရားမျှတ။
@ Jolt2bolt ခင်ဗျားဒီစာမှာပါတဲ့မှတ်ချက်တိုင်းကိုမှတ်ချက်ပေးတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်ဆောင်းပါးနှင့်ကျွန်ုပ်မှတ်ချက်များတွင်ဖော်ပြထားသည့်အရာများကိုဖတ်ပြီးသားဖြစ်ပါကဤနေရာတွင်ထပ်ထည့်စရာမလိုပါသို့မဟုတ်အဘယ်ကြောင့်သင့်အားဖြေဆိုမည်နည်း။ တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးလျှင်သင်လိုချင်သောအရာကိုယုံနိုင်သည် (သို့မဟုတ်မရ)၊ သင်ကသင်သွားလျှင်ကျွန်ုပ်ဂရုမစိုက်ပုံကိုသင်ဂရုမစိုက်ပါ။ သင်တွေးမိသည်မှာမှော်ဖြစ်သည့် (သို့မဟုတ်မပါ) ခင်ဗျားပြောတာထက်ပိုပြီးဘာမှထည့်စရာမလိုတော့ဘူး။
မင်္ဂလာပါ၊ ဤတွင်ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးမှတ်ချက်ဖြစ်သည် (ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးထင်သည်) အကယ်၍ သင်သည် iPhone ကိုဝယ်ယူပြီး Apple အက်ပလီကေးရှင်းဖြင့်နေထိုင်လိုပါကယင်းကိုပြုလုပ်ပါကသင်လွတ်လပ်စွာလုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်လွတ်လပ်ခွင့်အတွက် RMS ကဲ့သို့အရာရာတိုင်း (အားလုံးနီးပါး) ကိုလုပ်ခဲ့သူအားတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြင့်သင်၏ဝယ်ယူမှုကိုမမျှတပါနှင့်။
ခင်ဗျားအတွက်သူဟာမျှတမှုမရှိပေမယ့်အချိန်ကောင်းကသူ့ကိုမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်ခဲ့တာကတော့ NSA ဟာ PRISM ရဲ့ဥပမာတစ်ခုပဲ။ သူပြောတာနှစ်အတော်ကြာခဲ့ပြီ။ ဖုန်းကိုအသုံးမပြုခြင်းကသင့်အားတူညီသောလေယာဉ်ပေါ်တွင်မထားစေပါ။ "ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏လွတ်လပ်မှုသည်ကျွန်ုပ်အားအခမဲ့ဖြစ်သည်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ RMS ကဖုန်းကိုမသုံးတဲ့အပြင် Android မှာလည်းသင်ဟာရှုပ်ထွေးနေသလိုပဲ" ဒါဟာမှားယွင်းတဲ့မှားယွင်းတဲ့သုံးသပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ဝမ်းသာဂုဏ်ယူပါတယ်၊ သင့် iPhone ကို ၀ ယ်လိုက်ခြင်းဖြင့်သင်သည်တရုတ်၊ ထိုင်ဝမ်ကဲ့သို့သောနေရာများတွင်ကလေးအနည်းငယ်ကိုအမြတ်ထုတ်ရန်ကူညီနေပြီးဤကဲ့သို့သောရာထူးဖြင့်သင်က၎င်းကိုအခြေချလိမ့်မည်ဟုမထင်ပါ။
ငါဆင်ခြေတွေအများကြီးမြင်တယ်။ မင်းက "ဆင်ခြေမတောင်းပါနဲ့" လို့ပြောတာမင်းသိပြီးသားပါ ဤသည် GNU / Linux နှင့်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲအကြောင်းဘလော့ဂ်ဖြစ်သည်။ fanboy ဝါဒဖြန့်ချိမှု၌ applesfera ရှိပြီးသားဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ iPhone နှင့်လက်ငင်းလွတ်လပ်ခွင့်အကြောင်းပြောဆိုရန်မလာပါနှင့်သင်၏ code ဘယ်မှာလဲ။ ဟုတ်ပါတယ်, အခြားသူများအဘို့အရာတစ်ခုခုကိုပြုသူ။
အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲတွင်စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုများပါ ၀ င်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်မလွယ်ကူပါ၊ သို့သော်အခြားသူများကိုရယ်မောရန်သို့မဟုတ်စတင်သူများအားရှုပ်ထွေးမှုမရှိပါ။ နောက်ဆုံးမှာတော့မင်းက Miguel de Icaza လိုမျိုးအဆုံးသတ်လိမ့်မယ်။
မင်းက Store ကိုနှစ်သက်ပြီး Free Software ကို Apple ကိုငွေပေးတဲ့အတွက်မင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Elav ပြောခဲ့သလိုမှားယွင်းတဲ့မှားယွင်းတဲ့အမှားအယွင်းတွေ၊ Moto G၊ Cyanogen ပါတဲ့ Nexus နဲ့မင်းရဲ့အဆိုအရ Apple က Android ထက်ပိုကောင်းတဲ့ဖြေရှင်းမှုတွေရှိခဲ့တာကိုမင်းကိုပြောပါလိမ့်မယ်။
Evasive မှတ်ချက်များပြီးနောက် CyanogenMod ။ ဒီကို install လုပ်ရန်အခက်အခဲကိုသင်တွေ့ရှိသောအမှန်တရားကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ http://beta.download.cyanogenmod.org/install
Application တစ်ခုကိုကူးယူပြီး၎င်းကိုသင်၏ pc နှင့် device ပေါ်တွင် run ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အဆုံးမဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နှင့်လုံခြုံမှုရရှိရန်သင်ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ သင်၏အလံသည်လုံခြုံမှုရှိပါက elav ပြောသည့်အတိုင်း FirefoxOS သို့သွားပါ။
သင်ဟာ Google Android ကိုသင့်တော်တဲ့အချိန်မှာဝေဖန်ခြင်းအားဖြင့် iOS ကိုကာကွယ်နေပါတယ် ကျွန်ုပ်သည် iOS ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့ပြီးအလွန်ကောင်းမွန်သောအရာများအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အခြား operating system များမှမည်သည့်နေရာတွင်လွတ်လပ်စွာထုတ်ပေးသည်ကိုကျွန်ုပ်ရှာဖွေနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ သင်၏အငြင်းအခုံမှာအခြား operating systems များတွင်သင်သည်အခြား application များတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။ ကောင်းသောအချက်မှာ ၄ င်းတို့ကို၎င်းတို့ကိုထည့်သွင်းရန်ခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ iOS သည်ဤအပြုအမူအမျိုးအစားကို App Store ၏ကန့်သတ်ချက်များဖြင့်ခွင့်ပြုခြင်းရှိမရှိသိလိုသည်။ ငါနှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့ပြီးပြီ၊ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြီးအကျယ်အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုရှိခဲ့ရင်ငါမသိခဲ့ဘူး၊ ငါသံသယဝင်မိတယ်) ။
အကယ်၍ သင်သည် iPhone ရှေ့သို့လျှောက်ချင်လျှင်လွတ်လပ်မှုသည်အရာရာတိုင်းနီးပါးနီးပါးဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်မထင်သည်မှာကောင်းသည်သင်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ထားသောကိုယ်ကျင့်တရားကိုယုံကြည်ရန်အခြားရွေးချယ်စရာများကိုလုပ်ခြင်းဖြင့်သင်တင်ရန်တင်သည်။
@Evasive - မင်းရဲ့မှတ်ချက်ကအချိန်ဖြုန်းနေတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ့ကုဒ်ကိုဒီမှာကြည့်ပါ။
rooting အကြောင်းရေးသားတဲ့အခါ OS ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများလုပ်ဆောင်နိုင်ရုံသာမက၎င်းကိုလိုချင်ရုံမျှသာမက၊ jailbreak နှင့်ဖြစ်စေ၊ မရှိရင်ဖြစ်စေ Apple က IOS သို့မဟုတ် IOS ကိုမပေးလို့ပါ။ android လောကတွင် firefoxOS, ubuntu စသည်တို့ကို install လုပ်နိုင်သောအချို့သောကွန်ပျူတာများ၌ပင်ကွဲပြားသော system များအကြားပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ဒါကငါ့ရဲ့ android ကိုအမြစ်တွယ်နေအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စက်ရုံကလုပ်သလိုပဲကျွန်တော့်ကိုသူလုပ်သလိုပဲ။ Firefox os (သို့) ubuntu ကဲ့သို့သောအခြား os များအသုံးပြုခြင်းကိုသင်ပြောခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ Apple ကသင့်ကို Iphone ဖြင့်ခွင့်မပြုပါ။ ကားကုမ္ပဏီသည်ကျွန်ုပ်၏ကားကိုညှိရန်သို့မဟုတ်သူတို့၏စိတ်ဝင်စားမှုများနှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်အရောင်ကိုပြောင်းလဲရန်တားမြစ်သည့်အလားဖြစ်သည်။ 😀
စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းပေမယ့်ရှုပ်ထွေးတယ်။ ကျွန်တော်ထင်တာကတော့လွတ်လပ်စွာဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာဟာဆော့ဖ်ဝဲရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ကွဲပြားတဲ့အရာဖြစ်တယ်၊ သင်လွတ်လပ်စွာလုပ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာလုပ်ချင်ရာလုပ်ခွင့်တို့ဖြစ်တယ်။
ဒုတိယအချက်မှာ Linux အသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်ခြင်းသည်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲ၏အတွေးအခေါ်များကိုလိုက်နာသူနှင့်အလွန်ကွာခြားသည်။ ၎င်းသည် open source နှင့်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲအကြားခြားနားချက်နှင့်တူသည်။ လွတ်လပ်သောလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲစာအုပ်တွင်ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားသည်။ "
တတိယအချက် - Android ဆိုတာတစ်ခုလုံးအတွက်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲမဟုတ်ပါ။ kernel linux GPL ထဲမှာပါပါတယ်။ Apache မှာလိုင်စင်ရထားတဲ့အခမဲ့လိုင်စင်ဖြစ်ပြီးစီးပွားဖြစ်လိုင်စင်နဲ့စီးပွားဖြစ်ကုဒ်တွေကိုခွင့်ပြုပါတယ်။ ထိုအကြောင်းပြချက်အတွက်, သူတို့အပေါ်မှာအထက်ပြေးသမျှသောစီးပွားဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ ၎င်းကိုသင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလျှင်မိုဘိုင်းအဆင့်တွင်လွတ်လပ်သော operating system တစ်ခုအနေဖြင့်အကောင်းဆုံးရွေးစရာမှာ firefox OS ဖြစ်သည်၊ သင်သိလိမ့်မည်။
linux အသုံးပြုသူအတွက်သူအသုံးပြုသောပရိုဂရမ်၏လိုင်စင်သည်ဆီလျှော်သည်၊ လွတ်လပ်စွာဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ကိုသူ ပို၍ စိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်။
အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲအကြံဥာဏ်များရှိသောအသုံးပြုသူတစ် ဦး အတွက်သူသည်အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲ၏ထင်မြင်ချက်များနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောဆော့ဖ်ဝဲကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုလေ့ရှိပြီးသူက Android သို့မဟုတ် IOS များပေါ်တွင် Firefox OS ကိုရွေးချယ်လိမ့်မည်။
ကွဲပြားခြားနားသောအသုံးပြုသူတစ် ဦး အတွက်ဤဆွေးနွေးမှုသည်အကျိုးရှိသည်။ အကြောင်းမှာသူသည်ဆော့ (ဖ်) ဝဲ၏လွတ်လပ်မှုကိုမစဉ်းစားသောကြောင့်၊ လွတ်လပ်စွာဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်နှင့်ရုတ်တရက်သူသည်လွတ်လပ်သောအချိန်၏လွတ်လပ်မှုကိုသူ၏ OS ထက် ပို၍ စိတ်ဝင်စားပါက
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် linux အသုံးပြုသူဖြစ်ခြင်းသည်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲအတွေးအခေါ်များကိုထောက်ခံသူနှင့်မတူပါ။ ၎င်းသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်မှာလူ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနယ်ပယ်များစွာကို အသုံးချ၍ ၎င်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ရှုပ်ထွေးစေသည်။
လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်အသုံးပြုသူအမျိုးအစားဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းစွာသိထားပါကအခြားမည်သည့်အသုံးပြုသူအမျိုးအစားကိုသိနိုင်မည်၊ Linux အကြောင်းပြောဆိုသောဆိုဒ်တိုင်းကိုစိတ်အားထက်သန်စွာလေးစားသူမှပြုလုပ်သည်ဟုမမှားပါစေနှင့်။ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲစိတ်ကူးများ၏။
၎င်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းထားပါ။ လူတစ် ဦး စီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလေးစားပါ။ သို့မဟုတ်သင်မလေးစားပါကသင်လိုချင်သည့်အသုံးပြုသူအမျိုးအစားနှင့်တစ် ဦး တည်းလမ်းလျှောက်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်မသက်မသာဖြစ်စေ၊
သင်၏ထင်မြင်ယူဆချက်အချို့ကိုကျွန်ုပ်သဘောမတူသော်လည်းအခြေခံအချက်ကိုကျွန်ုပ်သဘောတူပါသည်။ မူလလွတ်လပ်မှုသည်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်၏အတွင်းစိတ်ဖြစ်သည်။ တစ်စုံတစ် ဦး သို့မဟုတ်အုပ်စုတစ်စု၏ထင်မြင်ယူဆချက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လွတ်လပ်မှုသဘောတရားကိုဖြစ်ပေါ်စေပါကကျွန်ုပ်တို့သည်လွတ်လပ်ခြင်းကိုအလိုအလျောက်ရပ်တန့်သွားစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောသို့မဟုတ်ပိုမိုဆိုးရွားသည့်ရလဒ်များကိုရလဒ်ကောင်းများဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်နိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ချင်းအယူအဆအပေါ် မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏လွတ်လပ်ခွင့်ကိုကျင့်သုံးနေပြီး၎င်းတွင်အမှားများနှင့်အမှားများပြုလုပ်နိုင်သည့်လွတ်လပ်မှုလည်းပါ ၀ င်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးအခေါ်ကိုအခြားသူများအားဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးလျှင်၊ ထိုသူများသည်အခြားသူများ၏အကောင်းဆုံးရည်ရွယ်ချက်များဖြင့်ပြည့်နှက်နေသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုရပ်စဲလိုက်သည်။
ချာလီ - ဘရောင်းမှမှတ်ချက်ပေးရန် ၁ ။
လွတ်လပ်မှုကိုရွေးချယ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်တယ်၊ အဲဒီရွေးချယ်မှုမှာအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနဲ့စီးပွားဖြစ်ဆော့ဗ်ဝဲကိုငါရွေးနိုင်ရမယ်။ အကယ်၍ သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုမော်ဒယ်လ် ၂ ခုထဲကတခုခုချမှတ်ရင်သူတို့ကငါ့ရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုကန့်သတ်ထားတယ်။
စမတ်ကျသောအရာမှာလိုင်စင်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ၄ င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်များသည်သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်မည်သို့မည်ပုံလိုက်လျောညီထွေဖြစ်မည်ကို မူတည်၍ software ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲသည်၎င်းမှကျွန်ုပ်လိုအပ်သောအရာများကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါကကျွန်ုပ်အတွက်အသုံးမဝင်ပါ။
အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲမှလွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားသည်ဆိုပါက ... သီအိုရီအရဆိုရသော်၎င်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုကြေငြာသူမည်မျှသည်အမှန်တကယ်ဆော့ဝဲလ်၏ဆိုးရွားသောအခြေအနေကိုကြည့်ရှုနိုင်၊ ဖြည့်ဆည်းနိုင်စွမ်းရှိသနည်း။ အကယ်၍ သင်ထိုအရာကိုနားလည်ရန်နှင့်ပြုပြင်မွမ်းမံရန်မစွမ်းနိုင်လျှင်ကော။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Libreofficce နဲ့ MS-Office တို့ရဲ့ပျမ်းမျှသုံးစွဲသူတွေလိုချင်တဲ့အရာ၊ လိုချင်တာနဲ့လုပ်နိုင်တာကကွာခြားချက်ကဘာလဲ၊ စာတွေရေးတာ၊ တင်ဆက်တာကိုကြည့်ပြီးတွက်ချက်မှုလေးခုလုပ်တာ။ စာရင်းဇယား? သင်နှစ် ဦး စလုံးနှင့်အတူတူပင်လွတ်လပ်မှုရှိမည်ဟုယုံကြည်ပြီးတစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်မှာ၎င်းသည်အခမဲ့ရရှိမည်ဖြစ်ပြီးအခြားတစ်ခုက၎င်းအတွက်ပေးရမည့်အရာဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုမော်ဒယ်လ် ၂ ခုထဲကတခုခုချမှတ်ရင်သူတို့ကငါ့ရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုကန့်သတ်ထားတယ်။
အဘယ်သူသည်သင့်ကိုတစ် ဦး တစ်ယောက်သို့မဟုတ်အခြားပုံစံတစ်ခုချမှတ်သနည်း။ Apple ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများသည် hardware အဆင့်တွင်သူတို့၏ OS ကိုသာတပ်ဆင်ရန်ဖိအားပေးသည်သို့မဟုတ်၎င်းကိုဖျက်ပစ်ရန်နှင့်သင်လိုချင်သောအရာအားလုံးကို install လုပ်ရန်အတားအဆီးမရှိသောအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ?
အကယ်၍ သင်သည်ဤဆော့ဖ်ဝဲကိုသင်လိုချင်သည့်အတိုင်းနားမလည်၊ ပြုပြင်နိုင်ခြင်းမရှိပါကလွတ်လပ်မှုကသင့်ကိုမည်သို့ပေးသနည်း။
သင်လုပ်ရန်အခြားသူတစ် ဦး အတွက်သင်ငွေပေးနိုင်သည်။
သင်၏အရာအားလုံးကိုသင်၏နောက်ကျောတွင်သယ်ဆောင်။ အခြားမြို့တစ်မြို့သို့ပို့ဆောင်။ မရပါကလွတ်လပ်စွာကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကသင့်အားဘာပေးသနည်း။ ကောင်းပြီ, သင်လုပ်ဖို့အခြားသူတစ် ဦး အဘို့အပေးဆောင်နိုင်ပါတယ်။
“ ... မင်းဟာမင်းရဲ့ခံစားချက်တွေကိုလွတ်လပ်စွာခံစားနိုင်မယ်လို့ထင်တယ် "... လွတ်လပ်မှုနှင့်လွတ်လပ်ခြင်းသည်အလွန်ကွာခြားသည်။ XP မှ7သို့ပြောင်းရွှေ့သောအသုံးပြုသူများသည် win7တွင်မ run သောသူတို့၏ Office version ကိုလွတ်လပ်စွာမခံစားရတော့ပါ။
သူက၎င်းကို“ ယေဘုယျ” ရှုထောင့်မှပြောခဲ့သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၊ အက်ပဲလ်ကသင့်အားဘာမှလုပ်ရန်မဖိအားပေးသည်၊ သင် ၀ ယ်သည်မ ၀ ယ်သည်ကိုသင်ဆုံးဖြတ်သည်။ သူတို့ကသင့်အားစီးပွားဖြစ်ဆော့ဝဲလ်ထည့်သွင်းနိုင်သည်၊ မထည့်သည်ကိုမပြောသောအချက်ဖြစ်သည်။ ပြproblemနာမှာလူများဖြစ်သည်။ ရပ်ရွာများ၊ လိုင်စင်များနှင့်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲ၏ "တာလီဘန်" အသုံးပြုသူများသည်သင့်အားသူတို့လုပ်ရန်မျှော်လင့်သည့်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ရန် "သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်အရသင့်အားအတင်းအကျပ်စေခိုင်းသည်။ " ဘယ်သူမှသင့်ကိုလာဖမ်းပြီး "GNEWSENSE DAMN ကိုထည့်သွင်းပါ။ " သို့သော်ဖိအားများရှိနေပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်အသစ်ရောက်ရှိလာသူများအတွက်မူ၎င်းသည်အလွန်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသည်။
ဒီနေရာမှာဘယ်သူမှ ၀ ယ်သင့်မသင့်အကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ သူတို့ကဟာ့ဒ်ဝဲကိုသာအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ဆော့ဗ်ဝဲအကြောင်းပြောနေတာလေ။
ပစ္စည်းကိရိယာများကိုသင်ဝယ်ယူပြီးလျှင် OS ကို iPhone သို့ ပြောင်းလဲ၍ မရပါ။ ဒါကမည်သည့်ဖိအားထက်ကျော်လွန်တတ်၏။
LOL အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲအကြောင်းပြောသောလွတ်လပ်ခွင့်နှင့်မည်သို့ပတ်သက်သနည်း။
အလေးအနက်ထားပြောရရင်၊ မင်းကအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲအကြောင်းပြောမယ်ဆိုပါစို့၊ အနည်းဆုံးတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပါတ်သက်ပြီးအနည်းငယ်ဖတ်ဖို့လိုတယ်။
တဖန်သင်တို့ကသူ့ကိုမဝယ်ဖို့အတင်းအကျပ်သွားမည်နည်း သင်« iDiot »ကို ၀ ယ်ရန်လွတ်လပ်မှုကိုဖယ်ရှားပေးသည်။
သို့သော်၎င်းသည်လွတ်လပ်သောဆော့ (ဖ်) ဝဲနှင့်အလွန်သီးခြားပြissueနာဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်မှုသည်ကုဒ်နှင့်သာသက်ဆိုင်သည် (၎င်းကိုမျှဝေရန် (သင်အလိုရှိပါက)၊ ၎င်းကိုမည်သို့ပြုပြင်ရမည် (သင်အလိုရှိလျှင်) နှင့်ထိုလွတ်လပ်ခွင့်များကိုဆက်လက်တည်တံ့စေရန်မည်သို့သူတို့လိုက်နာရမည်စသည်တို့ဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုယ်သူတို့) ။
သူသည်စက်ဝိုင်းများဖြင့်စတင်စကားပြောပြီး ၀ ယ်နိုင်သည်၊ မဝယ်နိုင်ပြန်သည်။
တကယ်တော့ Manuel ကသူကမင်းကို (၀ န်ထမ်းတွေ) ကို iLoqueSea မဝယ်ဖို့မင်းကိုအတင်းအကျပ်တိုက်တွန်းတယ် သင်၌ ၀ ယ်ယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲနှင့်ရွေးချယ်မှုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအသုံးပြုသောဤအရာများကိုလုံလောက်စွာရယူပါ။
သူတို့သည်အမေရိကန်လွတ်လပ်ခွင့်နှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုကိုအမှန်တကယ် (နှင့်သက်သေပြနိုင်သူများ) အားအဆီဟင်းရည်များပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်အသုံးပြုသူများကိုရှုပ်ထွေးစေသည်။
Snowden နဲ့ NSA ကိုဘယ်သူမှမမှတ်မိဘူးလား
Stallman ဖြောင့်ခဲ့သည် !! ဘာသာရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးစနစ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးမဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့၏အခွင့်အရေးများအကြောင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုမည်သည့်အချိန်တွင်နားလည်ပြီးနားလည်အောင်ပြုလုပ်မည်နည်း။
ငါဒီ post ကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေတယ်ဟုယူဆသည်။
“ ကျွန်မတို့တိုင်းပြည်ကကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်ဘဝမှတားမြစ်ထားလို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေနိုင်ပါတယ်။ အလွန်ရက်စက်သောတိုင်းပြည်ပါတကား! ငါလိုချင်သလောက်ကျွန်များကိုအခမဲ့ ၀ ယ်ယူချင်သည်။ ဒါလွတ်လပ်မှုပါ။
“ ဘယ်သူမှငါ့ကိုပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းမရှိဘဲထောင်ထဲကိုသွားဖို့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုမပေးပါဘူး။ သူတို့ကကျွန်တော့် ဦး နှောက်ကိုကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်ပြီးထောင်အပြင်ဘက်မှာငါတို့လွတ်မြောက်ပြီ၊ ငါထောင်ကိုသွားချင်တယ်၊ ငါ့ကိုဒီလွတ်လပ်ခွင့်ကနေမဖယ်ရှားပါနဲ့ !!
အကြံဥာဏ်များမည်မျှလွဲမှားစွာဖော်ပြခြင်း၊ ချုံပတ်ပတ်လည်၌ရိုက်နှက်ခြင်းကိုသင်ရပ်တန့်နိုင်မည်နည်း။ သူတို့ကကျွန်စနစ်ဥပမာတွေကိုပြပြီးပြီ။
သူဘာပြောနေတာလဲဆိုတာကိုနားလည်ဖို့အရမ်းခက်သလား။ အချင်းလူတို့၊ လွတ်လပ်မှုသည်စိတ်ကူးစိတ်သန်းတစ်ခုတည်းကိုသာခွင့်ပြုသကဲ့သို့абстрактသည်။ Manuel မှာအချက်တစ်ချက်ရှိတယ်။ iPhone ကသင့်ကိုထိန်းချုပ်မှုအဆင့်မှာများများလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုထားတယ်။ အရာရာကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကျွမ်းကျင်စွာထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ် ဇာတိ android မဟုတ်လား၊ အဲဒါကပိုပြီးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုပြသလား။ ဟုတ်ပါသည်၊ မဟုတ်ပါ၊ အသုံးပြုသူအားစနစ်အတွင်းသို့ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုခွင့်ပြုသော်လည်းကုန်ကျစရိတ်သက်သာပါသည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် android သည်ဘုရားသခင်၏အစာမဟုတ်ပါ။
သင်ဘာကိုရယ်မောစေတာလဲသိလား။ ရှုထောင့်တစ်ခုနှင့်တည်ရှိပြီးဖြစ်သောတည်ငြိမ်မှုအရှိဆုံးအယူအဆကိုအခြေခံသည့်အတွေးအခေါ်တစ်ခုကိုပြသရန်ကြိုးစားရန်သူတို့စုဝေးခဲ့သောဤပစ္စည်းအားလုံးသည်လွတ်လပ်မှု ...
Morpheus ဤဆောင်းပါးများ၏လုံလောက်သော? ၎င်းတို့အပေါ်မှတ်ချက်ပေးခြင်းကိုရပ်တန့်ပါ၊ သူတို့ကိုမကျွေးပါနှင့်၊ မှတ်ချက်များပိုများပါ၊ SEO ပိုရှာပါ၊ google တွင်နေရာချပါ၊
ခင်ဗျား၊ ဆောင်းပါးတပုဒ်ရေးတဲ့အခါအငြင်းပွားတာကိုမခံပါနဲ့၊ နှစ်တွေတစ်လျှောက်မှာရပ်ရွာဟာအတုအယောင်ပညာတတ်တွေ၊ ခိုးယူသူတွေ၊ ပြည့်နှက်နေတယ်။
လွတ်လပ်မှုကိုစိတ္တဇအယူအဆတစ်ခုအဖြစ်ဖော်ပြပြီးတဲ့နောက်သင်ကိုယ်တိုင်အတွေးအခေါ်၏အခြေခံအဖြစ်ဖော်ပြခြင်းအားဖြင့်သင်ဟာဆန့်ကျင်ဖက်ထဲကျသွားတယ်။ အယူအဆဟာဘာသာရပ်ပြင်ပမှာအတိအကျဖြစ်တဲ့အခါ OOP လေ့လာခြင်းကဒီအကြောင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြသင့်တယ်။
ထို့နောက်မေးခွန်းမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းလွတ်လပ်သောဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) သည်သင်အမှန်တကယ်လိုက်နာရန်မလိုချင်သောအခြေအနေများကိုလိုက်နာရန်အတင်းအကျပ်ပြုသည်၊ GPL ၏ "ဒီအခြေခံပေါ်မှာဘာမှမပိတ်နိုင်" genial သို့သော်ထိုအမှု၌ကျွန်ုပ်သည်ထိုအပိုဒ်ကိုဆန့်ကျင်။ ဘာမှမပါရှိသော်လည်း“ မင်းကိုမင်းမကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုလုပ်ဖို့မင်းကိုတားမြစ်ခြင်းအားဖြင့်မင်းရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုငါကာကွယ်ပေးတယ်” ဟူသောဆန့်ကျင်မှုဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံရမည်။ နောက်ကျောနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲဤအရာအားလုံး၌စိတ္တဇများစွာရှိလျှင်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးအတော်အတန်ပုဂ္ဂလဒိive္ if ရှိလျှင်ငါမြင်သောအရာကိုသူတစ်ပါးမြင်ခြင်းမရှိကြပေ။
@staff လွတ်လပ်မှုအကြောင်းပြောသောအခါ RMS သည်ဥပဒေနှင့်ဆိုင်သောရှုထောင့်များကိုသာကန့်သတ်ရန်လိုသည်။ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲမတိုင်မီ Open Source ပေါ်ပေါက်ခဲ့လျှင်သင်နှင့်သဘောတူညီလိမ့်မည်
ငါ RMS သည်ဤနှင့်အတူဘာလုပ်ရမှန်းမသိ, ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အပြောခဲ့တယ်။
သို့သော်ကျွန်ုပ်မည်သို့ပင်ဖြေကြားပါစေ၊ လွတ်လပ်သောဆော့ဝဲလ်လှုပ်ရှားမှုဖန်တီးရန်အကြောင်းရင်းမှာလူ့အခွင့်အရေးနှင့်မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာအငြင်းပွားမှုများတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်ဟု RMS ကပြောကြားခဲ့သည်။ သငျသညျသူတို့ကိုခေါ်သကဲ့သို့, Ethereal အရာများရှာဖွေနေစရာမလိုဘဲဥပဒေများအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုအဆိုပြုထားသောလူများနှင့်ပြည့်ဝ၏။ (ကျွန်စနစ်ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ၏အခွင့်အရေးများ။ )
၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်၏သက်သေသာဓကများနှင့်၎င်းကိုယုံကြည်ရန်အကြောင်းပြချက်များ (လွတ်လပ်မှု (၄) ခုအနက်မှမည်သည့်အရာမျှထပ်မံပြောဆိုခြင်းမရှိသည့်အပြင်)
အကယ်၍ သင်သို့မဟုတ်အခြားသူတစ် ဦး ဦး ကမဟုတ်ပါကသက်သေပြရန်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးသည်သင်၏အပေါ်တွင်ကျသည်။ အကြောင်းမှာအရူးတစ် ဦး အားအရူးဟုခေါ်ခြင်းသည်တာလီဘန်၊ ပါဝါဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်း၊ သက်သေအထောက်အထားမရှိပဲအဘိဓာန်တွင်လည်းနာမတော်၊
လွတ်လပ်မှုဆိုတာဘာလဲဆိုတာမသိတဲ့တူညီတဲ့စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လာကြတာပါ။ လွတ်လပ်မှုဟာအဆုံးမဲ့၊ အကန့်အသတ်မရှိ၊ တစ်ခုခုလုပ်နိုင်စွမ်းနှင့်အတူတူပင်။
ဒီမှာ, သင်၏ caliber ၏ aberration ကိုဖတ်ရှုနိုင်သည်
"အကယ်၍ သင်ဟာ x အမှုအရာလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ သင်ဟာ x အရာတွေလုပ်ရမယ်၊
ဤကဲ့သို့သောအရာနှင့်အတူတူပင်ဆင်ခြင်တုံတရားလည်းရှိသည်။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်သည်အရွယ်မရောက်သေးသူများအားအလွဲသုံးစားရန်ဆန္ဒရှိလျှင်၎င်းသည်သူတို့လုပ်ရမည်။
သင်သည်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုသတ်နိုင်သော်လည်း၎င်းတွင်လွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါ။ (သူ၌အသက်ရှိသည်။ ) ထိုလွတ်လပ်ခွင့်သည်သင့်ကိုကျွန်အဖြစ်မဖြစ်စေ၊ သင်၏လွတ်လပ်ခွင့် (အကန့်အသတ်မရှိသော) ဆုံးရှုံးခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။
ထို့ကြောင့်လွတ်လပ်မှုသည်စိတ်ရှုပ်ထွေးသောအယူအဆတစ်ခုဖြစ်သည် (ဆိုလိုသည်မှာရှုပ်ထွေးမှုသို့မဟုတ်ရှင်းလင်းချက်မရှိဘဲ) နှင့်၎င်းသည်အကြောင်းအရာထက်ကျော်လွန်သောကြောင့်ဖြစ်သည်
ဥပဒေပြed္ဌာန်းခြင်းမရှိသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်၎င်းသည်အစပိုင်းတွင်ရှုပ်ထွေးပုံပေါက်သည်။ ထို့ကြောင့် OOP အကြောင်းကျွန်ုပ်ပြောခဲ့ပြီးသောအသုံးအနှုန်းများသည်ပိုမိုနားလည်နိုင်လိမ့်မည်ဟုသင်ကပရိုဂရမ်မာများအနေဖြင့်စိတ္တဇအတန်းအစားကိုအသုံးချနိုင်သည်ဟုသင်သိသည်။ အရာဝတ္ထုတစ်ခုသို့ (ဤကိစ္စတွင်၎င်းသည်ဘာသာရပ်ဖြစ်လိမ့်မည်) သို့သော်၎င်းနှင့်လုံးဝမပတ်သက်ပါ၊ ၎င်းသည်အရာဝတ္ထုတွင်အကောင်အထည်ဖော်မှုပင်မလိုအပ်ပါ၊ ၎င်းတို့သည်ယေဘူယျ၊ တိကျသောမဟုတ်ပါ၊ သူတို့၏နည်းစနစ်များသည်အဆုံးမဲ့သို့မဟုတ်အကန့်အသတ်မရှိ။
အကယ်၍ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမြင်ပါက၊ ယခုတွင်လွတ်လပ်မှုသည်လူတစ် ဦး စီ၏စကြဝtheာ၏အယူအဆသဘောတရားနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရပြီ။ သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်သင်၌ရှိသည်မဟုတ်၊ ပြင်ပတွင်ကြေငြာသည်။ ၎င်းသည်လူတိုင်းအတွက်အကျိုးပြုသည်၊ ၎င်းတွင်သင်၌အဘယ်သို့ပြုစေချင်ပါစေ၊ အခြားသူများထံမှသင်မယူဆောင်သွားနိုင်ခြင်းနှင့်၎င်းသည်သင်မတတ်နိုင်သောကြောင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးစေသောအဓိကကန့်သတ်ချက်များရှိသည်။
"သင်၏လွတ်လပ်မှုကိုကျွန်ုပ်ကာကွယ်သည်၊ အခြားသူများ၏လွတ်လပ်ခွင့်နှင့်အတူတူပင်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို Nano စကြာ ၀ universeာ၏ဗဟိုချက်မယုံကြည်ပါ" XD
သင် ၀ ယ်ရန်သို့မဟုတ်မ ၀ ယ်ရန်လွတ်လပ်ခွင့်ရှိသည်၊ “ ငါဖတ်၊ မဖတ်ဘူး” ဟူသောအချက်နှင့်ထိုဆောင်းပါး၌ရှင်းပြရန်ကြိုးစားသည့်အရာမှာ၎င်းသည်ကြီးမြတ်သည်။ လွတ်လပ်ခွင့်။ ဆော့ (ဖ်) ဝဲမှတစ်ဆင့်သင်အသက်ရှင်နေထိုင်လိုပါက၎င်းကိုထင်မြင်ချက်များမှတဆင့်အသက်ရှင်နေထိုင်လိုပါက၎င်းကိုနေထိုင်ပါ။ လွတ်လပ်စွာ။
ငါဒီ post အပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်ရှိမရှိမသိခဲ့ပါ။ စာရေးသူသည်ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသောအရာများကိုသူသို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်မည်ဖြစ်သော်လည်းလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်စာရေးသူအားကျွန်ုပ်လေးစားသည်။
ဆွေးနွေးမှုများအမြဲတမ်းအလှည့်အပြောင်းဖြစ်စေ၊ ၎င်းတို့သည်အမြဲတမ်းအစဉ်အဆက်ဖြစ်ပေါ်နေသည့်အချက်များနှင့်ငါမှတ်ချက်ပေးမည့်အချက်များရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ အမြဲတမ်းငါ့အမြင်ကနေ။
တစ်ခုမှာလွတ်လပ်မှုကဲ့သို့သောစိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးသည့်စကားလုံး၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်မှုအမျိုးမျိုးကိုမကြာခဏရှုပ်ထွေးလေ့ရှိသည် (ဆိုလိုသည်မှာလည်းမရေရာဒွိဟ) ။ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာ operating system လိုမျိုးရိုးရှင်းတဲ့ကြီးမားတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်။
နောက်တစ်ခုကလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် Android သို့မဟုတ် iOS အကြားတွင်အခြားသူများအကြားရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဒီရွေးချယ်မှုကလူအများစုရဲ့ထင်မြင်ချက်နဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးငါ့ကိုပိုပြီးလွတ်လပ်စေမှာမဟုတ်ဘူး။ ၎င်းသည်ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသောအရာကိုဖုံးကွယ်ရန်ရိုးရိုးဆေးလိပ်သောက်မျက်နှာပြင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီများကဝယ်လိုအားကိုဖန်တီးသည်၊ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကမရှိခဲ့သည့်လိုအပ်ချက်များကိုဖန်တီးကာ၎င်းကို“ တိုးတက်မှု” ဟူသောစကားလုံးအောက်တွင်ဖုံးကွယ်ရန်ကြိုးစားသည်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်သူ့ကိုမှမထိတ်လန့်စရာပါ။ အလွန်နည်းပါးသောကြောင့်ထိုအဖြစ်မှန်အောက်တွင်လွတ်လပ်မှုဟူသောစကားလုံးကိုဖော်ပြကြသည်။ ၎င်းအစားကုန်ကြမ်းတစ်ခုခုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အခြားတစ်ခုထက် ပို၍ ကောင်းမွန်သည်ကိုမှင်မြစ်များကိုကျွန်ုပ်သွန်းလောင်းသည်၊ ၎င်းသည်၎င်း၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုတွေ့ရှိလိုက်ခြင်းကကျွန်ုပ်တို့အားအပြစ်ရှိသည်ဟုထင်မြင်စေသည်။ ထိုအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သမျှအဆိုးဆုံးဖြစ်သည်၊ ၎င်းတို့သည်ရိုးရှင်းသောထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြောင်းနှင့်၎င်းတို့သည်မည်သည့်အရာကိုမဆိုကိုယ်စားပြုခြင်းဖြစ်ကြောင်းမမေ့ပါနှင့်။
အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်အကျိုးအမြတ်ကိုသာလိုလားသောကုမ္ပဏီတစ်ခုအပေါ်တွင်မှီခိုရန်မဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာများကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိသောကြောင့်အခမဲ့ software ကိုကာကွယ်ကြသည်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော့်အဖြစ်အပျက်မှာကုမ္ပဏီတွေကိုသူတို့လမ်းညွှန်ဖို့မလိုအပ်ဘဲ (ဥပမာ Debian, Linux Mint, ArchLinux, Manjaro, KaOS နှင့်အခြားအများကဲ့သို့) အားမိမိတို့၏အချိန်ကိုအပြောင်းအလဲတစ်ခုခုပြုလုပ်ရန်မိမိတို့၏အချိန်ကိုမြှုပ်နှံထားသောလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများရှိခြင်းကိုကျွန်ုပ်အလွန်နှစ်သက်သည်။ ။ သို့သော်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲသည်ကျွန်ုပ်၏အမြင်တွင်အသိပညာကိုဖန်တီးရန်နှင့်သင်၏ဘဝကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းအဖြစ်နားလည်ထားသောလွတ်လပ်မှုသည်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြသရန်အတွက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုမမေ့ပါနှင့်။ အဲဒါကိုရယူပြီးကာကွယ်ဖို့ကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်လွတ်လပ်မှုရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးလို့တော့မထင်ပါနဲ့။
ကျွန်ုပ်၏မှတ်ချက်သည်မည်သူမဆိုနှောင့်ယှက်ပါကစိတ်မကောင်းပါဘူး ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးတော့ဘာမှမဖြစ်သည့်ရုန်းကန်မှုများကိုပင်မြင်တွေ့ရတော့သည်။ သင် iPhone, Windows သို့မဟုတ်အခြားအရာများကိုအသုံးပြုလိုပါသလား။ ရှေ့ဆက်သွားပါ။ သို့သော်ကြောင်၏ခြေလေးချောင်းသည်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကကျွန်ုပ်တို့ကိုအခြားတစ်ခုထက် ပို၍ လွတ်လပ်စေသည်ဟုထင်မြင်ရန်မကြိုးစားပါနှင့်၊ အကြင်သူသည်နွားမှထွက်လာသောသူကို Utopian ဖြစ်သည်။
ငါမကြာသေးခင်က Linux သုံးစွဲသူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ငါဟာ Windows ထဲကနေအများစုလိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တယ်။ Windows ကအရာရာတိုင်းကိုလွယ်လွယ်ကူကူလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာငါတို့အားလုံးသိကြတယ်။
ဤထင်မြင်ချက်များကိုအသုံးပြုသူမှ Linux သို့ပြောင်းလဲရန်လှုံ့ဆော်မှုအချို့ကိုမြင်သည်။ သူသည်လွတ်လပ်မှုဆိုင်ရာအခင်းအကျင်း၏ "ရှုပ်ထွေးမှု" နှစ်ခုလုံးကိုကြောက်။ လွတ်လပ်မှုမရှိသောရူးသွပ်သူအမြောက်အများအားပြောနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
လွတ်လပ်ခွင့်သို့မဟုတ်ဆော့ဖ်ဝဲ၏လွတ်လပ်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ပူပန်ခြင်းအားရပ်တန့်ကြပါစို့။ အခြားဆော့ဝဲလ်များစွာရှိသည်ကိုသိရှိထားသောအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲအားပိုမိုလက်ခံလာစေရန်တိုးမြှင့်ကြပါစို့။ လူသိများသောရုံး ၀ င်းဒိုးအသုံးပြုသူများသည်ပုံနှိပ်ခြင်းအပိုင်းကိုစိတ်မဝင်စားကြပါ။ လိုင်စင်သည်၎င်းတို့ကိုအနည်းဆုံးစိတ်ဝင်စားစေသည်။ အဓိကစိုးရိမ်စရာမှာ ၄ င်းသည်၎င်းတို့ကိုအစေခံရန်နှင့်သူတို့အသုံးပြုသောစီးပွားဖြစ်ဆော့ဗ်ဝဲနှင့်လိုက်ဖက်ညီမှုရှိမရှိဖြစ်သည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ Windows ကနေပြောင်းလာပြီးအဲဒါကိုမလိုအပ်ဘူး (ကစားဖို့တောင်မှမ) ။
@Arturo တွင်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်ရှိသည်။ သို့သော် trolls များသည်ဤမှတ်ချက်များကိုကျော်သွားသည်။ /
၎င်းသည်သင်ကိုယ်တိုင်လှည့်စားလိုသောအချက်ကိုမျှတစေသည်၊ သို့သော်သင့်တွင်အရင်းအမြစ်များနှင့်ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ရှိပါက၎င်းကိုပေးသည်။ သို့သော် Stallman၊ သုံးစွဲသူများ၊ အတွေးအခေါ်နှင့်အခြားအရာများကိုဆန့်ကျင်။ မရချေ ငါက X ဘောလုံးအသင်းနဲ့တူတယ်၊ သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုအပြစ်တင်မယ်ဆိုရင် Y ရှပ်အင်္ကျီဝယ်လိုက်တယ်၊
မင်းထင်တာကတော့မင်းကိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုထောင်ထဲမှာရွေးချယ်ရတာသက်သက်သာသာနဲ့ရှုပ်ထွေးစေခဲ့တယ်။ မင်းညာဘက်ကိုရောက်နေပြီ၊ Apple ကဒါကိုကြိုက်တယ် surely
android မှ iOS အထိ android သည်အကျဉ်းထောင်တစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံးတော့ကျွန်ုပ်အတွက်တော့၊ ကျွန်ုပ်ပိုမိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ခံစားရသော်လည်းဒီအချက်ကိုမည်သူမျှမပြောင်းလဲနိုင်ပါ။
မင်နီယိုမဟုတ်ပါ၊ မင်းတစ်ခုခုမှားနေတာပဲ။ မင်းတို့ဘယ်လိုပဲကြည့်ကြည့်၊ နှစ်ယောက်စလုံးဟာအကျဉ်းထောင်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ မည်သည့်အရာ၊ အပြော၊ ပြောစကားပေါ် မူတည်၍ နှစ် ဦး စလုံးသည်ထောင်တစ်ခုကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်ကိုယ်စားပြုလိမ့်မည်။ အဲဒါလွယ်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်မှတ်ချက်ကိုကိုးကားသည်မှာ“ ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး တစ်ယောက်မျှကယ်တင်ခြင်းမခံရသော်လည်း” ကျွန်ုပ်သတိပြုမိသည်။ ငါထင်တာကတော့ Android မှာအသုံးပြုသူကသူတို့ကလွတ်လပ်ခွင့်အများကြီးကြေငြာပေမဲ့အသုံးပြုသူကပိုပြီးသော့ခတ်ထားတယ်။
အိုင်ပက် ၂ နှင့်နဂါးငွေ့တန်းတစ်ခု၏ပိုင်ရှင်အနေဖြင့်၊ သင်ထင်မြင်သည့်အရာများထက်အခြားသူများကိုကျွန်ုပ်အပါအ ၀ င်၊ ငါ့ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်ဟုကျွန်ုပ်မထင်ပါ။
Itunes (မင်းရဲ့ xenode post ကိုရိုးရိုးသားသားဖတ်ပြီးပေမဲ့လည်း libgpod က ipod touch4ကိုချိတ်ဆက်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲတစ်နှစ်နီးပါးကြာအောင်ထားခဲ့တယ် (အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တွင်တစ်ခုလည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုမေ့သွားရင်))
ဝိုင်ဖိုင်မရှိရင်ကိရိယာတွေအကြားဆက်သွယ်မှုကမွေးကတည်းကပါ။ ကျွန်တော့်အားလပ်ရက်တွေထဲမှာနဂါးငွေ့တန်းမရှိသေးဘူး၊ ဝိုင်ဖိုင်မရှိဘူး၊ ဖိုင်အချို့ကိုဖိုင်တစ်ခုမှတစ်ခုသို့လွှဲပြောင်းဖို့လိုအပ်တယ်၊ ကျွန်ုပ်၏မှတ်စုစာအုပ်နှင့်ဟော့စပေါ့ကို set up လုပ်ပြီးဖိုင်များလွှဲပြောင်းရန် "Documents" ကိုသုံးရသည်။ ဤအများနှင့်အခြားမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံများအဘို့ငါသူတို့ကအကောင်အထည်ဖော်ပုံကိုမုန်း
"Share" ခလုတ်၊ အမှန်အကန် ... IOS မှာမျှဝေရန်ရွေးချယ်စရာအနည်းငယ်သာရှိတယ်။ ဒီ Android ခလုတ်ကိုကျွန်တော်အံ့သြသွားစေတဲ့အရာတခုခုရှိရင်၊ မျှဝေဖို့ရွေးချယ်စရာအရေအတွက်ကဒီခလုတ်ကိုအရှိန်မြှင့်လိုက်တယ်။
နောက်ဆုံးအနေနှင့်ကျွန်ုပ်၏နှိမ့်ချသောအမြင်ကိုယုံကြည်သည်မှာဆောင်းပါးသည် IDevices ၏“ နှစ်သိမ့်မှု” နှင့်“ အသုံးဝင်မှုရှိခြင်း” ၏သဘောသဘာဝအရလွတ်လပ်မှုကိုအကဲဖြတ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်မြင်သည်၊ သူတို့၏ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်ကျွန်ုပ်အတွက်မှားသည်၊ 6-speed gearbox နှင့် reverse သည်အမြန်နှုန်း ၆ ဆင့်တွင်သင်သည်အမြန်နှုန်းကိုတိကျစွာထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးနောက်ပြန်လှည့်ရန်မလိုပါက 3-speed gearbox နှင့်ပြောင်းပြန်မရှိသောကားတစ်စီးထက်ပိုမိုလွတ်လပ်သည်။ နောက်ပြန်လှည့်ထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်ပြန်တွန်းရန်ဆင်းပါ ...
PS: ငါ xD သဲမုန်တိုင်းကြီးလာတော့မယ်လို့ခံစားရတယ်
Instashare ကသင့်အား iDevices သို့ Wi-Fi မရှိဘဲနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာမျှဝေခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ iTunes ကိုလုံးဝမလိုအပ်ဘူး၊ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲဒါကိုမသုံးပါဘူး။ ကြွင်းသောအရာ၏, လူတိုင်းသူတို့လိုချင်သောအရာကိုထင်၏။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ၊ ပိုမိုကြီးမားသော share ခလုတ်သည်ကျွန်ုပ်စက်ပစ္စည်းတစ်ခုပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်ဂရုစိုက်သောအရာအားလုံးနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်စွမ်းရည်တစ်ခုနှင့်မတူပါ။ သို့သော်လူတိုင်းတွင်သူတို့၏လိုအပ်ချက်များရှိသည်။
အလွန်ကောင်းသောဆောင်းပါး။ သင်ကဲ့သို့သောသူတစ် ဦး က“ ငါ” တွင်အမှတ်များကိုထည့်ထားသည်မှာအမှန်တရားမှာပျောက်ကွယ်နေပြီ။ အနမ်းများစွာသည် x နှင့် y တို့နှင့်အလွန်လွတ်လပ်သည်ဟုထင်မြင်သူများရှိသည်။
ငါ wildebeest စနစ်ကိုတစ်နှစ်ကျော်သိပြီ၊ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ၏အတွေးအခေါ် (ငါ့ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်နှင့်လုံးဝသဟဇာတဖြစ်သောထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏အကြောင်းနှင့်ကိုက်ညီမှု / လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ခြင်း) နှင့်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကောင်းသည် ငါကကန့်ကွက်နိုင်သောအချက်တစ်ချက်ကိုမတွေ့ရပါ။ ၎င်းကိုမုန်းရန်အကြောင်းပြချက်မရှိခဲ့ပါ။ ၎င်းသည် ipod touch4ရှိသူကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသူသေဆုံးသောအခါ5သို့သွားပြီးဆဲလ်ဖုန်းကိုကျွန်ုပ်မသုံးပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတံခါးကိုလာတဲ့အသံကငါ့ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ပေးတယ်။ ငါသူ့ကိုဒါမှမဟုတ်အီးမေးလ်ကနေတစ်ဆင့်တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ဆက်သွယ်ရမယ်ဆိုရင်ငါတိုက်ရိုက်အနှောင့်အယှက်ပေးတယ်။
ပထမ ဦး ဆုံး iPod ၏ခေတ်တွင်ပန်းခြံ၏ဝိုင်ဖိုင်မှတစ်ဆင့် ၀ က်ဘ်ကိုသုံးနိုင်ရန်အပြင် podcast ပုံစံဖြင့်ပါဝင်သည့်အရာများကမ္ဘာကြီးကိုဖွင့်ပေးသောထိုကိရိယာသည်မည်မျှသက်တောင့်သက်သာရှိပြီးစွမ်းအားကြီးမားကြောင်းကျွန်ုပ်စွဲမှတ်ခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်းဆိုသည်မှာပစ္စည်းရရှိရန်ငါ့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ခဲ့သည်။
တစ်နေ့မှာဗီဒီယိုဂိမ်းကစားဖို့ပရိုဂရမ်းမင်းကိုလေ့လာဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ကအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့အတူကျွန်တော်ခံစားခဲ့ရတဲ့ဝေဒနာ၊ နာကျင်မှုနဲ့အင်တာနက်ကိုထိန်းချုပ်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးကိုစမ်းသပ်ပြီးပြီးချင်းငါလွှင့်လိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ linux mint လို့ခေါ်တယ်၊ xp နဲ့ဆင်တူတဲ့အရာတစ်ခုကိုငါရှာတယ်၊ အဲဒါကငါ့ကိုကောင်းကောင်း vibes တွေမပေးခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒါကိုအလွယ်တကူပရိုဂရမ်သွင်းနိုင်ရင် distros အနည်းငယ်ငါ debian6နဲ့အတူနေတယ်။
gnu ကိုအာရုံစူးစိုက်ပြီးပြီဆိုရင် ios လို့ခေါ်တဲ့ corral ကိုအက်ပလီကေးရှင်းများ (အရုပ်၊ ကစားရုံမျှသာမက၊ ကြော်ငြာများ၊ ဝယ်ယူမှုများနှင့်မည်သည့်ထိန်းချုပ်မှုမှမရှိသော) အပြည့်အ ၀ မပါဝင်သောလျော့နည်းသွားသည့်ပရိုဂရမ်ကို စ၍ သိရန်မလွှဲမရှောင်သာဖြစ်သည်။ ရူပဗေဒနှင့်သက်သောင့်သက်သာရှိမှု၊ ပလက်ဖောင်း၏တံခါးပိတ်ခြင်း၊ “ အသစ်ပြောင်းခြင်းများ” ကြောင့်လည်ပတ်မှုယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းနှင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးသောအသုံးပြုသူစာချုပ်အားဖြင့်အဆုံးသတ်ခြင်းကိုသင်ဖတ်ပါကကြောက်စရာကောင်းပြီးသင်မှထွက်လာသည့်အရာများကိုလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်ဟုသင်သတိပေးကြောင်း သူတို့ရဲ့ဘောလုံးတွေသူတို့လက်ထဲကထွက်လာရင်သင်လက်မခံတဲ့အခါပစ္စည်းတွေကိုစတိုးဆိုင်ကိုပြန်ပို့ပါ။ အဲဒါကိုအသုံးမပြုသင့်ဘူး။
android ၏ဘေးထွက်တွင်မြင်ကွင်းကျယ်သည်မလွယ်ကူပါ။ google ကသင်မပိုင်ဆိုင်သောအရာများ (pivacity, gmail, youtube, g +, android ကိုယ်တိုင်) ကိုသယ်ဆောင်လာခြင်း၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောလမ်းဖြင့်ငါ့ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခြေအနေဘယ်လိုရှိသလဲငါ Intel ၏ပစ္စည်းကိရိယာများရောက်ရှိလာခြင်းကိုစောင့်ဆိုင်းလိမ့်မည် (သို့မဟုတ်) ကျွန်ုပ်အားကပ်ထားသည့်အရာများကိုကျွန်ုပ်တပ်ဆင်နိုင်သည့်ဖြန့်ဖြူးမှုအသစ်ကိုကြိုးစားသကဲ့သို့ရိုးရိုးလေးပါ။
လိုင်စင်များနှင့်စပ်လျဉ်း။ gpl သည်တစ်ခုတည်းသောအမှန်တကယ်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အားအခြားသူများအားအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုဖြတ်တောက်ခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည်၊ သင်ဖန်တီးထားသောအသိုင်းအဝိုင်းကိုသင်အသုံးပြုပါကသင်ပြန်လာပြီးရပ်ရွာအသိပညာကိုဖြည့်ဆည်းရမည်။ မင်းလိုချင်သည်ဆိုလျှင်လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ပိုင်ရှင်၊ ဘုရင်၊ သမ္မတသည်သင့်အပေါ်မူတည်သည်။ ) တည်ဆောက်သူသည်သူလိုချင်သောလိုင်စင်ကိုရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သို့သော် MIT အမျိုးအစားကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်နောက်ဆက်တွဲတိုးတက်မှုများသည်ဘာမှအထောက်အကူမပြုရ။ သူသည်ရပ်ရွာ၏အသင်းဝင်အဖြစ်တာ ၀ န်ကိုချိုးဖောက်သည့်နေရာဖြစ်သည်။
အသုံးပြုသူသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုမဟုတ်ဘဲပိုင်ရှင်အားကျွန်ုပ်ခေါ်နိုင်သည့်စနစ်တစ်ခုရှိခြင်းသည်အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံး၏လုပ်ဆောင်မှု၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်စနစ်အားထိန်းသိမ်းထားပြီးတိုးတက်စေလိုပါကဆန့်ကျင်သောကိရိယာများအသုံးပြုခြင်းကိုမြှင့်တင်ရန်သင်မသွားနိုင်ပါ ထိုကဲ့သို့သောစံပြရန်။
မင်းဘာလုပ်နိုင်လဲ ကောင်းပြီ၊ ဒါကဂိုဏ်းမဟုတ်ဘူး။ System အကြောင်း shit ကိုဘယ်လိုပြောနိုင်မလဲကောင်းပြီ၊ အကယ်လို့သင်ဟာပရိုဂရမ်အသစ်များအတွက်ဖန်တီးထားတဲ့အရာအားလုံးကို (ios-android) သင့်ကိုယ်ပိုင်အကျိုးအတွက်သာအသုံးချလိုလျှင်သင်ဘာကိုဆိုလိုသည်ကိုသင်နားမလည်နိုင်ပါ။
Android ဟာပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ် OS ဖြစ်တယ်၊ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲမဟုတ်ဘူး။ ထို့အပြင် iOS သည်အချို့သောကိစ္စရပ်များအတွက်ပိတ်ထားသည့်အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပြီး Android ထက်ပိုမိုတင်းကျပ်သည်။
“ အခြားသူများ၏ချည်နှောင်ခြင်းမှလွတ်ကင်းပါ။ သမ္မာကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသလို ... »
Linux မှ။ iOS ကိုသုံးပြီးအခမဲ့ဖြစ်ရအောင်။
Psss .. DesdeLinux နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ ဒီဆောင်းပါးကိုကျွန်တော်အတည်ပြုလိုက်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ post (ထက်အချို့ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်ကောင်းသည်) သည်ငါသိသောမှတ်ချက်များကြောင့်ထုတ်လုပ်တော့မည်ဖြစ်သည်။ 😛
သေချာတာပေါ့, ကြည့်ဖို့ဘာမျှမ! ငါပြောတာက sarcasm နဲ့ပါ။ ဒါပေမယ့်အမှန်တရားကတော့စီးပွားဖြစ်ဆော့ဗ်ဝဲကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဘလော့ဂ်ရဲ့ကြွေးကြော်သံသာမကဘဲသင်ဤမျှကာလပတ်လုံးလုပ်ဆောင်ခဲ့သောကြီးကျယ်တဲ့အလုပ်များကိုဆန့်ကျင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ဖတ်ရှုခြင်းတွင်အကျယ်ပြန့်ဆုံးဖတ်ရှုခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုယူမှတ်ခြင်းသည်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမှာကြီးမားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ကိုးကားထားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်အခြားသူများ၏အတွေးအခေါ်များကိုတည်ဆောက်ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့သည်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်နေထိုင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ချင်းစီတွင်သီးခြားနေထိုင်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်ပိုင်ကောက်ချက်ဆွဲနိုင်သည်။ သို့သော်အခြားသူများ၏တန်ဖိုးရှိသောအလှူငွေများကိုသူတို့ကြွယ်ဝစေရန်အတွက်ယူခြင်းသည်ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သည်၊ လုံးဝယုတ္တိကျသည်၊ မဟုတ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အစမှအစပြုမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ကဏ္ aspects အားလုံးတွင်လုပ်ဆောင်ပြီးမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှလွတ်လပ်မှုကိုမဆုံးရှုံးပါ။
ငါ post ကိုမကြိုက်ဘူး အမှန်တရားကတော့ဒေါသမထွက်ပါနဲ့၊ ဒါပေမဲ့အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲလှုပ်ရှားမှုနဲ့သူရဲ့အကြံဥာဏ်တွေကိုတိုက်ခိုက်သူတွေကကာကွယ်သူတွေထက်သင်ထုတ်ဝေတဲ့ရေးသားချက်များပိုများနေသည်။
ထောင်ပေါင်းများစွာသောအတွေးအခေါ်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသောလူအစုအဝေးတစ်ခုသို့တံခါးများဖွင့်ပေးခြင်းသည်သူတို့၏ခေါင်းပေါ် မှနေ၍ ပြေးနေသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ OpenSource မှအရာများကိုအခမဲ့ဆော့ဝဲလ်၏အတွေးအခေါ်နည်းလမ်းထက်ကြည့်ရှုရန်လက်တွေ့ကျသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ စီးပွားဖြစ်ထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးဆက်များကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်ဂရုမစိုက်ပါ၊ အကြောင်းမှာ၎င်းကိုကျွန်ုပ်ကမ်းလှမ်းထားသောကြောင့် ။
trolls (?); P ကို
အမှန်တရားနှင့်အသိပညာတို့ကလူကိုလွတ်မြောက်စေသော်လည်းသူ၏ဝေဖန်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုအားမလွတ်မြောက်စေပါ။ အဆိုပါဂုရုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်စနစ်ကိုဆက်လက်။ သိုးထိန်းကိုသင်ပြောင်းလဲသော်လည်းသင်ဟာသိုးဖြစ်နေဆဲပင်။
ကျွန်တော့်ခေါင်းဆောင်က Zaratrusta ပါ
စိတ်ဝင်စားစရာမှာ RMS သည်အဓိကအားဖြင့်ပြောထားသည်မှာ -
“ လွတ်လပ်မှုဆိုတာကရွေးချယ်ခွင့်အနည်းငယ်ကိုရွေးချယ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘဝကိုထိန်းချုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာမင်းရဲ့ဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်ကြောင်းဘယ်သူမှရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး၊ ပိုင်ရှင်လည်းမရှိဘူး။ »
သူပြောသည့်အခါသူသည်သူ၏အတွေးအခေါ်များကိုဖော်ထုတ်နေသည် (သူ၏အကြံအစည်သည်သင် XD ကိုပင်နာခံမှုမရှိလျှင်ပင်) ။
ထို့ကြောင့်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲ၏နောက်လိုက်များဟုခေါ်သောထိုသူများသည်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲနှင့်သဘောမတူညီကြပါ၊ အကြောင်းမှာ Stallman က၎င်းတို့အားပြောသူမှာမည်သူ့ကိုမျှမလိုက်နာရန်ဖြစ်သည်။ ထိုမျက်မမြင်ဝါသနာရှင်များသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်ပြီးသူ၏အတွေးအခေါ်များကိုဆန့်ကျင်ကြသည်။
သိလိုသည်မှာ Zarathustra တွင်အောက်ပါအချက်များမပါ ၀ င်လိုပါ။ သို့သော်မည်သူမျှ RMS ကိုမလိုက်နာပါကသူသည်သူ၏အကြောင်းတရားဆုံးရှုံးသွားပြီဟုခံစားရလိမ့်မည်။
ဟုတ်ကဲ့၊ ဒါပေမယ့် Zaratrusta ဟာသူ့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တည်မှုဆိုင်ရာပြproblemsနာများအထူးသဖြင့် TRANSCEND ရဲ့ဖြေရှင်းနည်းကိုရှာဖွေရာတွင်ဇာတ်ကောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်စကြဝuniverseာမှထွက်ခွာသွားသည့်ဘီလီယံနှင့်ချီသော (ထိုအရာကို Sagan ကြား။ :)) လူသားတို့၏ထိုအချိန်က ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းသာတည်ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းနှင့်မျက်လုံးမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်တွင်၎င်းတို့တည်ရှိနေမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိကြသည်။ အားလုံးသူရဲကောင်းများနှင့်စစ်သူရဲတို့ကိုမေ့လျော့။
ထို့ကြောင့် RMS အနေဖြင့်ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသောသူများအတွက် Transcendence သည်မသက်ဆိုင်ပါ။
သေချာတာပေါ့၊ သူဟာတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်မှုနဲ့လုပ်သမျှကိုတခြားသူတွေလိုလုပ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူကသူ့ရည်မှန်းချက်ကလွတ်လပ်မှုနှင့်စုပေါင်းအသိပညာကိုသာထောက်ခံတယ်ဆိုရင်နစ်ရှေးကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့သလိုပဲ
၎င်းသည်ဒုတိယသို့မဟုတ် megayear ဖြစ်စေ၊ Planck အချိန်ဖြစ်စေတိုင်းတာရန်သင်ယူသောတိုင်းတာခြင်းယူနစ်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
နောက်တစ်ခုက Kantian egoism ကိုခင်ဗျားရည်ညွှန်းနေတာလား။ ဆိုလိုသည်မှာအလိုဆန္ဒ (သို့) တိမ်းညွတ်မှုမှဖြစ်ပေါ်လာသည့်လုပ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ငါရာခိုင်နှုန်းပြောနေတာကြောင့်, အတိုင်းအတာဆီလျှော်သည်တစ်နှစ်၏ 10%, 1 ရက်၏ 10% ရက်ပေါင်း 365 ရက်, 8760 မိနစ် ... ငါပုံပျက်သော, ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်ကန်ထရိုက်၏အာကာသအချိန်အကြောင်းပြောနိုင်, ဆွဲငင်အားများသည်ဒြပ်ထုများ၏ဒြပ်ထုတစ်ခုအနေနှင့်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်သည်တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်မှုကိုလူ့သဘောကဲ့သို့သောဆင်ခြင်တုံတရားဆိုင်ရာအတွေးအခေါ်တွင်နေရာတစ်ခုထားရှိရန် (ဒါဝင်၏အဓိပ္ပာယ်အရ) ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောသဘာဝဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။
လွတ်လပ်ခွင့်ကိုဒphilosophနိကဗေဒ၊ ပုဂ္ဂလဓိelement္ဌာန်ကျကျအသုံးချသည့်အခါ၎င်းင်းတို့၏အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းပြတ်သားသည့်ဥပဒေရေးရာနှင့်ဥပဒေရေးရာပြasနာကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲ၊ ဤဆောင်းပါးများ၏အဓိကပြproblemနာသည်ရှုပ်ထွေးမှု (ပိုမိုရှုပ်ထွေးမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသော) ဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုအပြည့်အ ၀ လိုက်နာရမည်။ ၎င်းတို့အားတရားသေအယူဝါဒများနှင့်သူတို့၏အစွန်းရောက်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူများအဖြစ်မခေါ်ဆိုနိုင်ပါ။
လွတ်လပ်မှုအပေါ်မှီခိုမှုအားဖြင့်ပြောခြင်းကပိုကောင်းသည် (ကျွန်ုပ်သည် X အပေါ်မည်မျှမှီခိုရကြောင်း၊ ထိုမှီခိုမှုကိုမည်သို့လျှော့ချနိုင်မည်နည်း၊ မည်သည့်အန္တရာယ်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်များကိုကျွန်ုပ်ထမ်းဆောင်သင့်သနည်း) ဖြစ်နိုင်သည်။
၎င်းသည်လိုင်စင်များအကြောင်းပြောနေခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ကုမ္ပဏီများ၏ကံကြမ္မာကိုလွှမ်းမိုးသည့်ဥပဒေ၊ ဥပဒေရေးရာနှင့်ဥပဒေပြaနာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုပြည်နယ်ကိစ္စရပ်တစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ရမည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ နိုင်ငံရေးအရမှေးမှိန်နေသောreရိယာသို့ရောက်သောအခါ၎င်းကိုတူညီသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်သာဓကတစ်ခု ထား၍ ဤကိစ္စရပ်များကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်သင့်သည်ကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြပေးနိုင်သည်။
ပြီးတော့ Apple ကသင့်ရဲ့ device ကို "control" လုပ်တဲ့ရွေးချယ်မှုတွေအားလုံးနဲ့သင့်ကွန်ပျူတာကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ လေးစားမှုအပြည့်ဖြင့်သင်မသိနိုင်သောတံခါးပိတ်ကုဒ်ရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်၏ပို့စ်တွင်ခါးအဒေါ်၏စကားကိုကျွန်ုပ်နားထောင်နေပုံရသည် -“ ဒီမိတ်ဆွေတွေကမင်းအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကြောင့်မင်းဒီလိုထင်တယ်”၊ လူများနှင့်၎င်းသည် "ခေါင်းဆောင်" ဖြစ်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ အချို့သောအတွေးများဖြင့်တွေးတောသောတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတစ် ဦး သာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝအပေါ်အခြားသူများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်အလွန်ပြင်းထန်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ယခုအချိန်တွင် ၀ င်းဒိုးမှစာရေးခြင်းဖြစ်သည်။ ငါ trisquel ရှိပါက Skype ရှိ webcam တွင်မိန်းကလေးများကိုကျွန်ုပ်မည်သို့မြင်သနည်း။ ကျွန်ုပ်ပို့ချပေးသော matlab, atpdraw, ဖိုင်များကိုမည်သို့ run သနည်း။ ငါ Windows တွေသီးသန့်ရှိတယ်ဆိုတာသိတယ်။ ဒါကြောင့်ငါတကယ်လွတ်လပ်ခွင့် ၁၀၀% အခမဲ့အခမဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုရတော့မယ်ဆိုလျှင်၊ ငါ့အတွက်တန်ဘိုးတစ်ဝက်အခမဲ့ linux ဆိုတာကတကယ်ကိုရွေးချယ်စရာမဟုတ်ဘူး၊ ငါစဉ်းစားခဲ့တဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းတွေရဲ့။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၌မိုဘိုင်းဖုန်းမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်ခေါင်းဆောင်၏အကျင့်ကိုချဲ့ကားပြောဆိုခဲ့သည်၊ ခေါင်းဆောင်သည်သင့်အားအမှန်တရားကိုမသိစေလို။ ၊ ကင်းကွာနေစေလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ users.A half-free gnu / linux သည်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် teeologies နှင့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာဆန့်ကျင်နေလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းအခြားသူတစ် ဦး ကဲ့သို့စဉ်းစားခြင်းသည်သင်သည်လွတ်လပ်ခြင်းမဟုတ်ဟုမဆိုလိုပါ။
“ အိပ်ပျော်တဲ့အခါတကယ်သေပြီးနောက်တစ်နေ့မှာအသက်ပြန်ရှင်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ ”
ငါနှင့်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောသဘောတရား (၂) ခုခွဲရန်ကျွန်ုပ်လိုအပ်သည်ဟုထင်ရသည်။
လွတ်လပ် (ဒphilosophနိကဗေဒ) - ကျွန်ုပ်သည်ဤအရာကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရန်မရည်ရွယ်ပါ။ သို့သော်ဆောင်းပါး၏အဆိုကိုကျွန်ုပ်လုံးဝသဘောတူသည်။
အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) - RMS မှစတင်မိတ်ဆက်သောအယူအဆသည်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောဆော့ဖ်ဝဲကိုမည်သည့်လုပ်ရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ထိန်းချုပ်မှုရှိရန်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့မလိုချင်သောအရာများကိုပြုလုပ်ရန်ခွင့်မပြုခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုစွမ်းအားအပေါ်တွင်ပိုမိုအာရုံစိုက်သည်။ ကြိုက်တယ်။ ဒီအချက်ကိုလွတ်လပ်မှုလို့ခေါ်နိုင်တယ်၊ အဲဒါကိုဆော့ဗ်ဝဲကနေအာဏာ (သို့) စွမ်းရည်ရဖို့မဟုတ်ဘဲ၊ လင်းနို့ချက်ချင်းလက်ငင်းတောင်းခံနိုင်သည့်အရာမဟုတ်ပါ၊ အခမဲ့။
တကယ်တော့၊ ငါဟာငါအသုံးပြုတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုဘာမှမသိဘူး၊ ဒါပေမဲ့ငါနေတဲ့နေရာမှာစီးပွားဖြစ်ဆော့ဗ်ဝဲကိုတားမြစ်ထားတယ်ဆိုရင်လွတ်လပ်မှုကိုဆုံးရှုံးသွားတယ်။ ဒါကငြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်သည်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ၏အကြံဥာဏ်ကိုနှစ်သက်သည်။ ၁၀၀% သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုကိုရရှိနိုင်သည်ကိုမတွေ့ရသော်လည်းကျွန်ုပ်သည် GNU / Linux ကို ၁၅ နှစ်ကျော်အသုံးပြုခဲ့သည် (အချို့သောစီးပွားဖြစ်ထုတ်ကုန်များနှင့်အတူ) ကျွန်ုပ်သိသည်။ ကြောင်း၏အခမဲ့စဉ်းစားမရနိုင်ပါ။
Firefox OS သည်ကတိထားရာ (မိုဘိုင်း) မြေဖြစ်သည်။
ဆိုလိုတာက windows ကသင့်ကို linux ထက်ပိုပြီးလွတ်လပ်ခွင့်ပေးတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ firewall ကို "Little Buttons" နဲ့ configure လုပ်နိုင်တယ်။ "SUDO" နဲ့ထူးဆန်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသုံးစရာမလိုဘူး။
(((အသုံးပြုသူများသည်၎င်း၏ source code ကိုရရှိနိုင်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်၎င်း၏ဒီဇိုင်းကိုလေ့လာ၊ ပြင်ဆင်နိုင်သည်၊ တိုးတက်နိုင်သည်။ )))
ဆဲလ်ဖုန်း၊ လက်တော့၊ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးသို့မဟုတ်တက်ဘလက်တစ်ခုတွင်ဖြစ်စေ၊ "လွတ်လပ်မှုကို" ကို Operating System မှပေးမထားပါ။ လျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်လည်းလွတ်လပ်မှုကိုသင်၏အသိပညာ (နားလည်မှု) ကပေးပါသည်။ မင်းလုပ်တဲ့အရာ
အကြံပြုချက် ၃ ခု -
၂။ ကုလသမဂ္ဂ၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကို ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးလူ့အခွင့်အရေးကြေငြာချက်တွင်မည်သည့်အခွင့်အရေးများနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်များရှိသည်။
၃။ FSF ကိုရပ်ပြီးအခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်မည်သည့်တစ်ခုတည်းသောလွတ်လပ်ခွင့် (၄) ခုရှိသည်ကိုကြည့်ပါ။
လွတ်လပ်မှုဆိုတာငါတို့လိုချင်တာကိုလုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ လွတ်လပ်မှုသည်အကန့်အသတ်မဲ့မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်တင်းကြပ်သောဥပဒေများလိုအပ်သည်။
- လွတ်လပ်ခွင့်ကိုတီထွင်ပါ၊ သို့မဟုတ်လွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်လိုအရာများနှင့်ရောထွေးပါ။
- အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲနှင့်ဆက်စပ်သောအရာအဖြစ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုရှုပ်ထွေးစေခြင်းကဲ့သို့သောအမှားများ။
“ ပြTheနာက၊ အကယ်၍ သင်သည် Apple ထုတ်ကုန်တစ်ခုကိုဝယ်လျှင်၊ (ဥပမာ) သင်က Apple ကိုပေးနေသည်၊ သင် FSF ၏စကားလုံးကိုကြွေးကြော်ပြီး gNewSense GNU / Linux ကိုအသုံးပြုလျှင်၎င်းသည်မှန်ကန်သည်ဟုယုံကြည်သောကြောင့်အလျှော့ပေးလိုက်လျောခြင်းဖြစ်သည်။ Stallman ရန် ဝိရောဓိ, မှန်သလော အဲဒါမိုက်မဲတာပဲ
သင်ပေးပြီးသောပစ္စည်းကိုထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့် Apple သည်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်သည်။
FSF ၏စကားလုံးကို (သင်ခေါ်ဆိုသည်) ကြေငြာခြင်းသည်မည်သည့်လွတ်လပ်မှုကိုမျှခြိမ်းခြောက်ခြင်းမရှိပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်၏ကိရိယာကိုသင်လိုချင်သောအတိုင်းဆက်လက်သုံးစွဲနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သို့မဟုတ် "Stallman ကိုပေးကမ်းခြင်း" ဖြင့်သင်သည်အမေရိကန် embargo ဖြင့်တိုင်းပြည်တစ်ခုတွင်ယင်းကိုသင်ရောင်းနိုင်တော့မည်မဟုတ်လော။
အကယ်၍ သင်သည်တစ်စုံတစ်ခုကိုခုခံကာကွယ်သွားမည်ဆိုပါက၎င်းသည်မှန်ကန်သည်ဟုသင်ယုံကြည်သောကြောင့်၎င်းကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်ခံယူချက်ဖြင့်ပြုလုပ်ပါ။ အခြားသူတစ် ဦး ကသင့်အားအကြံဥာဏ်တစ်ခုရောင်းချသောကြောင့်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်အရေးအကြီးဆုံးအချက် - ရှာဖွေ။ ဖော်ထုတ်ရန်၊ သူတို့ပြောသမျှကိုယုံကြ။
တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အိုင်ဖုန်းသည်“ ပိုမိုလွတ်လပ်သော” (သို့) သင်၏ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်များနှင့်လုပ်လိုသည့်အတွေးအခေါ်နှင့်သင်ပြုသကဲ့သို့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြံဥာဏ်များကိုအမြဲတမ်းဝယ်ယူသည်။
« Manuel Escudero: စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရှင်။ ဒီဇိုင်း၊ ဓာတ်ပုံနှင့် / သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်နှစ်သက်သောအရာများကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအသုံးချသည့်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုခုဖြင့်ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ကျွန်ုပ်ကြိုးစားသည်။ »
လူ့အခွင့်အရေးသည်တစ်စုံတစ် ဦး ၏စိတ်ဓာတ်မကျပါ။ သင်ကပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ၏စိတ်ကူးကိုဝယ်သည်မဟုတ်၊ သူတို့ဟာရာစုနှစ်များစွာဆက်ပြီးငြင်းခုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးကွန်ပျူတာဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ် ၂၀ ကျော်ကငါတို့ဘဝရဲ့ကဏ္ aspects အားလုံးအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်ခဲ့တယ်။ ဒီဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုမှာ FSF မှအဆိုပြုထားသောသက်ရောက်မှု၏သက်ရောက်မှုများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အရေးကြီးသည်။ ဘယ်သူမှသင့်ရဲ့ခေါင်းကိုသေနတ်မတင်ဘူး၊ ဒါကြောင့်စီးပွားဖြစ်ဆော့ဗ်ဝဲကိုသင်မသုံးဘူး။
Manuel Escudero သည်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိကြောင်းပြောသောအခါသူက "ဒါနှင့်ဒါဟုဆိုသည် ... " ဟု ထပ်မံ၍ ထပ်မံပြောဆိုခြင်းမရှိဘဲ၊ ငြင်းဆိုခြင်းမရှိဘဲဆန့်ကျင်ဘက်ပြုခြင်းမရှိဘဲစကိတ်ဖြင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းကိုလမ်းညွှန်ခြင်းမပြုခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။
နေရာတကာမှာရှိတဲ့လူတွေကဒီ (သို့) အဲဒီဘရောင်ဇာကအကောင်းဆုံးလို့ပြောတာကိုငါမကျေနပ်ဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်၊ သူတို့က browser ကသူတို့အကောင်းဆုံးလို့ပြောတဲ့ကြွေးကြော်သံကိုထပ်ခါတလဲလဲပြောဆိုခြင်းဖြင့်ထွက်လာသည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်လူကြိုက်များမှုပြnotနာများမဟုတ်ပါ။
ပြီးတော့ဒီဆောင်းပါးမှာ Android ကိုအခမဲ့လို့ပြောသူတွေလည်းအတူတူပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Google ကပြောတယ် (ဒါမှမဟုတ် Ubuntu သူလျှိုတွေ၊ Stallman ကပြောတာ။ ) ။ iPhone ကဘာလို့လဲဆိုတော့အခမဲ့မဟုတ်ဘူး။ damn Apple) သင်ငွေပေးချေသည့်စက်ကိုစီမံသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့တင်းကြပ်ပါက OS ရှိသည့်မည်သည့်ကိရိယာမျှ၎င်းတို့ကိုသင့်အတွက်စီမံခန့်ခွဲခြင်းမရှိသောကြောင့်၎င်းသည်အခမဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်းသည်အခြားဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။
ငါမင်းကို Manuel Escudero နဲ့ထပ်တူပြောမယ်
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်သည်ခံယူချက်နှင့်သတ်မှတ်ချက်များအကြောင်းပြောသောအခါဂရုတစိုက်ဖတ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်နှစ်မျိုးစလုံးကိုဖွဲ့စည်းရန်သင်သည်များစွာသောအသံများကိုနားထောင်ခြင်းဖြင့်သာဖြစ်နိုင်သောပိုင်းခြားသိမြင်မှုလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စံသတ်မှတ်ချက်ကိုခုခံကာကွယ်သည့်အခါသင်ဝယ်ယူထားသောစိတ်ကူး (များ) လုံးလုံးသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနှင့်ရှိနေ ဦး မည်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်လူများအားမိမိကိုယ်ကိုအသိပေးရန်ပြောပါက၊ ပထမအချက်မှာဥပမာအားဖြင့် ဦး ဆောင်။ အနည်းဆုံးလွတ်လပ်ခွင့်ကဲ့သို့သင်ဖော်ပြသောဝေါဟာရများ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုအနည်းဆုံးသူတို့ကိုယ်တိုင်အသိပေးရန်ဖြစ်သည်။
သင်အယူအဆကိုနားလည်ပြီးဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ၊ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကသင့်အတွက်ပစ္စည်းကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့လွတ်လပ်မှုကိုဖယ်ရှားပေးမှာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့လွတ်လပ်မှုကိုကာကွယ်ပါက၎င်းကိုသင့်အတွက်စီမံပေးတယ်၊ ၎င်းကိုပုံမှန်အားဖြင့်ကိုင်တွယ်သောကြောင့်မကြိုက်ပါ၊ ၎င်းကိုသင်အပြည့်အဝပြောင်းလဲရန်သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ယောက်အားသင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အတိုင်းပြောင်းလဲရန်သင့်အားအပြည့်အဝအပ်နှင်းထားသည်။
ဂျော့ခ်ျအော်ဝဲလ် - စကားချီးသည်လယ်ယာမြေပေါ်တွင်ပုန်ကန်မှုဖြစ်ရန် "လွတ်လပ်မှုဆိုသည်မှာတစ်ခုခုကိုဆိုလိုသည်ဆိုပါကလူတို့အားသူတို့မကြားလိုသည့်အရာကိုပြောရန်အခွင့်အရေးအားလုံးထက်သာလွန်လိမ့်မည်။ "
ငါအခြားမှတ်ချက်ကနေချေး။ သင်၏ထင်မြင်ချက်များသည်ကျွန်ုပ်၏ ၀ န်ထမ်းလွတ်လပ်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုသာအားကောင်းစေသည်၊
အကယ်၍ မင်းသည်လယ်ယာမြေပေါ်တွင်ပုန်ကန်မှုများကိုဖတ်ရှုခဲ့ပါက၎င်းသည်စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်နှင့်လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကိုရည်ညွှန်းသည်၊ ၎င်းသည် Free Software နှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ကြောင်းကောင်းစွာသိလိမ့်မည်။
သင်၏ကိုယ်ပိုင်နှင့်အထူးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် (Conceptualization, ငါပြောမည်) သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်ပုံရသော်လည်းတရားဝင်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များနှင့်အတူရှုပ်ထွေးသွားခြင်းသည်သင်၏အဓိပ္ပာယ်သည်နံရံပြင်ပ၌တန်ဖိုးမရှိသောကြောင့်စတင်ခြင်းသည်စိတ်ပျက်ဖွယ်ဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့ ဦး ခေါင်းခွံမရှိစားစရာရှိပါတယ်။
သင်သည်လူသားတို့၏ဥပဒေများဖြင့်အုပ်ချုပ်သောကမ္ဘာတွင်သင်နေထိုင်ပြီး၊ ပျော်ရွှင်မှုခံစားရခြင်း (ပျော်ရွှင်မှုကင်းမဲ့ခြင်း) သည်အဖြစ်မှန်ကိုမပြောင်းလဲစေပါ။
စကားမစပ်, ဘယ်ဆွေးနွေးငြင်းခုံ? ငါ၏အဖြေကိုရန်သင့်ရဲ့အများဆုံးပီပီအငြင်းအခုံဖြစ်ပါသည်:
“ ဒါကိုသင်သဘောမတူဘူးဆိုရင်မဝယ်နဲ့၊ ဒါဝယ်လိုက်မယ်။ ”
@Staff: ဒါကိုကျွန်တော်ပိုကောင်းအောင်ပုံဖော်နိုင်ခဲ့တာတောင်မှအခြေခံအားဖြင့်မင်းပြောတာကိုတစ်ထောင်ပြောနေနိုင်တယ်၊ စကားတစ်ထောင်ပြောနေနိုင်တယ်။ ငါနဲ့ငါနဲ့ကွာခြားတာကအချိန်ကြာမြင့်စွာငါထင်မြင်ချက်တိုင်း၏ပထမစာကြောင်းကိုသာကြာမြင့်စွာဖတ်ရှုခြင်းဖြစ်သည်။ ခင်ဗျားထင်ထားတာနဲ့တန်းတူညီမျှစွာမပေးနိုင်တာ၊ စဉ်းစားတွေးတာကိုမရပ်တန့်နိုင်အောင်ငါတကယ်လို့များ Linux ဘလော့ဂ်မှာအရေးမကြီးတဲ့သုံးစွဲသူတစ်ယောက်ဖြစ်နေလို့ပါ၊ ပြီးတော့ (ငါဟာမင်းနဲ့ဆင်တူတဲ့အရာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်) ။ အရေးမကြီးပါဘူး your ငါဘာကြောင့်မင်းဘာလုပ်နေတာပဲ၊ ငါပဲပြောနေတာပဲ၊ ငါ့စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံကိုငါဘယ်တော့မှလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုမင်းရဲ့အချက်တွေကိုဆက်ပြီးဘာကြောင့်ဆက်ပြောပါ့မလဲ။ ငါမရွေးထားတဲ့ iPhone တစ်ခုကိုရွေးလိုက်တယ်။
သငျသညျအကြှနျုပျအဘို့အဘို့အငြင်းခုံရန်ဆန္ဒရှိမဟုတ်ပေမယ့် "အငြင်းအခုန်ဆက်လက်" ဖို့ငါ့ကိုမေးတယ်အဖြစ်ရှုပ်ထွေးမက်ဆေ့ခ်ျကိုမပို့ကြဘူး, သို့မဟုတ် "သင်နိုင်ဘူး" ကိုသိရန်အရာအားလုံးကိုဖတ်ရသောအခါ, သင်ပထမ ဦး ဆုံးလိုင်းသာဖတ်ပါ t ကိုပိုကောင်းအောင်သရုပ်ဖော်ပါ။ (သို့) ဆောင်းပါးကိုရေးသားရုံသက်သက်သာမဟုတ်ရင်အခြားသူတွေပြောတာကိုသင်ဂရုမစိုက်ပါ။ မှတ်ချက်များကို (သင်သဘောတူသည့်အတိုင်း) တန်ဖိုးထားလေးမြတ်ပါက။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါပြောသမျှအရာအားလုံးဟာမင်းရဲ့ပြောဆိုချက်အားလုံးမှာမြင့်မားတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိတယ်၊ စိတ်ပညာရှင်တွေခေါ်တဲ့အရာ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထပ်လောင်းအတည်ပြုတာကိုငါသာပေးနိူင်တယ်။
@Staff: ကောင်းပါတယ်။ ဘာပြောတာလဲ😉
Uff .. .. မင်းရဲ့ post တစ်ခုလုံးကိုပဲဖတ်လိုက်တယ်။ .. ငါမှတ်ချက်တွေအားလုံးကိုဖတ်ဖို့အချိန်မရှိဘူး (နောက်မှဖြစ်လိမ့်မည်) ..
ဒီစိတ်ကူးကိုထုတ်ညှစ်ထုတ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် .. 😉
YouTube မှာသူတို့ပြောသလိုသူတို့ပြောတဲ့လှုံ့ဆော်မှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတွေကိုကြည့်တဲ့အခါငါကရယ်စရာဖြစ်လာတယ်၊ ပြီးတော့လူတွေကသူတို့သမ္မတကိုကောင်လေးလိုချင်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ် X လိုနိုင်ငံကိုတွင်းထဲကနေလွတ်မြောက်ဖို့သူလိုသူလိုခေါင်းဆောင်မျိုးတွေပိုလိုချင်တာကိုဝေဖန်ကြတယ်။ xD
Stallman / Android ကိုမထိပါနှင့်၊ အကြောင်းမှာအခြားအကြောင်းအရာများနှင့်ဆွေးနွေးငြင်းခုံမည့်အစားသူတို့သည်စာရေးသူ၏ထောက်လှမ်းရေးကိုတိုက်ခိုက်ရန်သာကြိုးစားသည်။
စကားမစပ်၊ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ၏ "စကြဝuniverseာ" တွင်မိမိကိုယ်ကိုသော့ခတ်ခြင်းအားဖြင့်ဝါရင့် ၀ င်းဒိုးသူများ၌ရှိသောဤအမြင်များဆုံးရှုံးသွားသည်။ (Chillinfart အမည်ရှိဘလော့ဂါတစ် ဦး သည်ဝေဖန်ပြောဆိုသည်မှာ) \_ t ပီရူးရှိစီးပွားရေးအဆင့်တွင်မိုက်ကရိုဆော့ဖထံမှသနားစရာထောက်ခံမှု).
သင်၏ iOS သည်အလွန်လွတ်လပ်သောကြောင့်
- သင်၏ဖိုင်တွဲများအားကြည့်ရှုရန်ဖိုင်စူးစမ်းရှာဖွေသူမရှိပါ။ ၎င်းကို jailbreaking မပါပဲလုပ်ရန်နည်းလမ်းမရှိပါ။
- AppStore တွင်အခမဲ့အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်သူတို့သည်သင်မသုံးသော်လည်းသင့်ခရက်ဒစ်ကတ်အချက်အလက် (အရင်ကဲ့သို့) မထည့်ရန်သင့်အားအတင်းတိုက်တွန်းသည်။
- ၎င်းသည်သင့်အားအက်ပလီကေးရှင်းများ၊ ရုပ်ပုံများ၊ တေးဂီတနှင့်မည်သည့်အရာကိုမဆို Bluetooth မှတဆင့်မျှဝေခွင့်မပြုပါ။ နားကြပ်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန် Bluetooth သာဖြစ်သည်။
- Launchers နှင့် Android ကဲ့သို့ပင် desktop icon များနှင့် interfaces များကို Root မလိုဘဲမပြောင်းလဲနိုင်ပါ။
- SD ကဒ်တစ်ခုကို၎င်းနှင့်သင် ချိတ်ဆက်၍ မရပါ။
- အကယ်၍ သင်၏ဘက်ထရီသည်သေနေပြီဆိုလျှင်သင်က ပြောင်းလဲ၍ မရပါ။
- ရိုးရှင်းသောနှင့် standard USB connector ကို Apple ကသာထုတ်လုပ်သည့် connector ကိုအသုံးပြုရန်သင့်အားတွန်းအားပေးသောကြောင့်သင် ဆက်သွယ်၍ မရပါ။
- iTunes အသုံးပြု၍ MP4 အဖြစ်ပြောင်းလဲထားသောဗီဒီယိုများကိုသာဖွင့်သောကြောင့်၎င်းသည်ဗီဒီယိုများကိုအခြားပုံစံဖြင့်ကြည့်။ မရပါ။
- Flash Player ကိုသင် သုံး၍ မရပါ (၎င်းသည် Flash အမှိုက်ပုံဖြစ်သော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံအချို့သောအရာများအတွက်လိုအပ်သည်) ။
- ပုံမှန်ဝဘ်ဘရောက်ဇာကိုသင် ရွေးချယ်၍ မရပါ။ အကယ်၍ သင်သည်အခြား Chrome, Dolphin, Opera ကဲ့သို့သောအခြား web browser တစ်ခုကို install လုပ်ပါက။ သင်၏ iPhone သည် Safari နှင့်အဆက်အသွယ်များကို ဆက်၍ ဖွင့်လိမ့်မည်။
- Firefox ကိုသင် download လုပ်၍ မရပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်သည် Apple တွင် AppStore မှလွန်ခဲ့သောအချိန်ကာလက FireStox ကပိတ်ပင်ထားသောအခမဲ့အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့ရှိကြောင်းမသိသောကြောင့် VLC Player နှင့်လည်းအလားတူဖြစ်ခဲ့သည်။
- အခြားရင်းမြစ်များမှအက်ပ်များကိုသင်တပ်ဆင်။ မရပါ။ အရာအားလုံးကို AppStore မှတဆင့်ပြုလုပ်ရမည်။ Android တွင် APK ကိုအခြားစတိုးဆိုင်များမှဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးလျှင်လည်းရနိုင်သည်။
- iOS အက်ပလီကေးရှင်းများအတွက်၊ အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုတင်ခြင်းသည်ရှုပ်ထွေးသည်၊ အကြောင်းမှာ Apple သည်လက်ခံရန်အတွက်သင်၏အက်ပလီကေးရှင်းနှင့်တွေ့ဆုံရမည့်ကန့်သတ်ချက်များနှင့်အခြေအနေများချမှတ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာအလွန်စစ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအရာတွေဟာ Android မှာဖြစ်မလာပါဘူး
- iOS အတွက်ပုံမှန် mail app သည် Gmail, Yahoo Mail, Outlook ကဲ့သို့သောလူကြိုက်များသောမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ခြင်းကိုသာပြုလုပ်နိုင်သည်။ Android အတွက်ပုံမှန်အီးမေးလ်အက်ပလီကေးရှင်းသည်မည်သည့်အီးမေးလ်ပံ့ပိုးသူနှင့်မဆိုပြုပြင်နိုင်ပြီးများစွာသောအရာတို့ကိုပြင်ဆင်နိုင်သည်။
- အကယ်၍ သင်သည်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုကိုပုံသေ iOS လုပ်ဆောင်ချက်ကိုအစားထိုးရန်ကြိုးစားပါကအက်ပဲလ်ကမမျှော်လင့်ဘဲဖျက်လိုက်သည်။ Siri နှင့်ဆင်တူသည့် App တစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်ပျက်သကဲ့သို့ (ကျွန်ုပ်၏အမည်ကိုကျွန်ုပ်မမှတ်မိပါ) ။
…ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည် Android တွင်မရှိသော iOS ၏ဆန့်ကျင်အင်္ဂါရပ်များကိုပိုမိုရှင်းပြရန်တစ်နေ့လုံးသုံးနိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏အချိန်ကိုဖြုန်းတီးရန်စိတ်မဝင်စားပါ။
WTF? iOS / iPhone ကငါ့ကိုဒီအရာအားလုံးကိုခွင့်ပြုမထားဘူးလား။ Apple ရဲ့ငရဲကိုသွားပါ။ ငါပြောရမယ့်စကားကနေချစ်သူ Manuel Escudero၊ မင်းမဝေမျှတာကိုမင်းဘာလို့ဆေးလိပ်သောက်တာလဲ 😀
aghhhhhhhhhh ပုံမှန် browser သည် massssssssss tediosaa ဖြစ်သည်။ သူတို့သည်သင့်ကို Safari ကို cu မှတဆင့် Safari တွင်ထားချင်သည် .. fuck! ..
တစ်ခါတုန်းကဖုန်းကိုကိုင်ပြီး“ back” ခလုတ်ကိုမတွေ့သောကြောင့်ပြန်ပို့လိုက်သည်။
ကျွန်ုပ်တွင်အလွန်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသောအချက်တစ်ခုကကျွန်ုပ်အားကိရိယာကို pendrive တစ်ခုသို့မဟုတ်သိုလှောင်သိမ်းဆည်းရန်အသုံးပြုရန်ရှာသော IOS အက်ပလီကေးရှင်းအများစုသည် built-in သို့မဟုတ် embedded ဘရောင်ဇာများအသုံးပြုခြင်း၊ Apple ရဲ့စိတ်ကူးသည်သင်၏ iDevice မှမည်သည့်အရာကိုမဆို download ပြုလုပ်၍ မရပါ။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုတက္ကသိုလ်အတွက်အသုံးပြုသည် (လက်တွေ့ကျတဲ့အလုပ်စာရွက်စာတမ်းများ၊ PDF အများစုတွင်၎င်းနှင့်အတူ "ရှင်သန်ခြင်း" ကိုသင်ယူပြီးပြီဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်အလွန်ကြီးမားသောဟာ့ဒ်ဝဲအောက်တွင်ရှိပြီး၊ iOS ၏ခိုင်မာမှုကိုသင်သည် PDF ကိုဒေါင်းလုပ်ချခြင်းကဲ့သို့မိုက်မဲသောအရာကိုမပြုလုပ်နိူင်ပါ။ )
@elav, @ x11tete11x - ငါဒီဆောင်းပါးမှာငါချိတ်ဆက်ထားတဲ့ငါ့ရဲ့ဘလော့ဂ်နှစ်ခုကို (အထူးသဖြင့်ထပ်တူပြုခြင်းအကြောင်း) နဲ့ iOS 7.x ပါတဲ့ iPhone တစ်ခုရှိခဲ့ရင်၊ @Javier ဟာလုံးဝမှားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်မင်းကိုငါထားခဲ့တာ။
(ဤအရာအလုံးစုံ Jailbreak မပါဘဲ)
- ဖိုင်နှင့်ဖိုင်တွဲရှာဖွေသူ - Readdle မှမှတ်တမ်းများ။
- ဆွဲကြိုးလိုပဲ? ဟုတ်ပါတယ်၊ http://ubuntuone.com/2gpEcnJ1HU854nYmmsGyCs
App Store မှခရက်ဒစ်ကဒ်မရှိသော iTunes သို့မဟုတ်ကိရိယာမှကဒ်မရှိဘဲ AppleID ကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ ခလုတ်သည်တစ်ဝက်လျှို့ဝှက်ထားသည်သို့သော်၎င်းတို့တောင်းဆိုသည့်အခါ "skip" ဟုပြောသောအခါကျွန်ုပ်နှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။
- ဘလူးတုသ်? ဟုတ်ပါတယ်၊ သူက iDevices ကြားက transfer or accessories တွေသုံးဖို့သာအလုပ်လုပ်တယ်။ ဒါက instashare နဲ့ dukto တို့ပဲ။
- Launchers? ဒီဟာတွေကမိုက်မဲတယ်၊ FFOS မှာမဖြစ်နိုင်ဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒါဟာကြည်ညိုလေးစားဖွယ်ကောင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်မဲ့သောကြောင့် "အမှားတစ်ခု" လို့ငါမထင်ပါဘူး
- SD လား။ Android KitKat ကသူတို့ကိုအမြစ်ပြတ်တိုက်ဖျက်နေတယ်၊ ​​အခုသူတို့ကဖိုင်တွေကို PC ကနေစက်ဆီကိုလွှဲပြောင်းပေးတယ်။ ကျွန်တော့် iPhone မှာ 64GB ရှိပါတယ်။
- ဘက်ထရီသည်အကြမ်းအားဖြင့် ၃၃ နာရီကျော်ခံသည်။ မကြာမီ၎င်းကိုပြောင်းလဲရန်မလိုအပ်ပါ။
- ဥရောပသမဂ္ဂသည် USB connector ကိုတပ်ဆင်ပြီးဖြစ်သည်။ ယခုတွင်ပင်အက်ပဲလ်ပင်စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်လိမ့်မည်
- Oplayer နှင့် VLC တို့သည်အသံနှင့်ဗီဒီယိုများကို Linux ကဲ့သို့သောအမျိုးအစားအားလုံးတွင်ဖွင့်သည်။
- android တွင် flash player ကိုသင် သုံး၍ မရပါ၊ ၎င်းသည်ဤပလက်ဖောင်းအတွက်မရှိတော့ပါ
- ကျွန်ုပ်၏စက်ပစ္စည်းတွင်အချိတ်အဆက်များကို Chrome ဖြင့်ဖွင့်သည်။
- Firefox? ငါ chrome ကိုသုံးတယ်
- အခြားရင်းမြစ်များမှအက်ပ်များကိုအဘယ်ကြောင့်တပ်ဆင်လိုသနည်း။ သင်သည်သင်၏စက်ပစ္စည်းကိုသာအန္တာရာယ်ပြုနိုင်သည် (iTunes မှတစ်ဆင့်သင်တတ်နိုင်သည်)
- Appstore သို့သို့မဟုတ် playstore သို့အက်ပလီကေးရှင်းကိုတင်ခြင်းသည် (ကျွန်ုပ်သည် developer တစ်ယောက်ဖြစ်သည်) လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုတည်းကိုသာဖြတ်သန်းသွားသည်။ android တွင် ၂၅ ဒေါ်လာလက်ခံသောနှုန်းနှင့် iOS 25 အတွက်သာဖြစ်သည်။
- သင် mail အတွက်ပုံမှန်အက်ပ်ကိုသုံးစရာမလိုသော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်မည်သည့်ပြproblemsနာမျှမဖြစ်စေပါ။
- သူတို့ဖျက်ပစ်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းများကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ ၎င်းတို့သည်လုပ်ဆောင်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသောကြောင့်သင်မှန်ကောင်းမှန်မည်၊ သို့မဟုတ်သင်လိမ်မည်ဆိုပါစို့ကျွန်ုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်မရှိပါ။
မင်းကို iPhone ရောင်းဖို့လာခဲ့တာလား ဘယ်လိုလဲ
မင်္ဂလာပါ Escudero၊ မာနထောင်လွှားသောသင်တန်းမည်မျှရှိသနည်း။
1- အကယ်၍ launchers များသည်မိုက်မဲသည်ဟုသင်ယူဆပါကကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုထုတ်လုပ်သူမှကမ်းလှမ်းထားသည်ထက်ကွဲပြားသောနည်းဖြင့်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်လိုသောကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုခေါ်ပါလိမ့်မည်။ ခင်ဗျားရဲ့လွတ်လပ်မှုအယူအဆကကျွန်တော့်အတွက်ပိုပြီးရှင်းလင်းတယ်၊ ငါပြောမယ်၊
2- ဥရောပသမဂ္ဂမှအက်ပလီကေးရှင်းမဟုတ်ဘဲဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာပြtheနာကိုစံသတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ပြEuropeနာတစ်ခုဖြစ်နေသည် - ဥရောပအတွက်သာဖြစ်သည်။ ကျန်တဲ့အရာတွေအတွက်တော့ Apple ကပြtheနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပေမယ့် $$$ ပိုများပါတယ်။
3- အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ပြင်ပရင်းမြစ်မှ application များကိုတပ်ဆင်လိုပါကကျွန်ုပ်၏အကြောင်းပြချက်များကိုရှင်းပြရန်တာ ၀ န်မရှိပါ။ ငါကာလ, တူသောခံစားရလိမ့်မည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်သည် Apple ထက်မည်သည့်အရင်းအမြစ်ကိုမဆိုယုံကြည်သည်။
- ဖိုင်စနစ်ကို ၀ င်ရောက်ရန်ပြင်ပ application တစ်ခုကိုရှာဖွေရန်နှင့် download လုပ်ရန်သင်သေချာပါသည်။ သာမန်အသုံးပြုသူတစ် ဦး သည်၎င်းကိုမသိရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့် install ပြီးသားဖြစ်သင့်သည်။ တစ်ခုခုကိုရှာပြီးတပ်ဆင်ရန်သင့်ကိုယ်သင်ပေးအပ်ခြင်းအရလွတ်လပ်မှုမဟုတ်ပါ။
- မင်းရဲ့ iPhone ကို pendrive တစ်ခုအနေနဲ့ပေးလိုက်တဲ့ screenshot အကြောင်း။ ငါဆိုသည်ကား၊ ဒီဟာသည်သိုလှောင်ထားသည့်ပစ္စည်းမဟုတ်ပါ၊ သိုလှောင်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ သင်၏ Linux distro တွင် driver နှင့် package တစ်ခုပါဝင်ပြီး MTP ကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်သင်သည် MTP protocol မှတဆင့်ဖိုင်စနစ်ကိုသာကြည့်ရှုနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ iPhone ကို Windows ကွန်ပျူတာ (လူအများစုနေထိုင်သောနေရာ) သို့ချိတ်ဆက်ပါကသင်ပြောသော pendrive ကိုသင်ကြည့်ရှုနိုင်မည်မဟုတ်ပါက၎င်းသည်ကင်မရာစက်တစ်ခုအနေဖြင့်သာအသိအမှတ်ပြုပြီးသင်သာလျှင်ရလိမ့်မည်ဟုငါအာမခံသည်။ သင်ကူးယူထားသည့်ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုနိုင်ပြီးဖိုင်စနစ်သို့မရောက်ရှိပါ။ ဘာကြောင့်လဲသိလား ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချို့ Linux Linux distros တွေလိုပဲ MTP ကို ​​access လုပ်ဖို့ Windows မှာ driver မရှိပါဘူး။ ထို့ကြောင့်သင်၏ iPhone သည်အစုလိုက်အပြုံလိုက်သိုလှောင်ထားသော flash drive ဖြစ်သည်ဟူသောသင်၏မှတ်ချက်သည်မမှန်ကန်ပါ။
- iTunes တွင်သင်၏အကြွေးဝယ်ကဒ်အချက်အလက်ကိုဖြည့်ရန်လိုအပ်သည့်ခြေလှမ်းကိုကျော်ရန်လှည့်ကွက်တစ်ခုရှိနေသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ထပ်တူထပ်တူထပ်တူထပ်မျှကြုံတွေ့ရသည်။ (လွတ်လပ်မှု။ )
- ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဈေးပေါသောမိုဘိုင်းဖုန်းတိုင်းလုပ်နိုင်သောအခြေခံအရာတစ်ခုခုကိုလုပ်ရန်တတိယပါတီအက်ပလီကေးရှင်းများကိုသင်အသုံးပြုရန်အလွန်ဒေါသထွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ Apple သည် "share" ဟူသောစကားလုံးကိုမုန်းတီးနေပုံရသည်။
- သင့်အတွက်၎င်းသည်မိုက်မဲရာဖြစ်လိမ့်မည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းလ်ပုံစံကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်လိုသောအသုံးပြုသူများစွာရှိသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, iPhone ပေါ်တွင်သင်အဟောင်းပုံစံတူ, ထိုမီးခိုးရောင်အကြေးခွံဒီတော့ရုပ်ဆိုးပြီးဆေးကြောဖို့အခြေချရန်ရှိသည်။ အမှန်တရားကတော့၊ သင်က Launchers တွေကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တောင်မှသင့်ရဲ့အဖြေကအရမ်းပုဂ္ဂလဒိive္ဌာန်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီမှာကမိုဘိုင်းမှာဒီအင်္ဂါရပ်ရှိတယ်၊ မပါဝင်သည်ဖြစ်စေသင်ကြိုက်သည်ဖြစ်စေမနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေနှိုင်းယှဉ်နေကြသည်။
- Kitkat မှ SD ပြTheနာသည်အင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းစေသောဒဏ္isာရီဆန်သောလိမ်လည်မှုဖြစ်သည်။ ငါပြောတာကငါမှာ Kitkat ရှိတဲ့ Galaxy S4 ရှိတယ်၊ ငါနဲ့ SD မှာပြproblemsနာလုံးဝမရှိဘူး၊ အက်ပလီကေးရှင်းတွေအများကြီးကိုဒေတာကိုပြproblemsနာမရှိဘဲ ၀ င်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်တယ်။
- ဘက်ထရီပြTheနာကိုမဆွေးနွေးပါ။ ယေဘူယျအားဖြင့်စမတ်ဖုန်းအားလုံးနီးပါးမှာဖြစ်တတ်တဲ့ပြproblemနာတစ်ခုပါ။ အသစ်စက်စက်ဖြစ်သည့်အခါဘက်ထရီသည်ကြာရှည်ခံသော်လည်း ၂ လခန့်ကြာရှည်နိုင်ပြီးဘက်ထရီသက်တမ်းမှာနည်းပါးလာသည်။ ယနေ့ငါစမတ်ဖုန်းဘက်ထရီနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းပညာတိုးတက်မှုများရှိသင့်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။
- ဥရောပသမဂ္ဂ၏ဤစံသတ်မှတ်ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ရှိရင်။ ကောင်းပြီ၊ သင်က connector အသစ်ရှိဖို့နောက်ဆုံး iPhone ကိုဝယ်ရမယ်။
- ကောင်းပြီ၊ ယခုတွင် iOS အတွက် VLC ရှိသေးသည်၊ သို့သော်မာလ်တီမီဒီယာအကြောင်းအရာများကိုဖိုင်တွဲများသို့စုစည်းပြီးစုစည်းရန်သင်လုပ်ရန်တတိယပါတီအက်ပလီကေးရှင်းများကိုအသုံးပြုရသည်။
- Flash Player ကိုသုံးလျှင် Android တွင်ဖြစ်သည်။ သူတို့သာအသစ်အဆန်းအသစ်များကိုထုတ်ပြန်ခြင်းမပြုတော့ပါ။
- အကယ်လို့သင်ကသူတို့ကို Chrome ကကြည့်နေတယ်ဆိုလျှင်လင့်ခ်များသည် chrome ဖြင့်ဖွင့်နိုင်သည်။ သို့သော်လည်းငါသည်ပုံမှန် browser ကိုရွေးချယ်ဖို့ဆိုလို။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် browser တစ်ခုမှ (ဂိမ်းအတွင်းရှိ link တစ်ခုမှ) တစ်ခုခုကိုဖွင့်ရန်လိုအပ်သည့် external application တစ်ခုရှိပါကသင်မည်သည့် browser ကိုဖွင့်ချင်သည်ကိုမမေးမြန်းဘဲအလိုအလျောက်ဖွင့်နိုင်သည်။
- Chrome? ကောင်းပြီ၊ ခင်ဗျားလိုချင်ရင်ခင်ဗျားစီးပွားဖြစ်သူလျှို browser ကိုဆက်သုံးပါ။ သို့သော်ဤနေရာတွင် Firefox သည်ထိုကဲ့သို့သော operating system တွင်ရှိမရှိနှင့်နှိုင်းယှဉ်ထားသည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသန်းပေါင်းများစွာသည် Firefox ကိုအသုံးပြုကြပြီး၎င်းသည် iOS တွင်မပါ ၀ င်ပါကအလွန်လေးနက်သည်။
- အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်အခြားအရင်းအမြစ်များမှအက်ပ်များကိုတပ်ဆင်လျှင်ကျွန်ုပ်၏ပစ္စည်းကိုကျွန်ုပ်စွန့်စားမည်ဟုသင်ပြောနေသလား။ တစ်နည်းပြောရလျှင်၊ သင်အတွက် AppStore အက်ပလီကေးရှင်းများသည်လုံခြုံမှုရှိရဲ့လား။ သင့်အပလီကေးရှင်းများ၏အရင်းအမြစ်ကုဒ်ကိုတောင်သင်လက်လှမ်းမမှီပါ၊ ၎င်းတို့အားလုံးသည်စုစည်းထားပြီးကန့်သတ်ချက်များရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့် Android အတွက် F-Droid မှတစ်ခုခုကို install လုပ်ခြင်းသည် Google Play မှတစ်ခုခုထက်ပိုလုံခြုံပါသလား။ F-Droid မှာကျွန်ုပ်မှာ ၁၀၀% အခမဲ့အက်ပလီကေးရှင်းတွေရှိပြီးသူတို့ရဲ့အရင်းအမြစ်ကုဒ်တွေပါပြီး F-Droid ကိုယ်တိုင်ကသူတို့ပေးထားတဲ့အက်ပလီကေးရှင်းဟာအရင်းအမြစ်ကုဒ်နဲ့အတူတူဖြစ်အောင်သေချာအောင်လုပ်ထားတယ်၊ ဂူးဂဲလ်ပလေးမှာအရာအားလုံးစုစည်းထားတယ်၊ ကြော်ငြာ, စီးပွားဖြစ်, etc
iTunes မှအခြားရင်းမြစ်များမှအက်ပ်များကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်ဟုပြောလိုက်သည်။ သို့သော်သင်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ခြင်းအားဖြင့်အရာအားလုံးကိုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ PC တွင်သင်၏ iPhone ၌ရှိသည့်အရာများမှန်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် iTunes စာကြည့်တိုက်မှအက်ပလီကေးရှင်းကိုမတော်တဆဖျက်မိလျှင်၊ iPhone ပေါ်တွင်လည်းဖျက်ပစ်လိမ့်မည်။ (လွတ်လပ်မှု။ )
- Google Play တွင်စျေးနှုန်းချိုသာသော (၂၅ ဒေါ်လာ) ဖြစ်သည့်အားသာချက်အပြင်၊ သူတို့သည် Apple ထက် ပိုမို၍ တင်းကြပ်သည်။ Apple မှာ၊ မင်းကမင်းရဲ့ app ကိုလက်ခံဖို့ဆုတောင်းရမယ်။ မဟုတ်ရင် app ပေါ်ကသင်၏အလုပ်အားလုံးဟာငရဲသို့ရောက်သွားလိမ့်မည်။
- မေးလ်လျှောက်လွှာတွင်ဤအရာသည်သင်၏အရသာဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်လူအများစုက default mail app ကိုသုံးကြတယ်။ ပြီးတော့ဒါကို iOS နဲ့ Android အကြားနှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်။ မည်သည့် SMTP, IMAP, POP3 ၀ န်ဆောင်မှုကိုမဆိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ခြင်းအပြင်အန်းဒရွိုက်၏စွမ်းဆောင်ချက်သည်၎င်းထက်များစွာသာလွန်သည်။
- လုပ်ဆောင်ချက်များကိုထောက်ပံ့ပေးသောနှင့်ဖျက်ပစ်လိုက်သောအက်ပလီကေးရှင်းများအကြောင်းသည်လုံးဝမှန်ကန်သည်။ ဂူဂဲလ်နဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာသင်တွေ့ရလိမ့်မယ်။
ကောင်းပြီ၊ အတွေ့အကြုံအပေါ် အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်ဖြေဆိုပါလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်သည် iPhone သုံးစွဲသူ (3gs နှင့် 4s) လည်းဖြစ်သောကြောင့်အမှန်တရားမှာတံခါးပိတ်ပလက်ဖောင်းနှင့်လွတ်လပ်မှုနည်းပါးခြင်းကြောင့်ငြီးငွေ့စရာဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဒါ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဟာ Android၊ Cyanogenmod ကိုပြောင်းပြီးဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ကမ္ဘာသစ်တစ်ခုကိုရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။
နှောင့်အယှက်မပေးဖို့။ သို့သော်လည်းသင်သည်ဤရာထူးကို trolling သို့မဟုတ်အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်ပြုခဲ့လားမသိဘူး။ သို့သော်ဤနေရာတွင် ၉၈ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးက Android သည် iOS ထက်ပိုမိုလွတ်လပ်သည်ဟုသဘောတူကြသည်။
@Javier: မင်းကိုသိပ်မသိသောကြောင့်ဘာကိုမျှသင်ပေးခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းများရောင်းတာကိုငါမလာတာ၊ ငါဟာငါ့အချိန်မထိုက်တန်ဘူး၊ ငါမှားတယ်၊ ငါမှားတယ်လို့မင်းကိုငါမပြောတော့ဘူး၊ မင်းရဲ့ခဲယဉ်းသောခေါင်းနှင့်အတူ
ဟုတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ့ရဲ့ဆောင်းပါးမှာတော့ Android vanilla ((iOS vanilla) အပြင်တခြားဘာမှမပြောဘူး။ ဖြေရန်အနှောင့်အယှက်မပေး, သင်သည်ငါ့ကိုကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်မသက်ဆိုင်သောလုပ်: /
လူသား၊ ကျွန်ုပ်အံ့အားသင့်ရခြင်းသည်အဓိကအားဖြင့် iOS အကြောင်းအနည်းငယ်သာသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်လက်၌ကိုင်ထားသောအိုင်ဖုန်းအနည်းငယ်ကသာကစားရန်ကျွန်ုပ်ကိုအထောက်အကူပြုသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ဆောင်းပါးများကိုကျွန်ုပ်ဖတ်သည်ဖြစ်စေ၊ မဖတ်သည်ဖြစ်စေအံ့သြမိလိမ့်မည်။ 😛
ငါထင်တာကတော့မင်းဟာအရမ်းမှားတယ်၊ သင်သိတယ်၊ သင်ဟာ ios ကိုအခမဲ့သုံးလို့မရဘူး၊ သင်သိတယ်၊ သင်မှန်သည်ဟုသင်သိလျှင်လူအများအားသင်ထင်သောအရာအားစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်ကြိုးစားသောကြောင့် ... ငါ၌“ ညစ်ညူးသော” thatတ္တပ္ပစိတ်ရှိကြောင်း၊
သင်၏ထုတ်ကုန်အသစ်နှင့်သင်သက်တောင့်သက်သာရှိကြောင်းနှင့်၎င်းကိုအငြင်းပွားမှုများဖြင့်အကြံပြုလိုသောကြောင့်ကျွန်ုပ် ၀ မ်းသာပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Apple ထုတ်ကုန်များကိုမူအရသော်လည်းကောင်း၊ စျေးနှုန်းဖြင့်သော်လည်းကောင်းဝယ်ယူခြင်းမပြုပါ။
သို့သော်လည်းလွတ်လပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မင်းထင်မြင်မှားမှားနေသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ မှတ်ချက်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်မဖတ်ခဲ့ဘူး၊ သူတို့ဟာငါနဲ့အရင်ပြောခဲ့သလိုပဲအရေးမကြီးဘူး။
ပထမတစ်ခုအနေနှင့်၊ iPhone device တစ်ခု၏သုံးစွဲသူသည်ကျွန်ုပ်တို့သိသောအရာများမှရရှိသောလွတ်လပ်မှုအတိုင်းအတာကိုသိရှိရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ပိတ်ထားသောကုဒ်။ Android တွင်အဓိက application များနှင့် OS ၏အစိတ်အပိုင်းများသည်သင်ကိုယ်တိုင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းလည်း ROM များကိုပြောင်းလဲရန်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ သို့သော်၎င်းတွင်သာပိုမိုလွတ်လပ်မှုရှိပြီးဖြစ်သည်။
ဒုတိယအချက် - Stallman မှကြေငြာသောလွတ်လပ်ခွင့် (ဟုတ်ပါသည်၊ အခြေခံအားဖြင့်) အခြေခံအုတ်မြစ်မရှိပေ။ “ မင်းရဲ့အခွင့်အရေးအားလုံးကိုစွန့်လွှတ်ဖို့ငါလွတ်မြောက်ပြီ။ သို့သော်ဤလွတ်လပ်ခွင့်သည်မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိရှိသနည်း။
တတိယအချက်မှာ "လွတ်လပ်မှု" သည်လက်တွေ့တွင်မတည်ရှိပါ။ ၎င်းသည်ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲသောအယူအဆဖြစ်သောကြောင့်မည်မျှပင်ကြိုးစားရှာဖွေပါစေအချည်းနှီးဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ပစ္စည်းများကိုတတ်နိုင်သမျှများများပိုင်ဆိုင်ခြင်းထက်လုံးဝပိုင်ဆိုင်လိမ့်မည်။
ဤပို့စ်အမျိုးအစားမှာအတင်းအဖျင်းမဂ္ဂဇင်းများအတွက် ... မည်သို့ပြောရမည်နည်း။
ဤကဲ့သို့သောအမှိုက်သရိုက်များကိုဖယ်ရှားပြီးသင်ခန်းစာများကိုနေရာချထားပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်စနစ်များကိုမသိရှိကြပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ FTP ဆာဗာတစ်ခုတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်မည်သို့ဖွဲ့စည်းရန်အတွက်မော်ဂျူးများရွေးချယ်ရမည်နည်း။ စိတ်ကြိုက် kernel သို့မဟုတ်စသည်တို့
သနားစရာကောင်းလိုက်တာ! ငါဘလော့ဂ်ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာလေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်းဤဆောင်းပါးများနှင့် "ဖြန့်ဖြူးရေးအရ" အတွက်မလိုအပ်သောဆောင်းပါးများကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရသည်။ စာရေးသူမှစီစစ်ရန်နည်းလမ်းမရှိသလား။ ငါ linux အကြောင်းဖတ်ချင်တယ်။ Ubuntu ရဲ့ umpteenth ဆင်းသက်လာတဲ့ဗားရှင်းအသစ်ဒါမှမဟုတ်စီးပွားဖြစ်ဓာတ်ပုံဆရာကသင်ကြားပေးတဲ့စျေးပေါတဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားအတွေးအခေါ်သင်တန်းများအကြောင်း ...
ငါမင်းနဲ့လုံးဝသဘောတူပေမဲ့သူ့ကို hahaha ကိုလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ပေးတယ်
ငါ Lagdroid စမတ်ဖုန်းကိုသုံးနေတယ်၊ ​​ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကငါ့ကိုပေးလိုက်တာပဲ၊ ငါက ၁၀.၁.X နဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့ကျွန်တော့် Galaxy Mini ကိုအမြစ်တွယ်ပြီးတိုက်ထုတ်နေပေမဲ့ကံမကောင်းတာကတခြားသူတွေလိုပဲကျွန်တော့်ကို update လုပ်ဖို့ hardware အလုံအလောက်မရှိဘူး။ ခေတ်မီစမတ်ဖုန်းများ
ကျွန်ုပ်လိုချင်သည်မှာ Lagdroid နှင့်ငြီးငွေ့စရာဖြစ်သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်ဖုန်းကို FFOS ဖြင့် flash လုပ်နိုင်ရန်၊ ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းကိုအမှန်တကယ်အကျိုးအရှိဆုံးရရှိစေရန်ဖြစ်သည် (Replicant သည်၎င်း၏စမ်းသပ်မှုလိုအပ်ချက်နှင့်မကိုက်ညီသော်လည်း hardware hardware အထောက်အပံ့မပြည့်ဝခြင်းကြောင့်ပင်) ။
ငါ GNU / Linux ကိုသုံးနေပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဗဟုသုတအမျိုးမျိုးဟာအမှန်တကယ်မြင်သာထင်သာမြင်သာမြင်သာမြင်သာမြင်သာမြင်သာပြီးမှန်ကန်ဖွယ်ကောင်းသည်။ ဝင်းဒိုးလိုမဟုတ်ပါ။ ငါ Windows Vista မှမှတ်ချက်ပေးနေသည်ကိုတွေ့ရသော်လည်းကျွန်ုပ်အတွက်များစွာအထောက်အကူပြုခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်သည် ၀ င်းဒိုးအတွက်တရားဝင်အက်ပလီကေးရှင်းများ၏တရားဝင် ports များကိုစမ်းသပ်နေပြီး၎င်းတို့သည်သူတို့၏ GNU / Linux နှင့်ညီမျှမှုအပေါ်မည်မျှသစ္စာရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ GNU / Linux သည်တကယ်ကောင်းပါသည်။ အခြားသူများကသင့်အားပြောပြသည့် (သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းတွင်၎င်းတို့ကိုသိမ်းထားရန်) အငြင်းပွားမှုများထောင်ပေါင်းများစွာကိုသင်ဖယ်ရှားဖို့သာလိုသည်။ ငါပြောမယ်
နောင်အနာဂတ်တွင် Mini (ကျွန်ုပ်သည် ACE ရှိသည်) သည်ဆင်းရဲသောမိုဘိုင်းသည်၎င်း၏ 800 MHz CPU နှင့်အတူစစ်ပွဲများစွာပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် Firefox OS သယ်ဆောင်ရန်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသလား။ Elio ကိုနှုတ်ဆက်သည်။
အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုစီအတွက်ခွင့်ပြုချက် (firewall အမျိုးအစား) သည် android rom တွင်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်ဟုထင်သည်၊ ၎င်းသည်သင်၏အပိတ် android သည်သင်၏စာတမ်းကိုအတည်ပြုသည်။ ငါမှန်ကန်သောအရာက android ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပိုင်ရှင်ဆုံးဖြတ်သည်သကဲ့သို့ပိတ်ထားကြောင်းပြောပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီအသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုယခုအချိန်တွင်ပန်းသီးက ဦး ဆောင်နေသည့်အရာတစ်ခုအဖြစ်ကျွန်ုပ်ရှုမြင်သည်။ အခြားရှုထောင့်များအရ android တွင်ယင်းကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။ အကြမ်းအားဖြင့်တော့ပန်းသီးကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲလို့မထင်ပါဘူး။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင်သင်ထုတ်လုပ်သူပေါ်မူတည်ပြီး android နဲ့မတူဘဲရွေးချယ်နိုင်ခြင်း၊ iOS7 ကနေ jailbreaking မှာအားသာချက်မရှိဘူးလို့သင်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာနဲ့ပဲ၊ ငါ့ရဲ့ ၀ ယ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်က android မှာ terminal က hackable ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာပါပဲ။ မင်းအတွက်မင်းအတွက်အဲဒါဟာအမြစ်တွယ်ဖို့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပဲ။ ဒါပေမယ့်ငါသွားနေတဲ့နေရာမှာသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ ၂ နှစ်လောက်အချိန်ယူခဲ့တယ်။ ငါနဲ့ငါသခင်ဘုရားရဲ့စပျစ်ဥယျာဉ်မှာအရာအားလုံးရှိတယ်။ သင်၏လွတ်လပ်မှုကို iOS တွင်ကာကွယ်ခြင်းသည်တခါတရံအရသာလမ်းကြောင်းအောက်သို့ကျဆင်းသွားသည်ကိုသတိပြုပါ၊ ကျွန်ုပ်၏နှိမ့်ချသောအမြင်တွင်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေသင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုရောင်ပြန်ဟပ်မှု၊
George Orwell - Prologue မှလယ်ယာမြေများတွင်ပုန်ကန်ရန်လူအများပြောခြင်းသည်လွတ်လပ်မှုဆိုသည်မှာလူတိုင်းကိုသူတို့မကြားလိုသည့်အရာကိုပြောပိုင်ခွင့်အားလုံးအထက်တွင်ရှိသည်။
မင်းရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုရေးပြီးဖော်ပြတဲ့အတွက်မင်းကိုချီးကျူးတယ်။ ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်ဆောင်ပုဒ်မှလစျြလြူရှု။ ကြွင်းသောအရာသည်အသေးအဖွဲကိစ္စများဖြစ်သည်။
အလွန်ကောင်းသော Orwell ၏ရည်ညွှန်းချက်😉
~ လျှံ meh စုဝေးဖို့နောက်ထပ်ပစ္စည်း ~
ပထမတစ်ခုအနေနှင့်၎င်းသည်အချို့သူများ၏ထင်မြင်ချက်များကိုကြိုတင်စွန့်ပစ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ လူတိုင်းတွင် ၄ င်းတို့ထင်မြင်ယူဆချက်များကိုလွတ်လပ်စွာဖော်ပြပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
သင့်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် iOS အစားအခြား OS ကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုသင့်အားထိုလွတ်လပ်ခွင့်မပေးဟုထင်သောကြောင့်၊ Android တွင်ကန့်သတ်ချက်များစွာရှိသော်လည်းလွတ်လပ်မှု၏အဓိပ္ပာယ်မှာအကောင်းဆုံးနေရာတွင်ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ FirefoxOS ဖြစ်ပါစေ။
သို့သော်အထက်ဖော်ပြပါအချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်သဘောတူသည်မှာ၊ လွတ်လပ်မှု၏တစိတ်တပိုင်းသည်သင်အသုံးပြုလိုသောမည်သည့်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ၎င်းနှင့်ကိုက်ညီသည့်သတ်မှတ်ချက်များ +1 နှင့်ကိုက်ညီလျှင်ရွေးရန်ဖြစ်သည်။ BSD, Apache, MTI လိုင်စင်များနှင့်လည်းသဘောတူညီမှုအရပိုမိုလွတ်လပ်သောဆော့ဖ်ဝဲကိုအာမခံပေးသောကြောင့်သင်ပိုကောင်းသည့်ကုဒ်ကိုပိုမိုလွတ်လပ်စွာပိတ်နိုင်သည့်အခွင့်အရေးကိုပေးသည်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်သင်၏ထင်မြင်ချက်အရ ၅၀/၅၀ အရကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထင်မြင်ချက်များနှင့်ကောင်းမွန်သောအရာများကိုသာချမှတ်ခြင်းမရှိပါ
ဒါဟာreggaetónအသိအမှတ်ပြုပြီးသားပြီးသားအဆင့်ဆင့်မှ degraded သော fanboys ၏ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သာမန်လူများကိုပရိုဂရမ်နှင့်အခြားဌာနခွဲများသို့ ၀ င်ရောက်ရန်ယုံကြည်မှုထက်ပိုမိုကြောက်လန့်စေသည်။
တနည်းအားဖြင့်ပန်ကာများကဤနှင့်အခြားဘေးအန္တရာယ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်သည် (ဘာသာတရားများအားဖျက်ဆီးပစ်နိုင်အောင်များစွာ) ။
ငါဒီ site ကိုနှစ်အနည်းငယ်ကြာအောင်လိုက်ခဲ့ပြီးပြီ၊ မှတ်ချက်တစ်ခုပေးချင်ရင်ပျင်းရိမှုကပိုအားသန်လာတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီနေ့တော့မဟုတ်ဘူး။ မှတ်ချက်များအနက်အသုံးပြုသူ« carlo »၏အသုံးပြုသူကိုအများဆုံးဖမ်းမိနိုင်သည့်အချက်တစ်ချက်ရှိသည်။
စဉ်းစားရန်၊ ဆင်ခြင်ရန်သို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်ရန်မလိုသောသူများအတွက် Linux သည်မဟုတ်ပါ။
superuser ဖြစ်ဖို့ဒါမှမဟုတ် Firmware အခန်းကိုပြောင်းဖို့ကြောက်တဲ့ android နဲ့လည်းအတူတူပဲ။ သူတို့ဖုန်းဟာ linux သိပ်မတတ်တဲ့လူတွေဖြစ်ပြီးသူတို့လုပ်ဖို့သိပ်ပျင်းရိတယ်။ လူအများစုကသူတို့ကိုင်တွယ်တဲ့အရာတွေကိုမသိတတ်ကြဘူး။ »
ဖြန့်ချိရေးတစ်ခုထက်ပိုသောဤအသုံးပြုသူများအားတိကျစွာရှာဖွေနေသောကြောင့်သင်၏ထင်မြင်ချက်၏ပထမအပိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့လျစ်လျူရှုပါမည်။ အခု၊ ပါမောက္ခ၊ သင်ဖုန်းပြောတဲ့အချိန်မှာ rom ကိုပြောင်းလဲဖို့ပျင်းရိတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ယောက်မသိဘူးလား။ သင်္ချာပညာရှင်တစ်ယောက် Linux မပါဘဲလား။ သင်မည်သည့်ဆေးဝါးများပြုလုပ်သည်ကိုသင်မသိသောကြောင့်ဆရာ ၀ န်ကသင့်အားမသိဘဲဟုသတ်မှတ်ခြင်းမပြုပါ။
ဆောင်းပါး၏ခေါင်းစဉ်သို့ပြန်သွားလျှင်ကျွန်ုပ်၏အမြင်ကိုဥပမာတစ်ခုဖြင့်တင်ပြမည်။ ငါတို့မှာအိမ်နီးချင်း A နှင့်အိမ်နီးချင်း B ရှိတယ်။ A သည်စာပေပါမောက္ခဖြစ်သည်။ B သည်တည်ထောင်ခြင်း၏မန်နေဂျာဖြစ်သည်။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးသည်တူညီသောလစာနှင့်တူညီသောကုန်ကျစရိတ်နီးပါးရှိသည်။ Neighbor A သည် Apple, iDevices, iCloud, iTunes စသည်တို့ကိုအသုံးပြုသည်။ Neighbor B သည် Salfish ပါသည့်စမတ်ဖုန်းကိုအသုံးပြုသည် (သို့မဟုတ်သူတို့စဉ်းစားနိုင်သမျှအခမဲ့သောမိုဘိုင်း operating system) နှင့်ကွန်ပျူတာများပေါ်တွင် Debian သည်အခမဲ့ယာဉ်မောင်းများနှင့်အပြည့်အဝအလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်းနှင့်အတူမူရင်းစီဒီများမှသူ၏တေးဂီတကိုဖြုတ်ပစ်ခြင်းသည် Cloud ကိုအသုံးမပြုခြင်း အရာအားလုံးကို USB ကြိုးဖြင့်လွှဲပြောင်းပါ။ မနက်ဖြန်အစိုးရသည်၎င်း၏အကြမ်းဖက်မှုအာဏာကိုအသုံးပြုပြီးအနီးအနားရှိ A ၏ဓာတ်ပုံများကိုကမ်းခြေပေါ်မှတွေ့ရှိပြီးနေရောင်ကာကွယ်မှုကိုအသုံးမပြုပါကသူသည်အရေပြားနီနေသည်။ ထို့နောက်မည်သို့ဖြစ်မည်ကိုခန့်မှန်းပါ။ အဘယ်အရာကိုမျှလုံးဝဘာမျှမ။
မနက်ဖြန်ကျွန်ုပ်၏လစာကခွင့်ပြုပါက Apple အားလုံးအသုံးပြုမည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ ငါလုပ်ရတာကျေနပ်တယ်၊ သူတို့မှာလှပတဲ့ဒီဇိုင်းရှိတယ်၊ ငါကအများကြီးရွှေ့စရာမလိုပါဘူး။ မိသားစုနှင့်အတူနေထိုင်ခြင်း၊ သစ်ပင်တစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်းအားဖြင့် ROM ကိုပြောင်းလဲဖို့အချိန်ယူနိုင်တယ်။ ငါလိုဂိုကိုဖုံးကွယ်သောအဖုံးကိုသုံးပါလိမ့်မယ်, ရည်မှန်းချက်ကိုပြသရန်မဟုတ်, ဒါကြောင့်ပါပဲ။ ဒါအားလုံးမိုက်မဲ မှန်ပါတယ်၊ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဟာကျွန်တော့်ရဲ့အလယ်တန်းအလုပ်အကိုင်ပါ။ အချို့သောပရိုဂရမ်မာများက ၄ င်းတို့၏ကုဒ်များကိုမထုတ်ပေးရန်လိုင်စင်ထုတ်ပေးရေးကိုစိတ် ၀ င်စားမည်ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ချက်ကိုဖတ်ရှုသူအများစုမှာ၎င်းတို့သည်ဟက်ကာများဟုမကြာခဏဆိုသောကြောင့် terminal ကိုမကြာခဏအသုံးပြုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Heth, ငါစာမျက်နှာတစ်ခုလုံးကိုပြန်ဖွင့်ပြီးပျော်ရွှင်တဲ့မှတ်ချက်ထုတ်ဝေတဲ့အချိန်အထိငါစာလုံးတစ်လုံးလုံးရေးထားပြီးပြီ။ ကောင်းပြီ ... Maxthon ကိုသီးသန့် mode မှာအသုံးပြုခြင်းသည်မှတ်ချက်များထုတ်ဝေမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသလားဆိုတာဘယ်သူ့ကိုမှသိပါသလား။
ဖြစ်သကဲ့သို့, သူတို့ကဒီကျော်တိုက်ခိုက်နေအားလုံးရယ်စရာဖြစ်ကြသည်။ ငါခံစားမိလျှင် (နှင့်ငါ့အခြေအနေကခွင့်ပြုပါ) မနက်ဖြန်ကျွန်ုပ်သည် Apple မှအရာအားလုံးကိုဝယ်ယူပြီး iCloud ကိုပင်အသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်သည်သီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုအမွေမခံနိုင်ကြောင်းသိသောကြောင့် iTunes မှ ၀ ယ်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏အိမ်နီးချင်းသည် Cloud ကိုအသုံးမပြုပါကသူသည် drivers အားလုံးအခမဲ့ပါသော Nexus နှင့် Debian ပေါ်တွင် Salfish ကိုအသုံးပြုသည်။ သူရောကျွန်ုပ်ပါဘဝအရည်အသွေးကောင်းများလည်းမရ၊ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်သည်မိသားစုနှင့်အတူ ROM ကိုတပ်ဆင်ရန် (သို့) သစ်ပင်တစ်ပင်စိုက်ရန်အချိန်ယူခြင်းအတွက်ပိုနှစ်သက်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိဘဲမဆိုလိုပါ။ ဆရာဝန်ကဆေးတွေကိုဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမသိခဲ့ဘူး၊ ဗိသုကာပညာရှင်ကမင်းကိုမသိဘဲလို့ထင်မှတ်သလို၊ ဗိသုကာပညာရှင်ကသင်အလုပ်လုပ်နေတဲ့အဆောက်အအုံရဲ့အစီအစဉ်ကိုနှလုံးသားမှမသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရယ်စရာဖြစ်မနေပါနဲ့
@Isa: ကြည့်လား။ န်ထမ်းသည်သင်၏မှတ်ချက်များအပေါ်ကျွန်ုပ်၏ယခင်တုံ့ပြန်မှုတွင်သင့်အားပြောပြမည့်သူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သည်သူတို့၏အတွေးအခေါ်များကိုအနည်းငယ်မေးခွန်းထုတ်ပြီးစကြာဝtheာသည်ရွေ့လျားနေသည်။ တကယ်တော့၊ ဒီမှတ်ချက်ကိုသင်ချက်ချင်းထားလိုက်ပြီဆိုရင်၊ အလုံခြုံဆုံးကတော့သူဟာသူနဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးမယ်၊ မျှော်လင့်ချက်နဲ့သူ့ကို“ အငြင်းပွားမှုထဲဝင်ဖို့” စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့အရာထောင်ပေါင်းများစွာကိုသူကဆက်လက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးသွားမှာပါ၊ ငါဒီလိုယောက်ျားတွေဆီကမှတ်ချက်တွေတောင်မဖတ်ရသေးဘူး။ ငါအဲဒီလိုလုပ်ဖို့အကြံပေးချင်တယ်၊ မင်းအဲဒီနေရာမှာသူတို့နာမည်တွေတွေ့ရင်သူတို့မှတ်ချက်ရဲ့ပထမစာကြောင်းကိုဖတ်ပါ၊ အရာရာဘယ်မှာသွားမယ်ဆိုတာကြည့်ပါ၊ ရယ်မောပါ၊ လျစ်လျူရှုပါ။
@Isa: မင်းပြောသမျှကိုငါသဘောတူတယ်။ ပြtheနာကမင်းလိုပဲစံသတ်မှတ်ချက်ရှိတဲ့လူနည်းနည်းပဲ။ အခြားသူများကစဉ်းစားရန်ပျင်းရိကြသည်၊ ထို့ကြောင့်ထိုမီးလျှံများထွက်ပေါ်လာခြင်းသည်လူအများစုသည်အဖြေများကိုရှာဖွေရန်နှင့်မှားယွင်းသောသခင်များကိုဝတ်ပြုသောကြောင့်စဉ်းစားရန်နှင့်သူတို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ရန်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့သင် "Master" (ဤအမှု၌ Stallman နှင့်သူ၏စံနမူနာများ) ကိုတို့ထိသောအခါသူတို့သည်အလွန်အံ့အားသင့်သွားကြသည်၊ သဘာဝပါပဲ…
စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတဲ့နှိုင်းယှဉ်ချက်များ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဘယ်သူ့ကိုမှဆေးဝါးတွေဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုမသိဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘယ်သူ့ကိုမှမင်းကိုမသိဘဲမမှတ်မိဘူးဆိုတာပါပဲ။
သို့သော်၎င်းသည်သီးခြားကိစ္စရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥပဒေအရဆေးဝါးများအရကူးစက်ရောဂါကိုတားဆီးရန်ဆေးဝါးများသည်သူတို့၏ပါဝင်ပစ္စည်းများကို (သူတို့စိတ်ဝင်စားမှုနည်းပါးသော်လည်း) ပြရမည်။
ဗိသုကာပညာရှင်နှင့်အတူတူပင်သင်စီမံကိန်းကိုသိရန်မလိုပါ၊ သို့သော်ဥပဒေအရဗိသုကာသည်မြို့ပြကာကွယ်ရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောဥပဒေ၏စည်းမျဉ်းများနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိစေရန်အစီအစဉ်များကိုပြသရန်နှင့်မှတ်တမ်းတင်ထားရမည်။ အဆောက်အ ဦး အတွင်းပိုင်း။
၎င်းသည်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်လွတ်လပ်ခွင့်နှင့်ဆိုင်သောအယူအဆများ၊ အသိအမှတ်ပြုခြင်းများအပေါ် အခြေခံ၍ လိုင်စင်များ၊ ဥပဒေများ၊ ဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ၀ န်ထမ်းများ ငါ Manuel ရဲ့အကြံပေးချက်ကိုကြိုက်တယ်၊ အဲဒါဟာများသောအားဖြင့်အရမ်းအသုံးဝင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီနေ့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုချန်လှပ်ထားလိမ့်မယ်၊ လျစ်လျူရှုသူအဖြစ်အရည်အချင်းပြည့်မှီခြင်းသည်သင်အတွက်မပြောခဲ့ပါ။ ငါဒီမှာမှတ်ချက်ပေးသူတစ် ဦး သတ်သတ်မှတ်မှတ်အသုံးပြုသူအားဖြင့်ငါဖော်ပြခဲ့တဲ့နှင့်ဝမ်းနည်းစွာကအလွန်ကျယ်ပြန့်စိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်။ သင်လိုပဲကွန်ပျူတာကိုဆက်ကပ်အပ်နှံထားခြင်းမရှိသူများကိုလျစ်လျူရှုမထားတတ်တဲ့အသုံးပြုသူများစွာရှိရမယ်။
ပါဝင်ပစ္စည်းများမျှဝေခြင်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ဤဒေသများရှိဘဝသည်အန္တရာယ်ကျရောက်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့နားလည်လာသည်။ အဆောက်အအုံကလဲကျနိုင်တယ်၊ ဆေးကမင်းကိုသတ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် iPhone ဆော့ဖ်ဝဲကမင်းကိုမသတ်နိုင်ပါဘူး။ အဓိကအချက်မှာ Stallman သည်လွတ်လပ်မှုအကြောင်းပြောနေစဉ်တွင်ပြောဆိုသောနောက်ဆုံးအသုံးပြုသူအတွက်ဖြစ်သည်။ Firefox မှ Safari ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်နယူးယောက်တိုင်းမ်စ်ကိုသာ ၀ င်ရောက်သောအသုံးပြုသူကိုမည်သို့အကျိုးပြုသနည်း ၎င်းသည်သင်၏ဘ ၀ အရည်အသွေးကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်မည်မဟုတ်သကဲ့သို့သင်၏“ သင်၏စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းတိုးတက်စေ” သည်မဟုတ်ပါ။
သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုနားလည်သည်နှင့်အမျှသုံးစွဲသူလုံခြုံမှုကိုအာမခံရန်သို့မဟုတ်အခြားတည်ဆောက်သူထံမှကုဒ်များခိုးယူခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်ဖွင့်ထားသင့်သည်။ ဥပမာ - ပိတ်ထားသောဘရောင်ဇာများ၏လုံခြုံရေးနှင့်ပစ္စည်းခိုးယူမှုများကိုကာကွယ်ရန်ကျွန်တော်မဆွေးနွေးလိုပါ၊
သင်၏ထင်မြင်ချက်အချို့တွင် iPhone အတွက်ပေးချေသောသုံးစွဲသူနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်ဖတ်ခဲ့သည်၊ သို့သော်အက်ပဲလ်သည်၎င်းစက်ပေါ်တွင်လွှမ်းမိုးထားဆဲဖြစ်သည်။ အမှန်တရားမှာအသုံးပြုသူသည်သူ၏ iPhone ကိုကျောက်ခင်းလမ်းပေါ်တွင်ပျက်ကျနိုင်သော်လည်း၎င်းအတွက်အာမခံချက်တောင်းခံပိုင်ခွင့်မရှိတော့ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) အားပျက်စီးစေပါကပစ္စည်းတစ်ခုသည်“ ချိုး” နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်တရားဝင်စတိုးဆိုင်ပြင်ပတွင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါက၎င်းသည်သင်အားနည်းနိုင်သည်။ အခြားအရင်းအမြစ်များမှတပ်ဆင်ခြင်းသည်ခိုးကူးမှုကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ဤပလက်ဖောင်းတွင်အရာအားလုံးကိုအခမဲ့ထည့်သွင်းနိုင်သောကြောင့်သုံးစွဲသူတစ် ဦး ထက်ပိုသော Android ကိုရွေးချယ်ထားပါသည်။ ဒါကြောင့်ဒီဘ ၀ ကိုနေ့စဉ်ဘ ၀ အဖြစ်ပြောင်းခြင်းအားဖြင့်တစ်ယောက်ယောက်ကခိုးယူခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုလွတ်လပ်လာသည်။ Highlight - Android သုံးစွဲသူအားလုံးသည်အက်ပလီကေးရှင်းများကိုခိုးယူရန်ကြံစည်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။
ကောင်းပြီ၊ ဥပဒေပြrequire္ဌာန်းရန်အားလုံးသေဖို့မဟုတ်ပါ၊ စည်သွတ်ထားသောအရည်များသည်မည်သူ့ကိုမျှမသတ်ဖြတ်ပါ။ (ကျွန်ုပ်သိသည်အတိုင်း) သို့သော်၎င်းတို့သည်ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုပြသရန်လိုအပ်နေသေးသည်။
ထို့အပြင်နောက်ဆုံးအသုံးပြုသူသည်အလုပ်သမား၊ ဗိသုကာ၊ ဆေးဝါးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်၊ NASA အင်ဂျင်နီယာများ၊ မြောက်ကိုရီးယားသမ္မတအားလုံးသည်သုံးစွဲသူများသာဖြစ်ပြီးအချို့အတွက်မူ ၀ င်ရောက်ရန်အန္တရာယ်နည်းပါးသည်။ နယူးယောက်တိုင်းမ်စ်ဆိုဒ်။
အလားတူစွာ NSA ၏ iPhone တွင် iPhone ကိုအပြည့်အဝအသုံးပြုနိုင်ကြောင်းတရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများလည်းရှိသည်။
ယူကရိန်းနိုင်ငံတွင်ဆန္ဒပြသူများကိုခြေရာခံရန်နှင့်ခြိမ်းခြောက်ရန်ဆဲလ်ဖုန်းနှင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သူတို့ကမမျှတတဲ့သူတွေလို့ခံစားရပြီးထိုက်တန်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတစ်ယောက်ရှိလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့ဟာလူသားတွေဖြစ်ပြီးမိသားစု ၀ င်တစ်ယောက်ဒါမှမဟုတ်ချစ်ရသူတစ် ဦး ကအဓိကရုဏ်းဖြစ်တဲ့အခါပျောက်ကွယ်သွားနိုင်ပြီးအဲဒီပconflictိပက္ခအတွင်းပျောက်ကွယ်သွားတဲ့သူတွေပျောက်ကွယ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခြင်းနှင့်လူသတ်မှုအတွက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့မှာ Free OSs ရှိဆဲလ်ဖုန်းများရှိခဲ့ရင်၊ ဖြစ်ပျက်လာမည့်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသည့်လူမှုကွန်ယက်များကိုအသုံးပြုခဲ့မယ်ဆိုရင် (ငါမသေချာဘူး) ဖြစ်နိုင်သည်။
ငါမကြာသေးမီကဂူထဲရောက်ခဲ့ဖူးလျှင်ဝမ်းနည်းပါသည်၊ သို့သော် Coca-Cola သည်၎င်းပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးကိုလူသိရှင်ကြားဖြစ်စေသည်မဟုတ်လော။ အဖြစ်ဝေးကအဖြစ်။ တကယ့်အဖြစ်မှန်အတွက်ယူသောအခြားမြို့ပြဒဏ္goာရီဖြစ်ခြင်းမသွားနှင့် ...
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် NY Times ဆိုဒ်ကို ၀ င်ဖို့ဘာကြောင့်“ အန or တရာယ်ပိုကြီးသောအန္တရာယ်ရှိ” တာလဲဆိုတာကိုငါနားမလည်ဘူး။ မင်းငါ့ကိုဒီအကြောင်းနည်းနည်းလောက်ပြောပြချင်ပါတယ်
ကုမ္ပဏီတွေကဂရုမစိုက်ဘူးလားဆိုတာကိုတော့မပြောပါဘူး။ ငါသူတို့မှာ ၀ င်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာငါသိတယ်၊ ငါသံသယမဖြစ်ပေမယ့်ငါနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူး။ အစိုးရနှင့်ဆက်သွယ်မှုများကိုအမှန်တကယ်ဖုံးကွယ်ရန်လိုအပ်သူတစ် ဦး ကိုကျွန်ုပ်စဉ်းစားနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာဆန္ဒပြသူများဖြစ်သည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုအီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့်လုံးဝယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်။ Linux kernel မှာ backdoor ကောကောလာဟလရှိတယ်ဆိုတာငါမကြာသေးခင်ကပဲမှတ်မိသေးတယ်။ ဒါမှန်လားမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါသေချာအောင်ပြောရရင်အမေရိကန်အစိုးရ (ရုပ်ရှင်တွေပြထားတဲ့နေရာမှာ P) ကမင်းကိုဖမ်းချင်ရင် ... အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေကိုမသုံးပါနဲ့။
@Isa: Coca-Cola အတွက်ဖော်မြူလာကိုတကယ်မရရှိနိုင်သလို၊ မူပိုင်ခွင့်လည်းမရှိပါ။ Tesla Motors သည် ၄ ​​င်းတို့တီထွင်ထားသောဒုံးပျံနည်းပညာအသစ်အတွက်လည်းအာကာသထဲသို့ပို့လွှတ်လိုက်သည့်အရာအားလုံးကိုလွှတ်တင်ပြီးနောက်လွှတ်တင်ရန်နေရာသို့ပြန်သွားရန်ခွင့်ပြုထားသည်။ သင်ပိုမိုအန္တရာယ်များသောကြောင့်အမှန်တကယ်သတင်းအချက်အလက်ကိုလျှို့ဝှက်နည်းလမ်းဖြင့်လျှို့ဝှက်ထားသောကြောင့် (၂) ခု၏မည်သည့်အရာကိုမဆိုမူပိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်အများပြည်သူထံထုတ်ပေးခြင်းကိုမည်သည့်နည်းနှင့်မျှမပြုလုပ်နိုင်ပါ။ ဟုတ်ကဲ့) သူတို့ဖန်တီးခဲ့သည့်ကုမ္ပဏီများ / အဖွဲ့အစည်းများအတွင်းပိုင်း မှလွဲ၍ မည်သည့်နည်းဖြင့်မျှမဖြန့်ချိနိုင်သည့်အရာများစွာရှိသည်။
ဤသည်မှာကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှကြားသိသောမမှန်ကန်သည့်သတင်းအချက်အလက်သည်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှဖြစ်ရပ်မှန်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်အားမည်သို့ပြောင်းလဲစေကြောင်း၊ တစ်နည်းအားဖြင့်လူတစ် ဦး သည်တစ်စုံတစ်ရာသည်အန္တရာယ်ကင်းသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်မကင်းဟုယူဆရန်သင့်လျော်သည့်ပုံစံကိုမည်သို့ပြုပြင်သည်ကိုဥပမာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အရေးကြီးတာက X software ဟာလုံခြုံတယ်၊ မကင်းဘူးလို့ပြောရင်ဘယ်သူကမှအဲဒါကိုအတည်ပြုနိုင်တဲ့အရာတွေအတွက်သုံးတယ်။
အကယ်၍ သင်သည် Safari မှမည်သည့် site ကိုမဆို ၀ င်ပါက၊ သင်သည် Apple OS တွင်ရှိနေသောကြောင့် (သူတို့အတွက် windows အတွက် Safari တီထွင်မှုပင်မရှိသောကြောင့်) ၎င်းသည်အမေရိကန်အစိုးရ၏အချို့သာဓကများမှရယူသုံးစွဲနိုင်သောထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြောင်းလူသိများသည်။ သင့်အတွက်အန္တရာယ်မရှိဘဲအမေရိကန်၏“ ရန်သူ” အတွက်ဖြစ်သည်၊ သင့် IP သို့မဟုတ် Mac ကိုသိခြင်းကဲ့သို့သောအခြေခံအရာများမှသည်သင်၏အတိအကျတည်နေရာ၊ စကားပြောဆိုမှုများ၊ အဆက်အသွယ်များနှင့်အစီအစဉ်များကိုသိရှိရန်ဖြစ်သည်။
သင်နှင့်မသက်ဆိုင်ကြောင်း၎င်းသည်မည်သူ့ကိုမျှမသက်ဆိုင်ကြောင်းမဆိုလိုပါ။ တကယ်တော့သူတို့နဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့သူတွေကနှစ်ခါပြောဆိုမှုကိုကိုင်တွယ်ရတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့ဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်သူတို့မှာဖုံးကွယ်စရာဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်ကင်မရာနဲ့မိုက်ကရိုဖုန်းတွေတပ်ဆင်ထားတာကိုသူတို့စိတ်ကျေနပ်သင့်တယ်။ သူတို့၏ရေချိုးခန်းများ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းမှာဖုံးကွယ်ထားနိုင်တဲ့လက်နက်တွေ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေမရှိလို့ပဲ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏သက်တောင့်သက်သာရှိသည့်နေရာတွင်နေထိုင်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားမည်သည့်အခါမျှကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုထင်မြင်ကြသော်လည်း၊ ပြည်သူလူထု၏လွတ်လပ်ခွင့်ကိုဤနည်းများဖြင့်ချိုးဖောက်ခံထားရသောနိုင်ငံများရှိပြီးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ထိုဥပဒေများကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဆင့်တွင်ပြဌာန်းရန်အရေးကြီးသည်။ ငါတို့သို့မဟုတ်အခြားမည်သူမဆိုဖြစ်ပျက်မတိုင်မီအရာ၏။
ငါသည်လည်းသင်တို့ကိုသဘောတူသည်။ မည်သည့်ကိရိယာမှမမှားယွင်းနိုင်ကြောင်း၊ သို့သော်၎င်းသည်ရှုံးနိမ့်သူအတွေးများအတွက်အကြောင်းပြချက်မဟုတ်ပါ၊ အကယ်၍ သင်မနှစ်သက်ပါကအရောင်ရှိသူများအား "သင်ဘာမှမပြောင်းလဲတော့ဘူး" ဟူ၍လည်း ပြောခဲ့သည် ဂူထဲ၌နေပါ။ "သို့သော်အရာများသည်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်ဟုသမိုင်းကဖော်ပြသည်။
ကိုကာကိုလာဟာငါဆွေးနွေးနိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။ ဆရာတွေဆီကကျွန်တော်သိခဲ့ပေမဲ့သူတို့ဟာအရူးအမူးဖြစ်နေဆဲပဲ၊ ငါသာတစ်ခုတည်းထက်ပိုသော၎င်း၏ "ပါဝင်ပစ္စည်းများ" ဝေမျှဖို့တာဝန်ရှိသည်မဟုတ်ကြောင်းသင်သာအာမခံနိုင်ပါတယ်။
ယူအက်စ်ကိုရန်သူဖြစ်ရတာတော်တော်လေးလွယ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဟေး၊ မင်းရဲ့စကားစမြည်ဝိုင်းကမင်းကိုဗုံးစိုက်ဖို့မရည်ရွယ်ဘူးဆိုတာထုတ်ဖေါ်ပြမယ်ဆိုရင်ကာကွယ်ရေးဘက်ကိုပိုလိုလားမလား။ စိုးရိမ်ပူပန်သူများသည်ဖုံးကွယ်စရာတစ်ခုခုရှိသည်၊ အမှားအမှန်နှင့်ဆက်စပ်မှုကို ၀ င်ရောက်ခြင်း၌သင်ဖုံးကွယ်ရန်တစ်ခုခုရှိပါကသင်၏ရည်ရွယ်ချက်သည်ကောင်းကောင်းဖြစ်လာနိုင်သည်။ အစိုးရထံမှထွက်ပြေးရန်အကြောင်းပြချက်ကောင်းများကိုကျွန်ုပ်စဉ်းစားရန်ခဲယဉ်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်မွေးဖွားခဲ့သောတိုင်းပြည် (တာကော့နှင့်ဂွာကလာ) တို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်း စား၍ ပြောခြင်းကပြောပါသည်။ အိမ်မှာကင်မရာတွေတောင်မှခွင့်မပြုချင်ဘူး (ရေချိုးခန်းထဲမှာမဟုတ်ဘူး။ ) ဒီနေ့ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာမသိဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ Eagle Eye လိုပဲအရမ်းအံ့သြစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်သို့ရောက်သွားပြီလို့ငါထင်တယ်။ သို့မဟုတ်သင်၏ဝဘ်ဆိုက်သမိုင်းကိုအာဖရိကန်များ၏ကျွန်ပြုမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ အစိုးရကသင်၏လွတ်လပ်မှုကိုမသိမ်းဆည်းသရွေ့မည်သည့်အရာမျှချိုးဖောက်ခြင်းမရှိပါ။
PS: အကယ်၍ အစိုးရဆီသို့ဒေတာလွှဲပြောင်းခြင်းကိုကျွန်ုပ်၏ဒေတာအစီအစဉ်ကိုသုံးပြီးမှလုပ်လျှင်၎င်းကကျွန်ုပ်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေလိမ့်မည်။
ဥပဒေအရ၎င်းတို့အား၎င်းတို့ကိုမူပိုင်ခွင့်အတွက်တင်ပြရမည်။ အကယ်၍ ၎င်းတို့ကိုတင်ပြခြင်းမပြုလျှင်၎င်းအား၎င်းတို့အားပေးအပ်ခြင်းခံရမည်မဟုတ်ပေ။ ထို့အပြင်၎င်းတို့သည်တူညီသောဥပဒေအရအကာအကွယ်မရရှိလျှင်၊ အခြားသူတစ် ဦး ဦး ကမူပိုင်ခွင့်နှင့်အမြတ်အစွန်းအားလုံးကိုရယူနိုင်သည့်ထုတ်ကုန်တစ်ခုတည်းကိုထုတ်လုပ်ရန်စီမံထားလျှင်သို့မဟုတ် အခြားထုတ်ကုန်များကိုစံနှင့်မကိုက်ညီကြောင်းတွေ့ရှိပါကအခြားပြproblemsနာများနှင့်ရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မည်။
ငါ "အန္တရာယ်" ၏အလွန်အစွန်းရောက်သည့်ခရီး၌ကွန်ပျူတာနှင့်ကွန်ပျူတာကိုအသုံးပြုရန်အတွက်၎င်းသည်လူသေများသို့မဟုတ်ပျောက်ကွယ်သွားသည့်အဖြစ်အပျက်များရှိခဲ့သည့်အတိုင်းကြည့်ရှုရန်အတွက်ငါနှင့်အတူလိုက်ပါခဲ့သော်လည်းထိုအရာကိုပြောရန်မှာထိုက်တန်သည်ဟုငါထင်သည်။ ကွန်ပျူတာ၏လုံခြုံရေးနှင့်အန္တရာယ်များသည်၎င်းသည်လူတစ် ဦး ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသမာဓိနှင့် ပတ်သက်၍ မဟုတ်ဘဲ software အင်ဂျင်နီယာကကျွန်ုပ်တို့အားမှတ်သားထားသောအရာ၊ လျှို့ဝှက်ခြင်းနှင့်အချက်အလက်သမာဓိ၊ စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထား၊ ရရှိနိုင်မှုစသည်တို့ဖြစ်သည်။
၎င်းကိုစိတ်ထဲ ထား၍ software သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမည်သို့ဖြစ်လာသည်ကိုမြင်လျှင်၊ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ၏အတွေးအခေါ်သည်ပေါ်ပေါက်လာပြီးဖြစ်သောလူ့အခွင့်အရေးဆွေးနွေးမှုများတွင်ပါဝင်ပြီး၎င်းကိုတရားဝင်ဥပဒေမူဘောင်တစ်ခုပေးရန်ဖြစ်သည်။
သင်၌ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအခွင့်အရေးရှိကြောင်းသိရန်ကိစ္စဖြစ်သည်၊ တစ်စုံတစ် ဦး ကဂရုမစိုက်သော်လည်းအခြားသူများကိုသူလျှိုလုပ်စရာမလိုပါ။ (သင်၏အက္ခရာများကိုဖွင့ ်၍ သင်၏ WhatsApp စာတိုများကိုဖတ်ရန်) ။
မင်းမှာအပြစ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ယူဆချက်ကိုပိုင်ခွင့်ရှိတယ်၊ တစ်ယောက်ယောက်ကဂရုမစိုက်ပေမဲ့မင်းကိုသူတို့ကိုသူတို့ရဲ့သူတစ်ပါးအတွက်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသံသယဖြစ်စေတဲ့အရာတခုခုရှိတာကြောင့်မင်းကိုသူတို့ကိုသက်သေအထောက်အထားမရှိဘဲအကြမ်းဖက်သူ၊ သူတို့အိမ်ကိုရှာရန်အမိန့်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးသည်၊ ဖုန်းများပာနှင့်သူတို့လိုချင်သမျှကိုအမြဲတမ်းလိုပဲ။
ထို့ကြောင့်သင်၏အခွင့်အရေးကိုလေးစားသောဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဘ ၀ အရည်အသွေးမရရန်သို့မဟုတ်လူသားဆန်စွာတိုးတက်ရန်မဟုတ်ပါ။ (ရေရှည်တွင်၎င်းသည်၎င်းကိုအောင်မြင်ရန်သင်ကူညီလိမ့်မည်၊ သို့သော်၎င်းသည်နောက်ထပ်ပြissueနာတစ်ခုဖြစ်သည်) သို့သော်၎င်းသည် လူ့အခွင့်အရေး
အကယ်၍ တစ်စုံတစ် ဦး ကစိတ် ၀ င်စားမှုမရှိ၊ စိတ်ဝင်စားသည်ဖြစ်စေ၊ ဘာလဲဆိုတာမသိလျှင်၎င်းသည်သူတို့၏ထင်မြင်ချက်ဖြစ်သည်။ ထို့အတူသင့်ကိုသင်ပြောသကဲ့သို့မည်သူမျှသင့်ကိုမသိဘဲမခေါ်သင့်ပါ၊ လျစ်လျူရှုမခံလိုသူကိုလျစ်လျူရှုလျှင်ရယ်စရာကောင်းသောသူများကိုခေါ်ပါ။
သင်ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်သင်ကိုယ်တိုင်အတည်ပြုရန်နှင့်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းကိုမည်သူမျှရောင်းချခြင်းမပြုရန်မူပိုင်ခွင့်ကိုမလိုချင်ပါကစီးပွားဖြစ်ရောင်းဝယ်ရန်တာ ၀ န်မရှိပါ။ အကယ်၍ တံခါးပိတ် / ပွင့်လင်း / အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲအကြားကွာခြားချက်သည်လုံခြုံရေးနှင့်အန္တရာယ်များကိုမသက်ရောက်ပါက၊ ကွန်ပြူတာနယ်ပယ်၌သာထိခိုက်မှုရှိလျှင်၎င်းသည်ဆက်စပ်မှုကိုလျော့ကျစေသည်။ "အချက်အလက်သမာဓိရှိခြင်းနှင့်လျှို့ဝှက်ခြင်း၊ စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်း၊ ရရှိနိုင်မှု" စသည့်အရာများသည်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအတွေးအခေါ်ကိုနက်နက်နဲနဲဖော်ပြရန်ကြိုးပမ်းမှုသာဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့၏စာများကိုဖတ်ရှုခြင်းကိုမလိုလားကြပါ။ ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့သည်ယခုစက်ရုပ်များသို့မဟုတ်အခြားအရာများဖြစ်သောကြောင့်လူများသည်တစ်နေ့လုံးတွစ်တာ / ဖေ့စ်ဘွတ်တွင်အချိန်ဖြုန်းခြင်းကိုသာနှစ်သက်ကြသည်။ နက်ရှိုင်းတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ဝန်ခံပါသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်အလွန်ဝေးကွာသောခရီးကိုမသွားခဲ့ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်အကြိမ်အနည်းငယ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလေယာဉ်တစ်စင်းကိုအသုံးပြုရန်ကျိုးနပ်ပါသည်၊ သင့်ကိုစိတ်ချပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ခရီးဆောင်အိတ်များကိုသူတို့လေ့လာသောကြောင့်ကျွန်ုပ်မနှောင့်ယှက်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့နဲ့အတူမဟုတ်ဘဲခရီးသည်အားလုံးနဲ့ပါ။ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုအသုံးပြုခြင်းကသင့်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုလေးစားတယ်လို့ပြောတယ်၊ ဒါကြောင့်စီးပွားဖြစ်ဆော့ဗ်ဝဲကိုသုံးတာကလုံး ၀ လုံးလုံးလျားလျားမဟုတ်ဘဲလေဆိပ်ကမင်းရဲ့အခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်တာလား။ ရေရှည်မှာတောင်မှအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုအသုံးပြုခြင်းကသင့်ကိုပိုကောင်းတဲ့လူသားဖြစ်အောင်ကူညီလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့သင်ကိုလျစ်လျူရှုမိလိမ့်မယ်။
ငါမသိဘဲဟုခေါ်ခံရခြင်းခံရမည်ကိုစိုးရိမ်သည်။ ငါပထမ ဦး ဆုံးမှတ်ချက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့မာနထောင်လွှားထက်ငါ Linux အကြောင်းအများကြီးပိုသိသေချာပါတယ်။ ငါသူ့ကိုပိုသိပေမယ့်အဓိကအချက်က Linux ကိုသုံးပြီး Stallman နဲ့သူ့စံနမူနာတွေရဲ့နောက်လိုက်ဖြစ်ဟန်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်အခုဆိုရင်သင့်ရဲ့ဗဟုသုတကိုသာလွန်သည်ဟုသင်ခံစားရသည်။ ထိုဝန်ထမ်းကိုရယ်စရာဟုခေါ်သည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်ရိုးရှင်းသည့်အယူအဆတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ငါတို့ရှိသမျှသည် PRIVATIVE ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) ကိုအခမဲ့အသုံးပြုသည်နည်းတူသင်၏လွတ်လပ်မှုသည်အမြင့်ဆုံးသို့ရောက်မည်ကိုစိုးရိမ်ရန်သင်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ သို့သော် "လုံခြုံရေး" အလွန်လိုချင်ခြင်းကကျွန်ုပ်တို့ထက်ပိုမိုလွတ်လပ်သည်ဟုသင်မပြောနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်သင်၏အကြံဥာဏ်သည်ရိုးရှင်းပြီးအငြင်းပွားစရာများမရှိလျှင်သင့်ကိုရယ်စရာဟုကျွန်ုပ်ထင်မြင်နိုင်သည်။ (ကျွန်ုပ်တို့မသိခဲ့ပါ၊ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သလိုပင်၊ ကျွန်ုပ်တို့လူသားများအတွက်အထူးတီထွင်မှုအတွက်) သင်နှစ် ဦး စလုံးသည်ကျွန်ုပ်စိတ်ကူးရှိမရှိကိုသင်လွတ်လပ်စွာစဉ်းစားနိုင်သည်။ မင်းပုံလို
"Rto / libre NOS * သည်လုံခြုံရေးနှင့်အန္တရာယ်များကိုသက်ရောက်သည်။ " တောင်းပန်ပါတယ်
ကျွန်တော်ဟာစက်ရုပ်တွေဖြစ်လို့၊ Facebook ကိုသာကြည့်လို့မရဘူးဆိုတာကျွန်တော်တစ်ခါမှမပြောပါဘူး။ လူအများအပြား၏အလုပ်ကိုကား၊ ကွန်ပျူတာ၊ ဓာတ်ခွဲခန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
လေဆိပ်နှင့်အတူ, အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက် privacy ကိုချိုးဖောက်, အခွင့်အာဏာကဝန်ခံနှင့်သူတို့အနည်းဆုံးထိုးဖောက်အစီအမံရှာပေမယ့်သင်စစ်ဆေးမှုကိုငြင်းဆန်လျှင်, အခွင့်အာဏာကိုသင်တို့ကိုအတင်းအကျပ်မပြုသင့်, သူတို့ကသင်ရိုးရိုးလေယာဉ်ပေါ်သို့ခွင့်မပြုပေမယ့်ကြောင့်ဖြစ်သည် သူတို့သည် ၀ င်ခွင့်အခွင့်အရေးကိုယူထားသည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ်များကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏လွတ်လပ်မှုမဟုတ်ပါ။
ဒါဟာသင်နှင့်တိုင်ပင်ခြင်းမရှိဘဲတစ်စုံတစ် ဦး ကသင့်အားသူ၏အိမ်သို့ ၀ င်ရန်သင့်အားခွင့်ပြုရန်သင့်အားတောင်းဆိုသူသည်သင့်ကိုအိမ်သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာသို့သွားရန်အကြောင်းသည်အလွန်ကွဲပြားသည်။
ကျွန်ုပ်၏အသိပညာသည်သာလွန်သည်ဟုသင်ထင်ကြောင်းသင်ဘယ်ကိုရောက်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ကျွန်တော်ပထမ ဦး ဆုံးပြောခဲ့တာကသူမလေ့ကျင့်ထားတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမသိတဲ့သူကိုဘယ်သူမှမလုပ်သင့်ဘူးလို့ငါပြောခဲ့တာ။
ဒါပေမယ့်အဲဒီလိုပဲငါလေ့လာတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထင်မြင်ချက်ရှိသူကိုဘယ်သူမှလျှော့မတွက်သင့်ဘူး၊ အဲဒါကကိုင်တွယ်တဲ့အယူအဆတွေကိုနားမလည်တာ၊ ဒါမှမဟုတ်အရေးမကြီးဘူးလို့ပဲ။
ကျွန်တော်ဟာသင်္ချာဘလော့ဂ်ကိုသွားပြီးပြောတာက "၄ ခုက ၃ ခုကိုကိုယ်စားပြုတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်သူကမှမကောင်းတဲ့ပမာဏအတွက်မသေရင်သူတို့ဟာဂဏန်းအတွက်အရေးပါမှုအများကြီးပေးတာကြောင့်ရယ်စရာလို့ခေါ်တယ်။ "
ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူပါပဲ၊ လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလွတ်လပ်စွာဆော့ (ဖ်) ဝဲမှတိုးမြှင့်ပေးတဲ့လွတ်လပ်မှုနဲ့ရှုပ်ထွေးမယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူး၊ ဘယ်နေရာမှာမှရောက်မှာမဟုတ်ဘူး၊ သူတို့ကသစ်တော်သီးနဲ့ပန်းသီးတွေပါ။
အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်ဟန်ဆောင်။ အခြေအမြစ်မရှိဟုသင်ယူဆပါကကောင်းသည်။
ဆိုလိုသည်မှာသူမ၏ကိုယ်စားကိုယ်စားပြုသူမှာဟားဗတ်ဘွဲ့ရဖြစ်ပြီး၊ တိုက်ကြီးအတော်များများတွင်အသိအမှတ်ပြုခံရခြင်းသည်သင်နှင့်ကျွန်ုပ်ထက်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးပိုရှိသည်။ ၎င်းသည်သူသာမဟုတ်ပါ၊ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံလောကတွင်နှင့်လေးစားခံရသူများစွာရှိသည်။ တူညီသောအတွေးအမြင်ရှိသောနိုင်ငံရေး၊ မြို့များနှင့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးသည်ထိုအခြေခံမူများနှင့်အညီလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ဥပဒေများအားနည်းနည်းပြုပြင်ပြောင်းလဲကြသည်။ ဤအရာအားလုံးသည်တကယ့်ဒေတာနှင့်ရည်ရွယ်ချက်အခြေခံဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှု၊ ယုတ္တိဗေဒနှင့် Ockham ၏သင်တုန်းပင်ကကျွန်ုပ်သည်ထိုလူများကိုပိုမိုအာရုံစိုက်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်သည်သူ၏အတွေးအခေါ်များကိုလူထုမီဒီယာတွင်ဖမ်းယူပြီးသက်သေမပါဘဲရှုတ်ချဂုဏ်ဖျက်ခြင်း၊ လိမ်လည်ခြင်း၊ ထင်မြင်ယူဆချက်များဖြင့်အခြေပြုရန်ကြိုးစားပါကအခြားသတင်းအချက်အလက်များကိုမှားယွင်းသောသတင်းအချက်အလက်ကိုရှောင်ရှားရန်တစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်စွန့်ပစ်ရန်ကြိုးစားသည်။
ဆာဂျီယို ဘင်နီတက်ဇ် ဟုသူကပြောသည်
ကျနော့်ရဲ့နှိမ့်ချတဲ့အမြင်မှာ၊ မင်းကအဆုံးမှာတော့ပိုကောင်းလာမယ်၊ စနစ်အမျိုးမျိုးရှိတယ်၊ ငါတို့တစ်ယောက်ချင်းစီကငါတို့လိုချင်တာကိုရွေးချယ်နိုင်တယ်၊ ငါ ios နဲ့မကိုက်ညီပါဘူး၊ အမှန်တရားကတော့အရမ်းရှုပ်ထွေးတယ် ငါ့အတွက်၊ ငါကငါ android နဲ့အတူရှိနေတယ်။ မင်းမှာ adroid ကိုမသုံးသင့်တဲ့အကြောင်းပြချက်တွေရှိရမယ်။
Sergio Benitez အားပြန်ပြောပါ
ဤမှတ်ချက်ကို @ 1 Sergio မှ +XNUMX
ငါတို့အရမ်းနက်ရှိုင်းချင်တယ်ဆိုရင်။ လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ မီဒီယာနှင့်သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့အားပုံသွင်းပေးသောကြောင့်လွတ်လပ်မှုသည်မတည်ရှိပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့“ ဖြစ်ရပ်များ” ကသင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုပုံသွင်းပေးလို့ပါ။ ဒါဟာနှိမ့်ချမှတ်ချက်ပေးသည်။ 😀
Excellent ကဆောင်းပါး Manuel Escudero
ငါပရိုဂရမ်လောကမှာအသစ်ဖြစ်နေတယ်၊ ​​ငါပရိုဂရမ်လုပ်တဲ့အခါငါလုပ်နိုင်တာအားလုံးကိုနားလည်တယ် !! အခမဲ့ဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်မဖြစ်ခြင်းသည်အသုံးပြုသူကိုအမြဲတမ်းထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိထောင်နှင့်ချီသောလူများသည်စနစ်များကိုအသုံးပြုကြပြီးမျက်နှာပြင်၏နောက်ကွယ်တွင်ဘာတွေဖြစ်နေသည်ကိုမသိကြပါ။ အရာအားလုံးသည်သတင်းအချက်အလက်များကို ((ပိုကောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ ပိုဆိုးသည်ဖြစ်စေ) မည်သို့မည်ပုံအသုံးပြုသည်နှင့်အညီဖြစ်သည်။
@MIKE: ဟုတ်တယ်။ ပိုကောင်းမယ်၊ ပိုဆိုးဘို့ကတော့အဲဒါအားလုံးရဲ့အချက်ပဲ။ ဒါပေမယ့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သင်ဆောင်းပါးဖတ်ဖို့အချိန်ယူပြီးအခြားမှတ်ချက်များမှာတွေ့ရတာကောင်းတယ်။
Rutilio Carrastrapio ဟုသူကပြောသည်
ငါဆောင်းပါးကိုသေချာစွာဖတ်ပြီးပြီ။ သင်မျှဝေထားသောသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူသင်တန်းတူထားသောလွတ်လပ်မှုသဘောတရားများသည်ကွဲပြားသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ရန်လုံလောက်သည်။ Richard Stallman နှင့်သူ၏အစွန်းရောက်သဘောထားအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့သဘောမတူနိုင်သော်လည်းသူ၏အတွေးအခေါ်များသည်မခိုင်လုံသော hippie ဖြစ်ရုံသာမကအမှန်တကယ်အားအသေးစိတ်လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းသာဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ကျနော့်အမြင်အရ Stallman ၏လွတ်လပ်မှုသည်သင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်သဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားသောပရိုဂရမ်မာ / ကုမ္ပဏီသို့သင်ပေးအပ်ထားသောအခွင့်အရေးများကိုလွှဲပြောင်းခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ ပထမဆုံးအကြံဥာဏ်ကိုထည့်ပါ။ Apple ကသင်၏လိုင်စင်ကိုလက်ခံရန်သင့်အားအီးမေးလ်သို့စာရွက်စာတမ်းအပြည့်အစုံပို့ပေးသည်။ အကယ်၍ သင်သည်လိုင်စင်ကိုငြင်းပယ်ပါကဝယ်ယူထားသောဟာ့ဒ်ဝဲမည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။ ငါအများကြီးမရှာခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဘယ်သူ့ကိုမှနှိပ်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကိုမတွေ့မိဘူး။ လက်မခံဘူး။ သင်ထိုလွတ်လပ်မှုကိုကျင့်သုံးပါက ကျေးဇူးပြု၍ မျှဝေပါ။
ယခုတွင်သင်သည်အသုံးပြုသူလွတ်လပ်မှုကိုလိုင်စင်များတွင်တွေ့မြင်ရပြီး“ သုံးစွဲသူများ၏လွတ်လပ်မှုအတွက်ရပ်ရွာလူထု၏ကြိုးပမ်းမှုအပေါ် အခြေခံ၍ တံခါးပိတ်ဖြစ်ထွန်းမှုများကိုပွင့်လင်းစွာခွင့်ပြုသည်။ ” သုံးစွဲသူသည်ပိတ်ထားသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိခြင်းမှမည်သို့အကျိုးပြုသည်ကိုကျွန်ုပ်နားမလည်ပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်နှင့်မိုက်ခရိုဆော့တို့၏မှားယွင်းမှုနှင့်အလွန်ဆင်တူသည် - ၄ င်းတို့၏ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်၎င်းကိုမသိသောကြောင့်ပိုမိုလုံခြုံမှုရှိသည်။ တစ်ယောက်ယောက်ကမင်းအတွက်အရာရာတိုင်းကိုဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့အတွေ့အကြုံကိုဘာကြောင့်တိုးတက်စေတာလဲငါနားမလည်ဘူး။
တတိယ။ developer များရဲ့ ego ဆိုတဲ့မေးခွန်းကသူတို့မမျှဝေတဲ့ code ကိုကျွေးရင်ပိုပိုပြီးကြီးထွားလာလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်နှင့်အခြားမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းပြောရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းနှင့်အတူကစားပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စီးပွားရေးကိုကြည့်ရှုပါက၎င်းသည်အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်သည်များစွာသောလူတို့၏အလုပ်ကိုသင့်လျော်စွာပြုလုပ်နိုင်သည်၊ ရောင်းရန်နှင့်သင်၏အိတ်ကပ်များကိုကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ လိုင်စင်ကသင့်ကိုဒီလွတ်လပ်မှုကိုပေးတာသေချာပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် code ကိုပိတ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်သင်ကအသိုင်းအဝိုင်းကိုပြန်မပေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့်သင်ကိုယ်တိုင်နဲ့ဒီဟာကအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံတိုးတက်ပုံကိုကျွန်တော်မတွေ့ရပါ။ Developer ရဲ့အတွေ့အကြုံကအကောင်းဆုံးဖြစ်လို့အရာအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ဖို့စဉ်းစားတာဟာကျွန်တော့်အတွက်အကောင်းဆုံးအသံပါပဲ။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အက်ပဲလ်ကသင်၏ application ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်နှင့်အရာအချို့ကိုပိတ်ဆို့ရန်ခွင့်ပြုခြင်းသည်လွတ်လပ်မှုအကြောင်းသေချာပေါက်ပြောစရာမလိုပါ၊ Android terminal နဲ့ iPhone ကိုလွတ်လပ်မှုကိုရှာဖွေခြင်းနဲ့နှိုင်းယှဉ်တာက Franco နဲ့ Mussolini ကိုဒီမိုကရေစီရဖို့နှိုင်းယှဉ်တာနဲ့တူတယ်။
Rutilio Carrastrapio အားပြန်ပြောပါ
@Rutilio: မင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုငါလေးစားတယ်။ စာမူကိုမင်းဖတ်ပြီးပြီဆိုရင်ငါတို့ထင်မြင်ချက်ကိုထပ်တူထပ်မံအတည်ပြုဖို့မင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပြန်ပြောစရာတောင်မလိုပါဘူး။ ငါသာဖြည့်စွက်ချင်: Apple ကဘာတွားတတ်? Stallman's လိုအတွေးအခေါ်တွေကိုခံယူသူတွေကမဖြစ်ပျက်တဲ့အရာတွေအကြောင်းပြောတတ်ကြတယ်။ Apple ကသင်၏ terminal ကိုခြေရာခံသည်။ သင် ၀ ယ်သည့်အခါအမှားမှတ်တမ်းများကိုယ်တိုင်ကိုရည်ညွှန်းသည့် "အသုံးပြုမှုသတင်းအချက်အလက်" ကိုသင်ပို့လို၊ မလို (သို့မဟုတ်မလိုချင်သည်) ကိုဆုံးဖြတ်သည်၊ အသုံးပြုသောပထဝီနေရာချထားမှုအက်ပလီကေးရှင်းသည်သင်၏ပထဝီဝင်တည်နေရာရှိသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် "Apple tracking" နှင့်အနီးကပ်ဆုံးဖြစ်ပြီးသင်ဤမှတ်တမ်းများကိုပို့လို၊ မပို့လိုသည်ကိုသင်ဆုံးဖြတ်ပြီး၊ သင့်တည်နေရာကိုသူတို့သယ်ဆောင်နိုင်သည့်ကိစ္စပေါ် မူတည်၍ သင့်အားရှင်းပြသည်။ အလားတူအရာတစ်ခုသည် android တွင်ဖြစ်ပျက်သည်၊ သို့သော်သင်၏ဂူးဂဲလ်ကိုခြေရာခံခြင်းကိုသင်ဖွင့်ထားခြင်းရှိ၊ မရှိမပြုလုပ်မှီ၊ သင်၏အကြိုက်များကိုမဖြည့်စွက်မှီတိုင်အောင်၎င်းသည် (ကျပန်း "ကျပန်း" ကိုလက်ခံခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုစတင်အသက်သွင်းခြင်း) သည်မသေချာပါ။ ဒီနည်းကဂူးဂဲလ် (သို့) အက်ပဲလ်ကသင့်ကိုခြေရာခံနေသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်က၎င်းကိုအပြည့်အဝသတိပြုမိသောကြောင့် (ကောင်းစွာမဟုတ်ဘဲ Android အတွက်လုံးလုံးမဟုတ်) မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆိုဤလုပ်ဆောင်မှုများကိုသင်ပိတ်နိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းကိုတစ်စုံတစ်ယောက်ကခြေရာခံမိလျှင်၎င်းသည်အော်ပရေတာ၊ နည်းပညာကုမ္ပဏီများဖြစ်သည် (ငါဤသို့ပြောရန်စိတ်မကောင်းပါ၊ သင်၏ရေးသားပုံကိုကြည့်။ သင်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထိုက်သည်ဟုမထင်ပါ။ )
Android မှ iOS သို့… ကျွန်တော့်အမေ: /
အစပြုပြီးမျှမျှတတဖြစ်စေရန်သင်သည်အဆင့်မြင့် Android စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် iPhone နှင့်ဆင်တူသည်ကိုကြိုးစားသင့်သည်၊ ထို့နောက်အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုသင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။
ငါ iOS Apps များကိုမတွေ့ရသေးပါ၊ အကြောင်းမှာ Apple နှင့်၎င်း၏ဂေဟစနစ်အပေါ်အနိမ့်ဆုံးစိတ်မ ၀ င်စားခြင်း၊ စိတ်မ ၀ င်စားသောဆက်သွယ်မှုနှင့်ငွေကုန်ကြေးကျများစွာပေးဆပ်ရန်မလိုသောကြောင့် Android Apps များသည်ကောင်းသည်။ , ဒါပေမယ့်ဒါဟာအလွန်အကျွံငါ့အာရုံကိုဖမ်းမိသောအရာတစ်ခုခုသည်မဟုတ်။
ဒါပေမယ့်လူတိုင်းကသူတို့လုပ်ချင်တာကိုလုပ်ကြတယ်။ သတင်းတွေပျက်သွားတဲ့အခါမင်းဘာထင်လဲဆိုတာမင်းတို့တွေ့ရလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့အက်ပဲလ်၊ ၎င်းရဲ့ဂေဟစနစ်နဲ့ထုတ်ကုန်တွေရဲ့ဆိုးကျိုးကိုမြင်ရလိမ့်မယ်။
သင်သည် MS WOS, IOS သို့မဟုတ် OSX အသုံးပြုရန်အခမဲ့ဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည် LINUX မှဖြစ်ပြီးအထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအရာတစ်ခုမှာ Android မဟုတ်၊ LINUX ဖြစ်သည်။
IOS မှာသင်ပိုမိုလွတ်လပ်မှုခံစားရသည်၊ သင်ရေးသည်နှင့်အညီ Android ၌ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ၊ ၎င်းသည်စျေးပိုကြီးလျှင်ပင်ထောင်မှထွက်ခွာနိုင်သည်။ FSF တွင်ပင်၎င်း၏ပုံစံများတွင်တပ်ဆင်နိုင်သောကိုယ်ပိုင် REPLICANT မူကွဲရှိသည်။
သင်၏ IOS ကိရိယာတွင်အခြားမည်သည့်အရာကိုမဆိုတပ်ဆင်။ မရပါ -
ထောင်ထဲမှာအပြင်မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ခံစားနိုင်တဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ အနည်းဆုံးလုပ်ခလစာအနည်းဆုံး ၂ ခုမှာအလုပ်လုပ်ရတာထက်ပိုပြီးအချိန်ပိုရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အရပ်သားလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဖိုရမ်တစ်ခုမှာတော့သူတို့ဟာပြည်သူတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုဖိုရမ်မှာပါဝင်လိမ့်မယ်လို့မထင်ပါဘူး။ မင်းဟာယွန်းတွေပိုလွတ်သွားတာနဲ့ဆောင်းပါးတပုဒ်ရေးခွင့်ပြုပါ။
Linux လောကတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်လွတ်လပ်စွာ LIBERTICIDAS များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဖိုရမ်များတွင်ရေးသားခွင့်ပြုခဲ့သည်